ကျနော့်သူနာပြုဆရာမလေး <achitthatkatoe.net မှကူးယူသည်.>
thinzar on Tue Mar 15, 2011 1:19 am
ပုံမှန်နွေဖက်ဆိုခပ်စိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်နေတတ်တဲ့ကျနော်တို.မြို.လေးမှာတောင် တော်တော်သိသာလာတယ်ဗျ။ သင်္ကြန်လွန်သွားတာနဲ.ကော့နေအောင်ကိုပူလာတာ။ အဲ့ဒီအပူလှိုင်းဖြတ်တဲ့ကိစ္စကြောင့်
ကျနော်ခင်ဗျားတို.ကိုခုပြောပြမယ့်ဇတ်လမ်းကဖြစ်လာတာလေ။ အပူဒဏ် ဘယ်လောက်ပြင်းသလဲဆိုရင်ခါတိုင်း ရွာရိုးကိုးပေါက်လျှောက်သွားနေတတ်တဲ့ ကျနော်တို.ရပ်ကွက်ထဲက အဟန်ရှုပ်ဆို
တဲ့တရုတ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ကိုရွှေဘတစ်ယောက်တောင်မနက်စောစောနံပြားရိုက်ပီးတာနဲ.ရပ်ကွက်စာကြည့်တိုက်က ရှုမ၀မဂ္ဂဇင်းအဟောင်းလေး၃-၄အုပ်လောက်ဆွဲပီးရပ်ကွက်ထိပ်ကအရိပ်
ကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲလစ်တော့တာပဲဗျ။အပူရှောင်တာပေါ့လေ။ မေးလိုက်ရင်တော့..ဟကောင်ရ!! ဘုရားရိပ်တရားရိပ်ဆိုတာကဆိုပီး အာလူးတွေဖုတ်ပြလိမ့်မယ်။ အမှန်ကဒင်းဘုန်းကြီး
လိုက်လို.။ အဲ့လိုနေရထိုင်ရခက်တဲ့ရာသီဥတုနဲ.စိတ်ပျက်စရာကောင်းရတဲ့အထဲပြဿနာတစ်ခုက ကျနော့်ဆီအလိုလိုရောက်လာပါလေရောလား။
ကျနော့်ဖေဖေရဲ.ဘကြီးဆိုလားတော်စပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ကျနော်နဲ.ဆို အဘိုး တော်မယ်ထင်ပါရဲ. အဲ့ဒီဆရာသမားကဗမာပြေအလယ်ပိုင်းက မြေလတ်မြို.တစ်မြို.မှာအခြေချနေတာကျနော့်တစ်သက်
လောက်ရှိပီ။ ငယ်ငယ်ကတော့မြင်ဖူးပါတယ်။ အရင်တစ်ခေတ်ဆီက အလံနီဆိုလားဘာလားဗျာ။ စကားပြောလက်ပေါက်အတော်ကပ်တယ်လို.နာမည်ကြီး။ အိမ်ထောင်ကျတော့အဲ့ဒီမြို.သူနဲ.ဆံ
ထုံးနောက်ရောင်ပါပြောင်းသွားလိုက်တာမြင်တောင်မမြင်ရတော့တာကြာလှပေါ့။ ပြဿနာကဗျာ..အဲ့ဒီကျနော့်အဘိုး ကဒီလောက်ပူနေတဲ့ကာလကြီးမှာ နေ.လည်ခင်းဖက်ရှပ်ကီချလိုက်တာဆေး
ရုံတင်လိုက်ရရောဆိုပါတော့။ သူတို.လင်မယားမှာကသားသမီးကမထွန်းကားခဲ့တော့ခုလို အရေးအကြောင်းဆိုရင် မိန်းမဖက်က အမျိုးတွေရှိပေမယ့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို.အရေးပေါ်လူလိုလာ
တယ်။ အိမ်ကိုဖုန်းဝင်လာတော့ ကျနော့်ညီက အိမ်အလုပ်တွေကိုအကြောင်းပြပီးရှောင်တယ်။ ဒါနဲ.ပဲကျနော့်ဆီဒီပြဿနာက ရောက်လာရော။ ဒီလောက်နာမည်ကျော်တဲ့ လူ.ဂွစာကြီးကိုဆေးရုံ
ပေါ်မှာသွားပြုစုရမယ်ဆိုတာတွေးကြည့်တာနဲ.တင်စိတ်လေစရာဗျာ။ ဒါပေမယ့်ကျနော့်မှာရှောင်လို.မရတဲ့အကြောင်းတရားကရှိနေတယ်ဗျာ။ ဒီလို.. ကျနော်ကဘွဲ.ရပီးအိမ်ပြန်လာတာ၎-၅လ
လောက်ရှိနေပီ။ အိမ်ပြန်ရောက်ခါစကတော့ မိဘတွေကဘာမှမပြောဘူးကြည်ကြည်ဖြူဖြူပဲ။ အဲ့ဒီခေတ်ကသိပ်မပေါသေးတဲ့ အင်္ဂျင်နီယာဘွဲ.လေးရလာတာဆိုတော့ သူတို.အနေနဲ.ဘာမှမပြော
သာသေးဘူးပေါ့လေ။ တစ်မြို.လုံးမှတစ်ယောက်တစ်လေလောက်ရတဲ့ဘွဲ.မျိုးလေးရထားတာဆိုတော့ငါတို.သားလေးကတော်တယ်ဆိုပီးတပြုံးပြုံး။ ဒါနဲ.ကျနော်လည်းအခွင့်ကောင်းယူပီးအိမ်
ခုနက ပြောတဲ့ကိုရွှေဘနဲ.ပေါင်းပေါင်းပီးတနေ.တနေ.အရေမရအဖတ်မရ မြစ်ဆိပ်ဖက်ဆင်းပီးငါးမျှား၊လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ရပ်ကွက်ထဲကချာတိတ်တွေနဲ.ထိုင်ရင်းဆရာကြီးဂိုက်နဲ.လက်ချာ
တွေရိုက်၊ညနေစောင်းလာရင် ကိုရွှေဘနဲ.၂ကောင်သားမြို.ပြင်က ဗျစ်ရည်ဆိုင်ကိုဒိုင်လျှိုလေးတူတူလစ်၊ အမယ်... ပီးတာနဲ.အိမ်ပြန်တယ်မထင်နဲ. ဘယ်ရပ်ကွက်မှာအသုဘအိမ်ရှိလဲစုံစမ်းပီး
မိုးလင်းပေါက်ဖဲချတော့တာပဲ။ ဖဲဝိဇ္ဇာနဲ.အင်္ဂျင်နီယာပေါင်းမိမှတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ။ မြို.ထဲမှာလူမသေလို. အသုဘမဖြစ်ရင်လည်းလက်လျှော့မယ်ထင်သလား? ဟုတ်ကဲ့တခြား မြို.နယ်တွေ
ထိအသုဘအိမ်ရှာပီးလိုက်ရိုက်တာဗျ။ အသုဘအိမ်မှာစေတနာ့ဝန်ထမ်း စောင့်အိပ်ပေးတဲ့လူကို ကျနော်တို.အရပ်ဒေသမှာ အိပ်ဖန်စောင့်လို.ခေါ်တယ်။ အင်း..ကိုရွှေဘနဲ.ဖိုးသက် ဆိုရင်လူတွေ
ခုပြောတဲ့ကိစ္စပေါ်လာတော့ လူကြီးတွေလည်းအတော်ပဲဆိုပီး မောင်ဖိုးသက်ခုချက်ချင်းအထုပ်ပြင်ပီးသွားစေလို.အမိန်.တော်မှတ်ကရောဗျာ။ တတ်နိုင်ပါဘူးလေ။ ထားရာမှာနေစေရာကိုသွား..
ဘ၀မျိုးဆိုတော့လည်းထွက်တော်မူနန်းကခွါရတော့တာပေါ့။ ဒီလိုနဲ.ခရီးထွက်လာခဲ့ရရောဆိုပါတော့ဗျာ။ လေယာဉ်ကွင်းလိုက်ပို.တဲ့ ကိုရွှေဘက ကြေကွဲနေသေးတယ်။ အေပေးလေး!! မြန်မြန်
ပြန်လာနော်.. မင်းမပါပဲငါတစ်ယောက်ထဲဖဲသွားချလို. ပြဿနာတက်ရင် ငါတစ်ကောင်ထဲရိုက်ရနှက်ရမှာ.. ပီးတော့မင့်အဘိုးသေလို. အသုဘဖြစ်ရင် ဖဲဝင်မရိုက်နဲ.အဲ့ဒီမြို.ကကောင်တွေကဖဲ
ဆေးရုံပေါ်က အဘိုးကိုစိတ်ပူရမယ့်အစား ခုကျနော်ရောက်မယ့်မြို.ကိုပဲစိတ်ဝင်စားနေမိတယ်။ ဗမာပြေအလယ်ပိုင်းက မြို.။ အပူရှိန်အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့မြို.။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်
လှပတဲ့စကားလုံးတွေနဲ.ကဗျာစပ်တတ်တဲ့ခေတ်ပေါ်ကဗျာဆရာတွေ၊နိုင်ငံကျော်ကာတွန်းဆရာတွေ၊စာရေးဆရာတွေနေတဲ့မြို.ကိုကျနော်သွားနေပီ။ ဘာတွေဘယ်လိုကြုံရမလဲဆိုတာ တွေးနေ
ကျနော်အိပ်ချင်မူးတူးကြောင်တောင်တောင်နဲ.လေယာဉ်ပေါ်ကနေ အိတ်ကလေးလွယ်ပီးဆင်းလာခဲ့တယ်။ ပေါင်းအိုးထဲဆင်းလာရသလိုဖြစ်သွားတယ်။ အင်း..ငါတော့ဘယ်လောက်ကြာဦးမယ်မသိ
ဘူးလို.တွေးရင်းစိတ်ပျက်သွားတယ်ဗျ။ လေဆိပ်ထဲဝင်လာရင်းဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်ကြည့်ရင်း ရှာလိုက်တော့ ဖုန်းကြိုဆက်ထားပီး လာကြိုခိုင်းထားတဲ့ နယ်ခံကာတွန်းဆရာကိုအလွယ်တကူတွေ.ရ
လို.၀မ်းသာအားရဖက်ရမ်းနှုတ်ဆက်ရင်း လေဆိပ်အပြင်ဖက်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ လေဆိပ်အပြင်ဖက်မှာရပ်ထားတဲ့ ဒီကောင့်ဂျစ်ကားလေးဆီ သွားရင်းနေရောင်စူးစူးကြီးရဲ.ဒဏ်ကိုစပီးခံနေရပီ။
အားးး!! နေရောင်ကငါ့မျက်လုံးကိုလက်သီးနဲ.ထိုးလိုက်သလိုပဲကွာ*.. ခုချိန်များငါ့လက်ထဲခြောက်လုံးပူးသေနတ်တစ်လက်လောက်ရှိရင်မြင်မြင်ရာလူတွေကိုအကုန်ပစ်သတ်မိမလားမသိဘူး**..လို.ပြောလိုက်တော့ ကျနော့်ကျောင်းနေဖက် ကာတွန်းဆရာကတဟားဟား
ရယ်ရင်းခုစောသေးတယ်ငါ့ကောင်၊မွန်းတည့်ရင်ပိုဆိုးတာမင်းတွေ.လိမ့်မယ်လို.ပြန်ပြောတယ်ဗျ။ (* ** အဲ့ဒါအဲလဘတ်ကမျူးရဲ.၀တ္ထုတစ်ပုဒ်ထဲကစာသား။ ဇတ်လိုက်ကနေရောင်လက်လက်မှာစိတ်
ဖောက်သလိုဖြစ်ပီးလူတစ်ယောက်ကို ခြောက်လုံးပူးနဲ.ပစ်သတ်မိတဲ့ဇတ်လမ်း။ ကာတွန်းဆရာကအဲ့ဒီဝတ္ထုကိုအလွတ်ကိုရတဲ့အထိကြိုက်တာမို.လို.တခါထဲသဘောပေါက်ပီးရယ်နေတာဗျ)
အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကျနော့်ဘော်ဒါကအိုကေဆိုပီး ဂျစ်ကားလေးကိုမြို.ထဲဖက်ကိုမောင်းနေရင်းစကားတွေဖောင်ဖွဲ.နေပြန်တယ်။ ကျနော့်ဆံပင်နဲ.အလံနီလက်ဟောင်းအဘိုးရှိတဲ့ဆေးရုံကို
နိုင်တယ်။ ကျနော့်ဆံပင်ကလည်းကျောလည်လောက်ရောက်အောင်ကိုရှည်နေတာကိုး။ အဲ့ဒီခေတ်က တအုံးအုံးထနေတဲ့Rocker: ကြီးတွေကိုအားကျလို.မထင်နဲ.ဗျာ။ ရှက်ရှက်နဲ.၀န်ခံရရင်...
ရည်းစားကပစ်ပြေးသွားကထဲကဆံပင်မညှပ်ပဲပစ်ထားတာလေ။ ဘာဆိုင်လို.လဲလို.ခင်ဗျားတို.ကမေးချင်တာလား? မတော်လို.များ စိတ်ပြောင်းပီး ကျနော့်ဆီကိုပြန်လာခဲ့ရင် မမရယ်..ကျနော့်
အလွမ်းတွေဟာဟော့ဒီကျနော့်ဆံပင်တွေလောက်တောင်ရှည်နေပါပီဘာညာနဲ.ချွဲမယ်ပေါ့လေ။ အဟိ..လွန်ခဲ့တဲ့၃-၄လက မမတစ်ယောက်တနယ်တကြေးမှာအိမ်ထောင်ကျလို.ကလေးတောင်ရ
နေပီဆိုတာကြားမှစိတ်လျှော့လိုက်ရတာ။ ဒါပေမယ့်ချက်ချင်းကြီး ဆံပင်တွေညှပ်မပစ်ရဲဘူး။ လိပ်ပြာမလုံလို.ဟီးဟီး။ ခုမှပဲပူတာရယ် အဘိုးကိုတွေ.ရမှာရယ်ကိုအကြောင်းပြလို.ရပီဆိုတော့ညှပ်
ပစ်လိုက်တော့မယ်ဗျာ... .... ... ...
တအားမတိုပဲဂုတ်ထောက်လောက်ဖြတ်ချထားလိုက်တယ်။ အိုကေ! ရပီ။ အဘိုးအိမ်ကိုပေးလိုက်တဲ့လိပ်စာအတိုင်းလိုက်ရှာတော့ မြို.ထဲမကျမြို.ပြင်မကျရပ်ကွက်ထဲက ခြံဝင်းကျယ်ကျယ်တစ်ခု
ကိုရောက်သွားတယ်။ ပျဉ်ထောင် သွပ်မိုးနဲ.ရေနံဝနေတဲ့နှစ်ထပ်ရှေးအိမ်မဲမဲကြီးဗျ။ ခြံဝင်းထဲမှာဝါးရုံပင်တွေသရက်ပင်တွေနဲ.အရိပ်ခပ်ကောင်းကောင်းပဲ။ ခြံဝင်းထဲကိုကျနော်နဲ.ကာတွန်းဆရာတို.
ဂျစ်ကားလေးကိုမောင်းဝင်သွားတော့ လူသူလေးပါးမရှိဘူး။ အိမ်ရှေ.ဆင်ဝင်အောက်မှာကားရပ်လိုက်ပီးကြည့်လိုက်တော့ တံခါးမကြီးကိုသော့ခလောက်ကြီးနဲ.ခတ်ထားတာတွေ.ရတယ်။
ပြဿနာပဲ..ဘယ်သူမှမရှိပါလားဗျာ။ ၂ကောင်သား ခပ်တည်တည်နဲ. အိမ်ရှေ.က၃-၄ထစ်လောက်ရှိတဲ့လှေကားခုံမှာ ထိုင်နေရင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲတိုင်ပင်နေလိုက်ကြတယ်။
အသက်၂၅-၃၀ကြားလောက်ရှိမယ့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အိမ်သော့တွဲလေးကိုင်ပီး ကျနော်တို.ရှေ.မှာလာရပ်နေတာမြင်ရတယ်။ အသားခပ်ညိုညို အရပ်မြင့်မြင့်နဲ.မျက်နာကခပ်တည်တည်ဗျ။
ရှပ်အင်းကျီလက်ရှည်ကိုနေပူဒဏ်ကာကွယ်ဖို.အတွက်ဝတ်ထားတာတောင် သူ.ရွှေရင်အစုံကမို.မို.မောက်မောက်ဖြစ်နေတာအသိသာကြီးဖြစ်နေတယ်။ ထမီအ၀ါနုရောင်လေးနဲ. ဆံပင်ရှည်တွေ
ကိုလက်ကိုင်ပုဝါအဖြူလေးနဲ.စည်းနှောင်ပီးပုခုံးအရှေ.တစ်ဖက်ခြမ်းကိုချထားတယ်။ ခေါင်းပေါ်မှာက မြက်ခမောက်ပြားပြားလေးကိုဆောင်းလို.။ ကျနော်လည်းခြေဆုံးခေါင်းဆုံးအကဲခတ်နေရာ
အဟမ်း.. ဟုတ်ကျနော်ဖိုးသက်ပါ.. အဘွားလေးမေဘယ်များသွားသလဲမသိဘူးဗျ..ဆေးရုံမှာလား..(အဘွားလေးမေဆိုတာ ကျနော့်အဘိုးရဲ.ဇနီး)
ကျမဟိုဖက်ခြံကပါ.. အရီးမေဆေးရုံသွားပါတယ်.. ကိုဖိုးသက်လာရင် သော့ဖွင့်ပေးဖို.ကျမကိုမှာထားလို.ပါ.. ညဖက်ကျမှဆေးရုံလိုက်လာပါလို.မှာထားပါတယ်...
အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအိမ်တံခါးမကြီးသော့ကိုဖွင့်ဖို.ပြင်နေတုံးကာတွန်းဆရာက ဟေ့ကောင်ငါ့ပွဲရုံမှာအလုပ်တွေကျနေတယ်ဟ.. ညမှတစ်ခါပြန်လာပီးမင့်ကိုဆေးရုံလိုက်ပို.မယ်။ ခုတော့ငါလစ်လိုက်တော့မယ်ဆိုပီး သူ.ကားပေါ်တက်ပီး စက်နိုးရင်း ကျနော့်ကိုမျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြတယ်။ ဟိုအမျိုးသမီးဖက်ကို မျက်စပစ်ပြတယ်။ သောက်ခွက်က မချိုမချဉ်နဲ.။ ကျနော့်အိတ်
ကိုကောက်ကိုင်လိုက်ပီး ကားမောင်းထွက်သွားတဲ့ဒီကောင့်ကို အသံမထွက်ပဲပါးစပ်လှုပ်ပြပီး ဆဲလိုက်သေးတယ်။ ပီးတော့မှအိမ်ထဲဝင်လာမိတယ်။
နောက်ဖေးခြံထဲကရေတွင်းမှာရေချိုးလိုက်ပါ.. ကျမထမင်းပွဲပြင်ထားပေးပါ့မယ်.. လို.ဟိုအမျိုးသမီးက ကျနော့်ကိုမကြည့်ပဲပြောတယ်။
ဘယ်လိုဟာလဲမသိဘူးဗျ။ ရုပ်တည်ကြီးနဲ.။ အဘွားမေနဲ.ဘာတော်လဲတော့မသိဘူး။ ကျနော်လည်းရေလဲပုဆိုး၊ဆပ်ပြာ၊တဘက်တွေယူပီး ရေအေးအေးလေးကိုဇိမ်နဲ.ချိုးပီးမှအိမ်ဖက်ပြန်လာခဲ့
တယ်။ ကျနော့်အတွက်နေရာချထားပေးတဲ့အခန်းထဲကနေအ၀တ်အစားလဲပီးပြန်ထွက်လာတော့ ထမင်းစားခန်းထဲမှာ ခုနကမိန်းမ ထမင်းပွဲပြင်ထားပီးပီ။ ဆောင်းထားတဲ့မြက်ခမောက်ကိုချွတ်
ထားတော့ မျက်နာကိုသေချာမြင်ရတယ်။ မျက်နာကြောတာမတင်းရင်တော်တော်ကြည့်ရတာချောတယ်လို.ပြောလို.ရတဲ့မိန်းမဗျ။ ခုကျနော့်ကိုကျောပေးထားတော့ ထမီအ၀ါနုလေးအောက်က
သူ.တင်ပါးဝိုင်းဝိုင်းလေးကလည်း ကြည့်ရတာမျက်စိအေးလိုက်တာ။ ရုတ်တရက်ဖတ်ကနဲကျနော့်ဖက်လှည့်ကြည့်လာမှ သတိလက်လွတ်ငေးနေမိတာလူမိသလိုဖြစ်သွားလို.ရှက်သွားတယ်။
သူ.မျက်နာလည်းရှက်ဝဲ၀ဲဖြစ်သွားတာပေါ့။ တစိမ်းယောက်ျားတစ်ယောက် ကိုယ့်ဖင်ကိုမျက်စိဇိမ်ခံနေတာတွေ.လိုက်ရတာကိုး။ ကျနော်လည်းအရှက်ပြေထမင်းစားပွဲကိုမြန်မြန်ဝင်ထိုင်လိုက်ပီး
စားသောက်ပီးတော့ ပန်းကန်ခွက်ယောက်တွေကို သူမတစ်ယောက်သိမ်းဆည်းနေတုံး ကျနော်ဧည့်ခန်းဖက်ထွက်လာပီး စီးကရက်တစ်လိပ်လောက်ဖွာရင်းထိုင်နေမိတယ်။
ခဏနေတော့ သူမထွက်လာပီး ထုံးစံအတိုင်းကျနော့်မျက်နာကိုမကြည့်ပဲ.. တရေးလောက်အိပ်ချင်အိပ်ထားပါကိုဖိုးသက်..ညဖက်ကျရင်ဆေးရုံမှာစောင့်အိပ်ရမယ်လို. အရီးမေကပြောထားပါ
တယ်။ တစ်ခုခုလိုရင် ဟိုဖက်ခြံမှာကျမရှိပါတယ်လှမ်းခေါ်လိုက်ပါလို.ခပ်တည်တည်ပြောရင်း ပြန်သွားရော။ ကျနော်လည်းကျောပေးပီး ခပ်မြန်မြန်လျှောက်သွားတဲ့ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ.နောက်ပိုင်း
ညနေစောင်းစပြုလာတာတောင် နေရောင်ကတော်တော်လေးပြင်းသေးသလိုပဲ။ အာခေါင်ခြောက်သလိုဖြစ်ပီးနေရခက်လိုက်တာ။ ဓာတ်ဆားလေးဘာလေးကြိုပီးဖျော်သောက်ထားရင်ကောင်းမယ်။
၀တ်ထားတဲ့တီရှပ်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်ပီး ထိုင်းထိုင်းမှိုင်းမှိုင်းဖြစ်နေတာသွေးပူလာအောင်လို. ရှဲဒိုးဘောက်ဆင်လေးနည်းနည်းကစားလိုက်သေးတယ်။ တအားကြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ရဲဘူးဗျ။
နဂိုကချွေးတစိုစိုဖြစ်နေတာ အားကုန်မှာကြောက်ရတယ်။ တလက်စထဲရေချိုးတော့မှဆိုပီးအိမ်ပေါ်တက် ပီးဆပ်ပြာခွက်တွေ၊ရေလဲပုဆိုးလေးတွေယူပီး နောက်ဖေးခြံဝင်းထဲကရေတွင်းကိုထွက်လာ
ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်အတွေးနဲ.ကိုယ်လျှောက်လာခဲ့တာသတိမထားမိလိုက်ဘူး။ ရေတွင်းဘေးကိုရောက်မှ လူတစ်ယောက်ရေချိုးနေတာ သတိထားမိတယ်။ ဟိုအမျိုးသမီးဗျ။ ဒုက္ခပဲ။ ခုမှပြန်ကွေ.သွားရ
အောင်လည်းမကောင်း၊တစိမ်းမိန်းမတစ်ယောက်နဲ.ရေတွင်းတစ်ခုမှာ၂ယောက်ထဲရေချိုးရမှာကိုလည်းစိတ်က ကျဉ်းကျပ်နေတာအမှန်ပဲ။ မတတ်နိုင်ဘူးဗျာ။
ရေချိုးနေတာလား အမ!! လို.ပြောရင်းပြုံးပြလိုက်တယ်။ သူကတော့ခေါင်းငြိမ့်ပြရုံပဲ။ တော်တော်သောက်ကြောတင်းတဲ့ဟာမဗျ။ ကျနော်လည်းလက်ကသယ်လာတဲ့ရေလဲတွေဆပ်ပြာခွက်
တွေကိုရေတွင်းဘေးကအုတ်ခုံလေးပေါ်တင်ရင်း အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ရေပုံးကြိုးမဲမဲလေးကိုဆွဲရင်းရေတွင်းထဲကရေငင်နေတယ်ဗျ။ ပုံစံကိုကြည့်ရတာ တွင်းထဲကရေကိုငင်ပီး
ပုံးလိုက်လောင်းချိုးနေပုံရတယ်။ ဘေးတိုက်မြင်နေရတဲ့သူ.ကိုယ်လုံးလေးမှာရေစိုထမီက ကပ်နေတော့ကောက်ကြောင်းတွေကထင်းနေတဲ့အပြင်.. ရေငင်နေတော့ လှုပ်ရှားနေတာကြောင့်ရေစိုထမီ အောက်က နို.ကြီး၂လုံးတုန်တုန် တုန်တုန်ဖြစ်နေတယ်။ ခြေဖျားလေးထောက်ထားတော့ အောက်ကတင်ပါးလေးကလည်းတစ်တစ်ရစ်ရစ်လေးဗျ။ ကျနော်အာ
ခေါင်ခြောက်လာပြန်ပီ။ ဒီတစ်ခါအာခေါင်ခြောက်တာက ဘာကြောင့်လဲဆိုတာသဘောပေါက်တယ်မလား။ ရေချိုးမယ်ဆိုပီး အောက်ခံဘောင်းဘီကလည်းဝတ်မလာတော့ ပုဆိုးတစ်လွှာလေးပဲ
ကာထားတဲ့ အငယ်ကောင်ကလည်းငေါက်ကနဲထထောင်ချင်သလိုလိုဖြစ်လာတယ်။ ဖူးးးးးးး!! စိတ်ကိုမနည်းထိန်းနေရတယ်။ စိတ်ကိုထိန်းဖို.ကြိုးစားနေပေမယ့် ကျနော့်မျက်လုံးတွေကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ.ရေစိုကိုယ်လုံးပေါ်မှာပဲ စုံချည်ဆန်ချည်ပြေးလွှားနေတယ်။ သူကတော့ ကျနော့်ကိုရှိတယ်လို.ကိုသဘောထားပုံမရဘူး။ ရေတစ်ပုံးငင်လိုက် ခေါင်းကနေလောင်းချိုးလိုက်၊ရေပုံးကြိုးကိုလျှော့ချလိုက်အဲ့လိုအေးအေးလူလူပဲလုပ်နေတာဗျ။ ကျနော့်မှာသာစိတ်ကတဖြေးဖြေးဖောက်ပြန်လာလို. ဟိုဒင်းဖြစ်ပီး ထိုင်ရမလိုထရမလိုကုန်းကွကွ
ကြီးဖြစ်လာပီ။ ခုချိန်သာကျနော့်ဖက်ကိုလှည့်ကြည့်လာရင် ပုဆိုးအောက်ကနေထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမြင်တော့မယ်ဗျ။
ကဲ..အရှက်မကွဲခင်မြန်မြန်ကာကွယ်မှဆိုပီး ခါးလောက်ရှိတဲ့ ရေတွင်းဘောင်နားကိုဝင်ကပ်လိုက်ရင်း...
အမ!! ပေးကျနော်ရေငင်ပေးမယ် ဆိုပီးလောကွတ်လုပ်ပီး သူ.လက်ထဲကဆွဲတင်လက်စရေပုံးကြိုးလေးကိုဆွဲယူလိုက်တယ်။ ငေါက်တောက်တောက်ဖြစ်နေတဲ့ အောက်ကကိစ္စကရေတွင်းဘောင်နဲ.ကွယ်သွားတော့ အဆင်ပြေသွားတယ်။ သူ.လက်ထဲကရေပုံးကြိုးကျနော့်လက်ထဲရောက်လာတော့မှအောက်ကရေပါလာတဲ့ရေပုံးဝိတ်ကတော်တော်အလေး
ချိန်စီးမှန်းသတိထားမိတယ်။ ဆွဲတင်မလို.လုပ်တုံး သူကအတင်းပြန်လုတယ်ခင်ဗျ။ မလိုဘူးရှင့်!! ကျမဖာသာငင်ပါ့မယ်.. ကျနော်ကလည်း ဟာ..ကျနော်ဆွဲပေးမယ်.. အဲ့လိုတွေဖြစ်ကြရင်းရေပုံး
ကြိုးကိုသူတစ်ပြန်ကိုယ်တစ်ပြန်လုကျရင်း အဓိကရုန်း(အဲလေ) ရုန်းရင်းဆန်ခတ်တွေဖြစ်ကုန်တယ်ဗျ။ ရေအပြည့်ပါတဲ့ရေပုံးဝိတ်က လေးပါတယ်ဆိုမှ၊ရေပုံးကြိုးလုပ်ထားတဲ့ သားရည်ကြိုးမဲမဲ
လေးကရေတွေစက်လက်နဲ.ဆိုတော့ ချောထွက်သွားတာကျနော့်လက်ကလွှတ်ထွက်သွားပီး သူ.လက်ထဲကိုမမိတမိပါသွားတယ်။ ဒါပေမယ့်မိမိရရမဟုတ်တဲ့အပြင် ဆောင့်ပီးလွှတ်လိုက်သလို
ဖြစ်သွားတော့ ရေပုံးကြိုးကရွှီးကနဲ သူ.လက်ကြားထဲက လျှောထွက်သွားတာကို လိုက်ဖမ်းနေတုံး သူ.ထမီရင်လျားကပြေကျသွားရောဗျ။ ချက်ချင်းဖတ်ကနဲသူ.ဘယ်ဖက်လက်နဲ. ပြေကျသွား
တဲ့ထမီကိုလှမ်းအဆွဲ ညာလက်ကဆွဲထားတဲ့ ရေပုံးကြိုးရဲ.ဆောင့်ဆွဲတဲ့ဝိတ်ကိုမခံနိုင်တော့ပဲ ဒယိမ်းဒယိုင်ဖြစ်ပီးရှေ.ကိုငိုက်ကနဲ ပါသွားတယ်။ ကျနော်လည်းလန်.သွားပီး သူ.ကိုယ်လုံးလေးကို
လှမ်းဖက်ပီးဆွဲယူလိုက်တော့ အောက်ကရေစိုစိုဖြစ်နေတဲ့သံမံတလင်း ချောကျိကျိကြောင့် ၂ယောက်သားလုံးထွေးပီး ဘိုင်းကနဲလဲသွားကရော။ ရေပုံးရောကြိုးရောရေတွင်းထဲပြုတ်ကျသွားတာ
သတိဝင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ ကျနော်က သူ.အပေါ်ကိုဖိပီးလှဲနေတာဗျ။ သူလည်းတော်တော်အီစိမ့်သွားတယ်နေမှာ။ တော်သေးတယ်ပက်လက်လှန်လှဲကျတာနောက်စေ့တွေဘာတွေ
မထိသွားလို.။ မျက်နာလေးက ရှုံ.မဲ့နေရှာတယ်။ ရှက်လည်းတော်တော်လေးရှက်သွားပီဗျ။ အင်းကျီဗလာဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့်ရင်ဘတ်က အိစက်စက်အထိအတွေ.ကိုခံစားနေရတာသတိထား
လိုက်မိတယ်။ ဟိုက်!! သူ.ထမီကခါးလောက်ထိလျှောကျ နေတာကိုးဗျ။ ဒီကြားထဲ ကျနော့်ပစ္စည်းက အချောင်းလိုက်သူ.ဗိုက်ပေါ်မှာဖိကပ်ထားမိနေပီ။ အမ!! ဘာဖြစ်သွားသေးလဲ.. ရလား??
ကျနော်မေးတာကို ပြန်မဖြေပဲ အပေါ်ကဖိမိနေတဲ့ ကျနော့်ရင်ဘတ်ကိုတွန်းထားရင်း .. ဖယ်တော့ရှင်..ဖယ်တော့လို. တောင်းပန်နေတဲ့အသံလေးနဲ.ပြောနေရှာတယ်။ စိတ်အရမ်းလှုပ်ရှားနေရှာ
တော့သူ.နှုတ်ခမ်းပါးလျလျလေးတွေကတဆတ်ဆတ်တုန်နေတယ်။ ချက်ချင်းအားနာသွားပီး ဖယ်ပေးဖို.လက်၂ဖက်ကိုစုံထောက်ပီး ကျနော့်ကိုယ်လုံးကိုကြွလိုက်တော့... .... .... ... .... .....
ဖိုးသက်!! ဟေ့ကောင်... ဖိုးသက်.. ဘယ်မှာလဲဟ!! ငါလာပီလေ..ဖိုးသက်..
အဲ့လိုအော်သံနဲ.အတူ အိမ်နောက်ဖေး ခြံဝန်းထဲ လူတစ်ယောက်လျှောက်လာတဲ့အသံကြားရတယ်။ ဟိုက်!! သွားပီဆရာ.. ကျနော်တို.၂ယောက်ခုဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုလည်းခင်ဗျားတို.စဉ်းစားကြည့်ဦး
ဘာလုပ်နေသလိုလို..ဘာဂလိုတိုတိုအနေအထားကြီး။ တော်သေးတာတစ်ခုက ရေတွင်းရဲ.ဒီဖက်ကွယ်နေတဲ့အခြမ်းမှာဖြစ်နေလို.ဗျ။ ဒါဟိုကောင် ကာတွန်းဆရာရဲ.အသံဆိုတာကျနော်သိတယ်။
ထလိုက်လို.ရေတွင်းနားကပ်လာရင်မြင်တော့မယ်။ ကျနော့်ရင်ခွင်အောက်က ဟိုအမျိုးသမီးကလည်းချက်ချင်းထိတ်လန်.နေတဲ့အရှက်မျက်နာနဲ.ဖြစ်နေပီ။ ဟိုသူတောင်းစားကရေတွင်းနဲ.
ခြေလှမ်း ၄-၅-၁၀လှမ်းနားအထိရောက်လာပီး ကျနော့်ကိုအော်ခေါ်နေတာဆိုတော့ကပ်လျှက်ကလေး။ ကျနော်က လက်ခွပီးထောက်ထားတဲ့နေရာကနေ အောက်က သူမကိုတိတ်တိတ်နေဆိုတဲ့
အမူအရာလုပ်ပြတော့ ခေါင်းငြိမ့်ပြတယ်။ ဟိုကောင့်ခြေသံတဖြေးဖြေးဝေးသွားပီး အိမ်ရှေ.ဖက်ကိုပြန်ထွက်သွားမှ ကျနော်အောက်ကိုငုံ.ကြည့်လိုက်မိတယ်။ ဗလာကျင်းနေတဲ့ ရွှေရင်ဖြိုးဖျနှစ်မွှာ
ကခပ်ထွားထွားလေး လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးဗျ။ ကျနော်ငုံ.ကြည့်တာချက်ချင်းသတိထားမိသွားပီးခါးနားကိုလျှောကျနေတဲ့ သူ.ရေစိုထမီလေးကို ဖတ်ကနဲဆွဲတင်ပီး သူ.နို.၂လုံးကိုကာဖို.ကြိုးစားတယ်
ပီးတော့မှ ဖယ်ပါတော့ရှင်... ကျမရှိကြီးခိုးပါတယ်လို. တုန်တုန်ရီရီပြောလာမှ သတိဝင်လာပီး.. ဆောရီးအမရယ်...ဆောရီးဆိုပီးဖယ်ပေးလိုက်မိတယ်။ ချက်ချင်းထလိုက်ရင်း အုတ်ခုံပေါ်က
ဖူးးးး!! ကျနော့်မှာသာတစ်ယောက်ထဲ ရေတွင်းဘေးမှာငုတ်တုတ်လေးထိုင်လို. ရင်တလှပ်လှပ်နဲ.ကျန်နေခဲ့တာပေါ့။
ပုတ်ကျသွားတဲ့ကြိုးတပ်လျှက်ရေပုံးကို ပြန်ဆွဲတင်ပီး ရေကိုမြန်မြန်ပီးအောင်ချိုးနေတုံး ဟိုကောင်ကာတွန်းဆရာပြန်ရောက်လာပြန်တယ်။
ဟမ်! ခုနကမင့်ကိုဒီနားထိလာအော်ပီးငါလာရှာတာမတွေ.ပါလားကွ.. တဲ့
ကိုယ်ပျောက်နေလို.ဟေ့ .. လို.ငေါ့တော့တော့ပြန်ပြောရင်းရေကိုခပ်သွက်သွက်လေးချိုးရင်းလက်စသတ်လိုက်တယ်။ ညနေစောင်းပီဆိုတော့ဆေးရုံကိုလူနာစောင့်အိပ်ဖို.သွားမှ။
သူငယ်ချင်းရဲ.ဂျစ်ကားလေးနဲ.ဆေးရုံကိုရောက်သွားပီး ဟိုရှာဒီရှာလိုက်ရှာနေရသေးတယ်။ နောက်ဆုံးဆေးရုံကြီးအဆောင်(၂)ရဲ. အပေါ်ထပ်ထောင့်ဆုံးက ပိုက်ဆံပေးရတဲ့သီးသန်.အခန်းထဲမှာ
အဘွားလေးမေက ကုတင်ဘေးမှာထိုင်လို.မျက်နာကသိပ်မကောင်းရှာဘူး။ သား!! မင့်အဘိုး ကြီးမိုက်ကြီးကိုကြည့်ပါဦးဆိုပီး ငိုရှာတယ်။
မတွေ.တာကြာတဲ့ကျနော့် အဘိုးတစ်ယောက်ဆေးရုံသံကုတင်လေးပေါ်မှာပက်လက်ကလေး။ နဖူးကတော်တော်ပြောင်နေရှာပီ၊ မုတ်ဆိတ်တွေ၊နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေနဲ.သေချာကြည့်လေလေ ပစ္စည်းမဲ့
ခေါင်းဆောင်ကြီး လီနင်နဲ.တူလေလေပဲ။ လူကသာတစ်ကိုယ်လုံးပိုက်တွေတန်းလန်းဖြစ်နေတာ..ကျနော့်ကိုလှမ်းကြည့်တဲ့မျက်လုံးက အရင်ကလိုခပ်မာမာပဲဗျ။ အဘွားလေးမေကိုနှစ်သိမ့်ပီးကျနော့်
ဘော်ဒါရဲ.ဂျစ်ကားနဲ.ပြန်လိုက်ပို.ပေးလိုက်ဖို.စီစဉ်ပေးလိုက်တယ်။ ညဖက်တစ်ခုခုအရေးပေါ်အတွက် စပါယ်ရှယ်နာ့စ်တစ်ယောက်ခေါ်ထားတယ်၊ကျနော်က ဘိုးတော်သောင်းကျန်းရင်ဘေးကထိန်းပေးဖို.စောင့်အိပ်ရမယ်လို.မှာသွားတယ်။ ခုလောလောဆယ်တော့ စောသေးလို.ငှါးထားတဲ့သူနာပြုဆရာမ ရောက်မလာသေးဘူးတဲ့။ ကျနော့်အဘိုးက
ဆီးချိုကောနှလုံးကောရှိနေတာကို ရှပ်ကီသွားချလိုက်တော့ ဘာဖြစ်သွားလဲမသိတော့ပဲ ခုလိုအခြေနေဖြစ်သွားတာလို.ပြောတယ်။ ခုဆီးမသွားနိုင်ဖြစ်ပီး ဆီးပိုက်တန်းလန်း၊လက်ဖျံမှာလည်း
ဆေးပုလင်းတွေချိတ်ထားရပီ။ တော်သေးတယ်ရထားတဲ့အခန်းက အစွန်ဆုံးကျလို.ပြူတင်းပေါက်တွေဖွင့်ထားရင်လေ၀င်လေထွက်မဆိုးဘူး။ အဘိုးရဲ. ကုတင်ဘေးကခုံရှည်မှာ ၀င်ထိုင်လိုက်
ရင်းမှိန်းနေတဲ့သူ.ကိုကျနော်ငေးကြည့်နေမိတယ်။ အင်း.. ကျနော်ကိုယ်တိုင်မမှီလိုက်ပေမယ့် ကြားဖူးသမျှ ဒီအဘိုးအကြောင်းကတော့ အံ့သြစရာတွေဗျ။
ခုသူ.ဇနီးဘွားလေးမေက ကျနော်တို.မြို.ကိုတာဝန်ကျလာတဲ့ ကျောင်းဆရာမလေးပေါ့။ အဲ့ဒါကိုတောပြန်သူပုန် အလံနီကြီးဆိုပီး လူတိုင်းလန်.ရတဲ့ကျနော့် အဘိုးကရည်းစားစာပေးတယ်။
ကျောင်းစိမ်းလေးနဲ.ဆရာမလေးကိုလမ်းက စောင့်ပီး ဆရာမလေးရှေ.ကပိတ်ရပ်ပီး ဟေ့..နေဦး..ရော့ဆိုပီး လေသံမာကြီးနဲ.သူ.စာကိုထိုးပေးလိုက်တော့ ဘွားလေးမေက ဒါဘာလဲလို.မေးသတဲ့
ဘာရမလဲ..ရည်းစားစာနင့်အတွက်ဆိုပီး ကျနော့်အဘိုးကပိတ်ဟောက်သေးတယ်ဆိုပဲ။ အို!! မယူနိုင်ပါဘူးရှင် ဆိုပီးပြန်လည်းပြောရော.. ကျနော့်အဘိုးကဒေါသူပုန်ထတော့တာပဲ။ စာကိုအစိပ်
စိပ်အမြွာမြွာဖြစ်အောင်ဆွဲဖြဲလိုက်ပီး.. -ီး မှမယူချင်နေကွာတဲ့.. ငါ့မှာတော့သူ.ကိုမြတ်နိုးလွန်းလို.တစ်ညလုံးမအိပ်ပဲထိုင်ရေးလာတာ ဆိုပီး တောက် အကျယ်ကြီးခေါက်ပီးလှည့်ထွက်သွားရောတဲ့
ဗျာ။ ဘယ်နှယ့်လူလဲမသိပါဘူးဗျာ။ အဲ့ဒါကိုကြားတဲ့ဘေးကအောင်သွယ်တွေက လူရိုးလူကောင်းကြီးပါဘာညာနဲ. ၀ိုင်းပီးလှော်ပေးရင်းကြိုက်သွားကြတာလို.ပြောတာပဲလေ။ ရှိသေးတယ်... ....
နောက်ဆက်တွဲက..သမီးရည်စားဖြစ်တော့အဲ့ဒီခေတ်က ရှေးဆန်တယ်မလားသိုသိုသိပ်သိပ်ကလေးနေရတဲ့ခေတ်ကိုး။ အဲ့ဒါချိန်းတွေ.ကြတော့ ဘွားလေးမေက လူပြတ်တဲ့နေရာမသွားရဲပါဘူး
လို.ငြင်းတော့ ဒေါကထွက်လာတဲ့ကျနော့်အဘိုးက လက်ကိုအတင်းဆွဲပီး မြို.လယ်ခေါင်က ရုပ်ရှင်ရုံအတက်အဆင်းလှေကားမှာ သွားထိုင်ရော။ ပီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်ပဲလက်ကလေးကိုင်၊ပါးကလေးကိုင်လုပ်ပီးချိန်းတွေ.နေတာ..တစ်မြို.လုံးကမြင်ပီး အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်ကုန်ရောတဲ့။ ဒါနဲ.ပဲ လူတွေသိကုန်ပီးမြန်မြန်ညားသွားတယ်လို.ကြားဖူး
ခုကျနော်နဲ.ထိပ်တိုက်တွေ.နေပီဗျ။ ခုလောလောဆယ်တော့ အဘိုးကြီးမှိန်းနေတယ်။ နိုးလာရင်တော့မလွယ်ဘူး။ ဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်နေရင်း ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ.ညမိုးချုပ်စပြုလာပီ။
ဟိုကောင်ကျနော့်ဘော်ဒါကို ဖတ်စရာစာအုပ်ကလေးဘာလေးနည်းနည်းပါးပါးလာပို.ပါလို.မှာလိုက်တာ ခုထိလဲမလာသေးဘူးဗျာ။ ကြာလာတော့ တစ်ယောက်ထဲငုတ်တုတ်ကြီး ပျင်းလာပီ။
အဘိုးကလည်း တုတ်တုတ်တောင်မလှုပ်ဘူး။ အခန်းထဲမှာလဲနည်းနည်းပူလာပီဗျ။ ကျနော်အပေါ်ကထပ်ဝတ်လာတဲ့ရှပ်လက်ရှည်အဖြူကို ချွတ်လိုက်ပီး အခန်းနံရံက သံချောင်းတစ်ခုမှာချိတ်
ရိပ်ကနဲ အခန်းဝမှာလူတစ်ယောက်ကိုတွေ.လိုက်လို.လှမ်းကြည့်လိုက်တော့.. ... ... ...
ထမီအနီရဲရဲ..ခါးတိုအင်းကျီအဖြူဆွတ်ဆွတ်ကလေးနဲ.သူနာပြုဆရာမလေးတစ်ယောက်ဗျ။ မျက်နာဝိုင်းစက်စက်ကလေးကချိုပြုံးနေတာ လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ကျနော့် ရင်ထဲမှာတောင်အေးစိမ့်
သွားတာပဲဗျာ။ ရင်ခွင်ထဲမှာစာအုပ်ထူထူလေး၂အုပ်ကိုပွေ.ထားရင်းအခန်းထဲဝင်လာတယ်။ စာအုပ်တွေပွေ.ထားတဲ့လက်ဖျံလေးတွေက ဖြူဖြူသွယ်သွယ်လေးတွေ။ အရပ်ကလေးကမနိမ့်မမြင့်
ဦးရဲမြင့်.. ရဲ.လူနာစောင့်လားရှင်!! အန်တီကြီး ဒီညစောင့်မအိပ်ဘူးပေါ့..ဟုတ်လား!!
ကျနော့်မျက်နာချင်းဆိုင်ကုတင်ဘေးတစ်ဖက်မှာဝင်ရပ်ပီး အသံချိုချိုလေးနဲ.စကားလှမ်းပြောတယ်။ ချောလိုက်တာဗျာ။ ကျနော့်မှာ ဆရာမလေးရဲ.ရူပါရုံအဖမ်းစားခံထားရတော့ စကားပြန်မပြော
နိုင်ပဲခေါင်းငြိမ့်ပြရုံပဲတတ်နိုင်တော့တယ်။ သူ.လက်ထဲကစာအုပ်တွေကို ခုံအရှည်ပေါ်ချလိုက်ပီး အဘိုးလက်မောင်းကို ကိုင်ရင်းသွေးပေါင်ချိန်တွေဘာတွေတိုင်းဖို.ပြင်နေတယ်။ ကျနော်ကတော့
ရင်တဆတ်ဆတ်ခုန်နေပီ။ အနီရောင်နတ်သမီးလေးနဲ. တစ်ညလုံးတူတူ စောင့်အိပ်ရတော့မှာလေ။ မကြီးမငယ်နဲ.ခြေတုန်လက်တုန်တောင်ဖြစ်လာတယ်ဟီး။ သူမလုပ်စရာရှိတာတွေဟိုလုပ်ဒီ
အကို!! အပြင်တွေဘာတွေသွားချင်သွားနော်ရတယ်.. ဦးရဲမြင့်ကိုပြုစုဖို.ကကျမတာဝန်ယူထားတာ..ဆေးရုံဝန်းထဲမှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေဘာတွေရှိတယ်..သွားထိုင်လို.ရတယ်
လွတ်လွတ်လပ်လပ်သာနေ...ဆိုပီး ပြုံးပြုံးလေးပြောပီး ခုံရှည်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်ရင်း သူယူလာတဲ့စာအုပ်ထူထူတစ်အုပ်ကိုဖွင့်ပီးဖတ်နေတယ်။ ကျနော့်မှာခုထိသောက်အကြီးလိုပဲ စကားတစ်လုံးမှ
ပြန်မပြောဖြစ်သေးဘူး။ ကျနော့်အရှေ.မှာကိုယ်လုံးကိုမတ်မတ်ကလေး လုပ်ပီးစာဖတ်နေတဲ့ ဆရာမလေးကိုမသိမသာခိုးခိုးကြည့်ပီး ရင်ခုန်နေတယ်။ အနီးကပ်ကြည့်မှတော်တော်လေး လှမှန်းပို
သတိထားမိတယ်ဗျ။ စာအုပ်ဖတ်ရင်းမျက်မှောင်ကြုံ.ထားတော့ မျက်ခုံးနှစ်ခုကတွန်.တွန်.လေးဖြစ်နေတာ၊ တစ်ချက်တစ်ချက်နှုတ်ခမ်းပါးပါးလေးကို လျှာနဲ.သပ်လိုက်တာ၊ အသက်ရှူလိုက်တိုင်း
နှိမ့်ချည်မြင့်ချည်ဖြစ်သွားတဲ့ ခါးတိုအင်းကျီကြပ်ကြပ်လေးအောက်က ရုန်းကန်ကြွတက်မတတ်ဖြစ်နေတဲ့ ရင်ချီချီလေးရယ်.. ကျနော်တော့စိတ်တော်တော်လှုပ်ရှားနေပီဗျ။ အဘိုးနေရာမှာကျနော်
သူနာပြုဆရာမလေးကသူ.စာအုပ်ထဲဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားနေလဲဆိုတာ ကျနော်သူ.ကိုသေချာအကဲခတ်ပီး ခေါ်တောအကြည့်နဲ.ကြည့်နေတယ်ဆိုတာတောာင်သတိမထားမိဘူး။
အခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ လူနာအဘိုးရဲ.အသက်ရှူသံရယ်၊ဆရာမလေးရဲ.စာရွက်လှန်တဲ့အသံတဖျတ်ဖျတ်ရယ်ကလွှဲပီးတိတ်ဆိတ်နေတာပေါ့။ ကျနော့်ဖာသာ ဆရာမလေးကိုခိုးခိုးကြည့်ပီး
ဖီးလ်တက်နေတုံး .. ဟိုကောင်သူတောင်းစားကာတွန်းဆရာပြန်ရောက်လာတယ်။ ထမင်းသွားစားမယ်ဖိုးသက်ရေဘာညာဆိုပီး လာခေါ်ရော.. ကျနော့်ကိုစကားပြောရင်းနဲ. ဆရာမလေးကိုမြင်
သွားတော့ မအေပေးက မချိုမချဉ်ပြီတီတီဖြစ်သွားတယ်။
ဆရာမ..ကျနော်ထမင်းသွားစားလိုက်ဦးမယ်ခင်ဗျ လို.ပြောရင်း ဒီကောင့်ကိုအတင်းဆွဲခေါ်လာရတယ်။
ထမင်းဆိုင်ရောက်တော့.. မောင်ရင့်စပါယ်ရှယ်နာ့စ်ကလေးက အနှိပ်ကလေးဗျဆိုပီး တဟီးဟီး လုပ်နေလို. ကျနော်ကဦးအောင်စစ်ကြေငြာထားရသေးတယ်။ ငါကြွေနေပီသူငယ်ချင်းရာ..
အဲ့ဒါငါရင်းနှီးအောင်ဒီညပဲချက်ချင်း အင်ထရိုဝင်တော့မယ်။ လိုအပ်တဲ့ အင်ဖော်မေးရှင်းလေး ရှာပေးနော်ဆိုပီးကြိုကာကွယ်ထားလိုက်တယ်။ စားသောက်ပီးတာနဲ.ညရေးညတာလိုမယ်ထင်တာ
လေးတွေဝယ်ပီး ဒီကောင်ယူလာတဲ့စာအုပ်၃-၄အုပ်နဲ.၊စီးကရက်ဗူးကိုအိတ်တစ်လုံးထဲထည့်ပီး ဆေးရုံပေါ်ပြန်တက်လာခဲ့တယ်။ ဒါတောင်ဟိုကောင်က အပေါ်ထိလိုက်ပို.ရမလားဆိုပီး လုပ်သေး
တာ။ ဟာ.. မလိုပါဘူးဆိုပီးမနည်းနှင်လွှတ်လိုက်ရတယ်။
အခန်းလေးထဲပြန်ဝင်လာတော့ သူနာပြုဆရာမလေးချောချောလေးကပြုံးပြတယ်။ နှုတ်ခမ်းလေးပေါ်လက်ညိုးတင်ပီးရှူးတိုးတိုးဆိုတဲ့အမူအရာလုပ်ပြလို.ကျနော်ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်တယ်။
အဘိုးကြီးကတရှူးရှူးနဲ.အိပ်ပျော်နေတုံးပဲ။ ကျနော်လည်းကုတင်ဘေးတစ်ဖက်ကဆရာမလေးရဲ.မျက်နာချင်းဆိုင်ဖက်က ခုံရှည်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပီး ဟိုကောင်ပေးသွားတဲ့စာအုပ်တွေကိုထုတ်ရင်း
အပျင်းပြေအချိန်ကုန်အောင်ဖတ်ဖို.စာအုပ်ရွေးနေမိတယ်။ ချားလ်စ်ဒစ်ကင်းရဲ. Great Expectations: ပျင်းစရာကြီးဖတ်ရင်းအိပ်ငိုက်လာမယ်။ Jack Londonရဲ. The Sea-Wolf: အိုကေဗျာ..
ဖတ်ချင်လို.လိုက်ရှာနေတာကြာပီ။ စာအုပ်ကိုစဖတ်လိုက်တာ စိတ်အတော်နှစ်သွားတယ်။ တစ္ဆေဆိုတဲ့ပင်လယ်ဓားပြသဘောင်္ပေါ်မှာ ၀ံပုလွေလာဆင်ဆိုတဲ့ဓားပြဗိုလ်ကြီး ကြမ်းနေပီ။ စာရေးဆရာ
လူယဉ်ကျေးလေး George Leach တစ်ယောက် စာတတ်ပေတတ်ဓားပြကြီး Wolf Larsen:ရဲ.ပညာပေးတာခံနေရပီ။ဇတ်ရှိန်တော်တော်တက်လာတယ်။
အဲ့လိုလေသံလေးနဲ.ပြောသံကြားလို.မော့ကြည့်လိုက်တော့..ဆရာမလေးကပြုံးပြုံလေးကြည့်ပီး မေးနေတာတွေ.လို.ကမန်းကတမ်းခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်မိတယ်။ ကုတင်ဘေးက ဗီရိုပုလေးပေါ်မှာရေ
Re: ကျနော့်သူနာပြုဆရာမလေး <achitthatkatoe.net မှကူးယူသည်.>
thinzar on Tue Mar 15, 2011 1:23 am
နွေးဓာတ်ဗူးတွေ၊ကော်ဖီမှုန်.တွေအသင့်ရှိနေတာကိုမတ်ခွက်၂ခွက်ထဲထည့်ပီး သူမဖျော်နေတာကို ငေးကြည့်နေလိုက်တယ်။ ဖျော်လို.ရလာတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ထပီး ဆရာမလေးဆီကယူဖို.
ကျေးဇူးပါခင်ဗျ!! လို.တိုးတိုးလေးပြောလိုက်တော့ ချစ်စဖွယ်သွားတက်ကလေးပေါ်အောင်ပြုံးပြတယ်။
ကျနော်လည်းကော်ဖီမတ်ခွက်လေးကို ကိုင်ရင်းပြူတင်းပေါက်နား မှာသွားရပ်ပီး တစိမ့်စိမ့်အရသာခံသောက်နေမိတယ်။ ကော်ဖီကုန်တော့မှ ခွက်ကို ဗီရိုလေးပေါ်ပြန်တင်ထားလိုက်ရင်းဆရာမ
လေးကိုကြည့်လိုက်တော့ ကော်ဖီခွက်ကိုလက်တစ်ဖက်က ကိုင်ရင်းစာအုပ်ထဲစိတ်ဝင်စားနေတယ်ခင်ဗျ။ ကျနော်ကထိုင်နေတဲ့သူ.ကိုအပေါ်စီးက မိုးထားတော့ သူဖတ်နေတဲ့စာအုပ်နာမည်ကိုမြင်
နေရတယ်။ဆရာလင်းယုန်မောင်မောင်ဘာသာပြန်တဲ့ ရဲခေါင်ပျောက်ကျား အာနက်စတိုချေဂွေဗားရားဆိုပါလားဗျ။ အမယ်..ဒီသူနာပြုဆရာမလေးက တော်လှန်ရေးသမားအတ္ထုပတ္တိတွေ..ဖတ်
ကျနော်ချက်ချင်းပြုံးပြပီး.. လေသံတိုးတိုးနဲ. လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းကိုဆေးကုဖို.ထက်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကိုဆေးကုဖို.ကျနော်ပိုပီးစိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာလို.ပြောလိုက်တော့ အံ့သြပီးဝမ်း
သာသွားတဲ့ပုံစံလေးနဲ.မျက်ခုံးပင့်သွားတယ်။ ဟဲဟဲ.. အဲ့ဒါသူဖတ်နေတဲ့စာအုပ်ထဲကလက်တင်အမေရိကန်တော်လှန်ရေးသမားပြောတဲ့စကားလေဗျ။ ကျနော်အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်ကိုး။
ဖတ်လက်စ စာမျက်နာကိုအသာလေးခေါက်ပီးမှတ်ထားလိုက်ရင်း သူမစာအုပ်ကိုပိတ်လိုက်တယ်။
ဟ!! အကိုက ဒီလိုစာအုပ်တွေဖတ်တယ်ပေါ့? လေသံလေးနဲ.စကားလှမ်းပြောတော့ ကျနော်လည်းသူ.ဘေးကနားကိုဝင်ထိုင်လိုက်ရင်း...
ကျနော့် အကြိုက်ပေါ့ဗျာ.. အလွတ်ရတဲ့အခန်းတွေတောင်ရှိသေးတယ်.. မိန်းကလေးတွေဒီလိုစာအုပ်ဖတ်တာမမြင်ဖူးပါဘူး..
အင်း..ကျမက ဖေတော့မောင်တော့တွေမကြိုက်ဘူးသိလား ..ဒီလိုစာအုပ်တွေဆိုအရူးအမူးပဲရှင့်!!
သိတယ်မလား။ စာအုပ်ဂျပိုးတွေက ချက်ချင်းရင်းနှီးတတ်တာကိုးဗျ။ တစ်ယောက်နဲ.တစ်ယောက်လည်း အထင်ကြီးသလို ဖတ်ထားသမျှအပြန်အလှန်တွေဆွေးနွေးရင်း အလိုလိုပျော်လာတာကိုးနော်။ ကျနော့်သောက်ကျင့်ကလည်း သိတယ်မလား။ စကားနည်းနည်းပြောကြည့်တာနဲ. တဖက်လူဘာကြိုက်လဲဆိုတာချက်ချင်း ခန်.မှန်းနိုင်တာကိုးဗျ။ ဆက်ပီးတိုးတိုး
တိုးတိုးနဲ.စာအကြောင်းပေအကြာင်းဆက်ပြောလိုက်ကြတာ မနက်၅နာရီ အဘိုးနိုးလာမှ ရပ်တော့တယ်ဗျာ။ ၂ယောက်စလုံးသိသိသာသာပျော်သလိုဖြစ်နေကြတယ်။ ဒါကစာသမားတွေပဲနား
မနက်ရောက်တော့ ဆရာမလေးပြန်သွားတယ်။ ပြန်ခါနီး... ညမှပြန်တွေ.မယ်နော် အကို ဆိုပီးအိပ်ချင်မူးတူးအပြုံးလေးနဲ.နှုတ်ဆက်သွားသေးတယ်။
ကျနော်ကတော့ အိပ်ယာနိုးလာပီဖြစ်တဲ့အဘိုးကို ခြေဆုပ်လက်နယ်ပြုပေးရင်း ဆရာမချောချောလေးနဲ.လေပေး ဖြောင့်သွားတဲ့ အတွက် ကျေနပ်ပီးမျက်နာက စပ်ဖြဲဖြဲဖြစ်နေတယ်။ မနက်၆.၃၀
လောက်ကျတော့ အဘွားလေးမေရောက်လာတယ်။ ကျနော့်ဘော်ဒါပဲ လိုက်ပို.ပေးတာပေါ့။ သားလေး!! အိမ်ပြန်ပီး အိပ်တော့ဆိုတာနဲ. ဟုတ်ကဲ့ဆိုပီး ကာတွန်းဆရာနဲ.၂ကောင်သားဆေးရုံ
အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။ အိမ်ကိုတိုက်ရိုက်မပြန်သေးပဲ မြို.ထဲမှာ မနက်စာဝင်စားရင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ဘယ်လိုလဲမနေ.ညက အခြေနေဆိုတဲ့ ကာတွန်းဆရာရဲ.အင်တာဗျူးကို မှိုရတဲ့
မျက်နာနဲ.ကျနော်က တော်တော်ခရီးပေါက်နေပီဟ လို.ကြွားမိသေးတယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့ တံခါးမကြီးဖွင့်ထားတာတွေ.တယ်။ ဟိုကောင်ကအလုပ်ရှိသေးတယ် မင်းလည်းအိပ်လိုက်ဦးဆိုပီး ကျနော့်ကိုဆင်ဝင်အောက်မှာ ချပေးပီးတာနဲ.လစ်သွားရော။
ဗိုက်ကလေးလာတော့ လူလည်းအိပ်ငိုက်လာပီ။ အိမ်ထဲမှာဘယ်သူမှ မမြင်တာနဲ.အပေါ်ကရှပ်ကိုချွတ် ပလိုက်ပီးစွပ်ကျယ်ပဲချန်ထားလိုက်တယ်။ အောက်ကပုဆိုးကိုလည်း ချွတ်ချပလိုက်ပီး
ဘောင်းဘီတိုနဲ.အိမ်ပေါ်ထပ်တက်တဲ့ အိမ်အတွင်းဖက်လှေခါးရင်းအောက်က ကွပ်ပျစ်လေးပေါ် ပက်လက်လှန်လှဲပီးအညောင်းဆန်.ရင်းအိပ်ပျော်သွားတယ်ဗျာ... ... ... ...
ပူအိုက်အိုက်နဲ.ချွေးစေးတွေပြန်လာလို.နိုးလာတယ်။ ချက်ချင်းမထသေးပဲမှိန်းနေရင်း.. ကျနော်တက်အိပ်နေတဲ့ ကွပ်ပျစ်ခြေရင်းဖက်မှာ လူရိပ်တစ်ခုတွေ.လို.မျက်လုံးသေချာမဖွင့်ပဲ ခပ်မှေးမှေး
လုပ်ထားရင်းလှမ်းကြည့်လိုက်တော့.. ... ... ... .... .... .... အိမ်အတွင်းဖက်လှေခါးရင်းအောက်နားမှာဆိုတော့ နည်းနည်းမှောင်ပီး ၀ိုးတ၀ါးဖြစ်နေတယ်ဗျ။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေသေးတော့ သေချာမမြင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဆံပင်ရှည်ရှည်ကိုသေချာစည်းနှောင်ထားပီး ရင်ဘတ်အရှေ.ဖက်ချထားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဆိုတာ
သတိထားမိလိုက်တယ်။ ဟ!! ကျနော်အိပ်နေတဲ့ ခြေရင်းမှာလာပီးဘာကိစ္စ မတ်တပ်လာရပ်နေရတာလဲမသိဘူးဗျ။ ဒါဟိုဖက်ခြံက မနေ.ကရေတွင်းမှာဘာညာဖြစ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာသေချာ
တယ်။ ပြဿနာပဲ။ ကျနော်ကဘောင်းဘီတိုလေးနဲ. အိပ်နေမိတာဗျ။ ဒါကိုကျနော် အိပ်ပျော်နေတယ်ထင်ပီး လာရပ်ကြည့်နေတာလား။ ဘာလာလုပ်နေတာလဲတွေးရခက်ကြီး။ အရေးထဲအိပ်ယာ
နိုးနိုးချင်းထုံးစံအတိုင်း ရှူးကပေါက်ချင်လာပီ။ ဆီးအိမ်ကိုတင်းနေတာပဲ။နေရခက်လိုက်တာဗျာ။ ဒီမိန်းမဘာဖြစ်နေတာလဲမသိဘူး။ တစိမ်းယောက်ျားလေး ကိုဒီလိုခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြည့်တယ်ဆို
တာမြီးကောင်ပေါက်မလေးတွေလုပ်တဲ့အလုပ်လေ။ ခုဟာက ကျနော့်ပုံစံကိုလည်းကြည့်ဦး ၀တ်ထားတာက စွပ်ကျယ်နဲ.ဘောင်းဘီတိုလေး၊ အိပ်နေတဲ့ပုံစံက ပက်လက်ကြီးဖြဲကားနေတာဗျ။
ဒီကြားထဲဘောင်းဘီတိုကအပေါ်ကို လိပ်ပီးပေါင်ဂွကြားနားရောက်နေတော့ ရှူးပေါက်ချင်နေတဲ့ အောက်ကအငယ်ကောင်ကထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေတာလေ။
ကဲဗျာ!! မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ ရှူးကလည်းတအားကိုပေါက်ချင်နေပီ။
အင်းးးး ...အားးးးး ဆိုပီး နိုးတော့မလိုလိုထတော့မလိုလိုလုပ်ပလိုက်တယ်။ လှစ်ကနဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကျနော့်ခြေရင်းမှာရပ်နေရာကနေ မီးဖိုချောင်ဖက်ထွက်ပြေးသွားကရော။ အဲ့ဒါကိုမြင်တော့မှ
သက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်။ အသာလေးထထိုင်ပီး ချွေးတွေရွှဲနစ်နေတဲ့ စွပ်ကျယ်ကိုချွတ်ပီး အင်းကျီတုံးလုံး ဘောင်းဘီတိုလေးနဲ. အိမ်နောက်ဖက်ကအိမ်သာဆီသုတ်သုတ်လေးပြေးလာခဲ့တယ်။
တင်းနေတဲ့ကိစ္စကိုရှင်းပီးတော့မှ အိမ်မကြီးဖက်ပြန်လှည့်လာပီး မီးဖိုချောင်ဖက်တချက်လောက်ကြည့်လိုက်တော့ ခုနကမိန်းမထမင်းပွဲပြင်နေတာတွေ.ရတယ်။
ကိုဖိုးသက်ထမင်းစားလို.ရပါပီ.. လို.ကျနော့်ကိုမကြည့်ပဲလှမ်းပြောတယ်။ အမယ်..ခုနကသူမဟုတ်သလိုပဲဗျ။ ကျနော်လည်းသောက်မြင်ကပ်ကပ်နဲ. မီးဖိုချောင်ဘေစင်မှာမျက်နာသစ်လိုက်ပီး
ထမင်းစားပွဲမှာဝင်ထိုင်၊ သူခူးထားတဲ့ထမင်းပန်းကန်ကိုဆွဲယူပီးစားနေရင်း သေသေချာချာကို ပေါ်တင်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ ပုံစံကိုကြည့်တာနဲ.သိသာတယ်ဗျ။ စိတ်လှုပ်ရှားနေတာ မျက်နာမှာ
ပေါ်လွင်နေတယ်။ ဟင်းတွေခူးခပ်ထည့်ပေးနေတဲ့ပုံစံကကိုကတုန်ကယင်ဖြစ်နေတာလေ။ ရှန်သားအင်းကျီ အပါးလေးဝတ်ထားတယ်။ အသက်ရှူတာမြန်နေတော့ (ခုနကလူမိမလိုဖြစ်သွားတာကိုး)
မို.မောက်နေတဲ့ရင်အစုံက နှိမ့်ချည်မြင့်ချည်ဖြစ်နေတာကို ကျနော်လည်းသေချာမျက်စိအရသာခံကြည့်နေမိတယ်။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် သွယ်လျလျလေးပေမယ့် တင်ပါးကငွါးစွင့်စွင့်လေးနဲ.
ထွားတယ်။ ဆံပင်ကတော်တော်ရှည်ရှည်ဖြောင့်ဖြောင့်လေး။ ခြုံကြည့်ရင် ညိုချောလေးလို.ပြောလို.ရမယ်။ ဒါပေမယ့် မျက်နာက မျက်နာသေကြီး။ ခုမီးဖိုချောင်ထဲ ၂ယောက်သားတူတူရှိနေတာ
တောင် စကားလေးဘာလေးစမလာဘူးဗျ။ ကျနော့်သောက်ကျင့်ကလည်း သိတယ်မလား။ လူမှုရေးမှာ အားလုံးကိုချိုချိုသာသာအောက်ကျို.ပီးပေါင်းတတ်ပေမယ့် ဒီလိုမာရည်ကျောရည်အချိုး
မျိုးလာလုပ်ပြလို.ကတော့ ပြန်ပီးအဖက်မလုပ်တတ်ဘူး။ ခပ်စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်နေတဲ့ ကျနော်နဲ.မျက်လုံးချင်းဆုံမိတိုင်း မျက်လွှာချချသွားတယ်ဗျ။ စိတ်ထဲမှာရယ်ချင်လာပီး နောက်ချင်ပြောင်
အမ!! ဒီအိမ်ကြီးကကြီးလွန်းတော့ ကျနော့်စိတ်ထဲမသိုးမသန်.ဖြစ်လိုက်တာဗျာ.. လို.စကားစပြောတော့ ဘာမှပြန်မပြောပဲကျနော့်ကိုကြည့်နေတယ်။
သရဲတွေဘာတွေများ မခြောက်ဘူးလား? ပြန်မပြောဘူးဗျ..ခေါင်းခါပြတယ်..ဒါပေမယ့် အူတူတူနဲ.ဝေခွဲမရသလိုပုံပေါက်နေတယ်။
အင်း.. ကျနော်အိပ်ပျော်နေတာ အိပ်မက် မက်နေသေးတယ်သိလား.. အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကျနော့်ခြေရင်းမှာလာရပ်နေသလိုလို..ဘာလိုလို
ချက်ပြုတ်ပီးလို.ဘေစင်မှာအိုးခွက်တွေဆေးနေတဲ့ သူ.လက်ထဲကဒန်အိုးပြုတ်ကျသွားတာဗျ။ ဟားဟား.. စိတ်ထဲမှာအကျယ်ကြီးအော်ရယ်နေမိပေမယ့် အပြင်မှာတော့ကျနော့်မျက်နာကရိုးရိုး
သားသားပြောနေသလိုမျက်နာသေလေးလုပ်ထားတယ်။ မလုံမလဲတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပီး ဆေးကြောလက်စကိုဆက်ဆေးနေတယ်။ မှတ်ပလား..သေနာမလေး။ နေဦး မပီးသေးဘူး။ ဖိုးသက်..
အကြောင်းဒင်းသိအောင်ပြဦးမယ်။ စားသောက်တာလက်စသတ်လိုက်ပီး ကျနော့်ထမင်းပန်းကန်ကို ယူပီးကိုယ့်ဖာသာဆေးတော့မလိုလိုနဲ. ဘေစင်မှာရပ်နေတဲ့ သူ.အနားကပ်သွားတယ်။ သူက
သူဆေးပါ့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ.ကျနော့်လက်ထဲကပန်းကန်ကိုလှမ်းယူတယ်။ မပေးပဲလက်ကိုရို.ပီးရှောင်လိုက်တယ်။ ပီးမှဘေစင်မှာရပ်နေတဲ့ သူ.ကိုယ်လုံးကိုကျနော့်ကိုယ်လုံးနဲ.ပူးကပ်လိုက်ရင်းပန်း
ကန်ကိုဆေးဖို.လုပ်လိုက်တဲ့အခါသူက အတင်းကျနော့်လက်ထဲကပြန်လုဖို.လုပ်တယ်။ လက်တွေရှုပ်ပီး လုံးထွေးနေတော့မှပန်းကန်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပီး အင်းကျီလက်ပြတ်ကလေးဝတ်ထားလို.
ပေါ်နေတဲ့သူ.ပုခုံးအိအိလေး၂ဖက်ကို ကျနော့်လက်၂ဖက်နဲ.စုံဖမ်းကိုင်လိုက်ပီးမျက်နာချင်းဆိုင်ရပ်ရင်း သူ.မျက်လုံးထဲကိုစိုက်ကြည့်ပီး.. ... ...
မျက်နာကြောတင်းတာလေးလျှော့လိုက်ရင်... အရမ်းလှသွားမယ်ဗျာ .. လို.တိုးတိုးလေးကပ်ပြောလိုက်တယ်။
ပြောပီးတာနဲ.လှည့်ထွက်ခဲ့လိုက်တယ်။ ... .... .... ......
..... .... .... .... .... .... ...
ညနေရောက်လာတော့ရေတွင်းမှာမဆုံမိအောင် သူတမင်ရှောင်နေမှန်းသိသာနေတယ်ဗျ။ ကျနော်ကတော့ရယ်ချင်နေတယ်။
တစ်အိမ်လုံးမှာ၂ယောက်ထဲရှိနေတာကို ကျနော့်ကိုမသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာကိုးဗျ။ ညနေရေမိုးချိုးပီးတာနဲ. ကျနော့်ဘော်ဒါအကြိုရောက်လာတယ်။ စောသေးတော့ မြို.ထဲတစ်ပတ်လောက်
ပတ်ပီး ကျနော်အရှင်လတ်လတ်တွေ.ချင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုင်နေကြ ဘုံဆိုင်ကိုလိုက်ပို.ခိုင်းသေးတယ်။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာဆရာတွေ၊ကာတွန်းဆရာတွေ၊စာရေးဆရာတွေ အကုန်လုံးစုံပီးဝိုင်းဖွဲ.
ရင်းရှပ်ကီချနေကြတာဗျ။ ကိုယ်အရမ်းသဘောကျခဲ့ရတဲ့ဆရာသမားတွေ ဆိုတော့အတင်းဝင်ရောပီး သူတို.သောက်သမျှဒကာခံလိုက်သေးတယ်။ ကျနော်ကတော့လူနာစောင့်ရမှာရယ်၊ပူလွန်း
တဲ့ရာသီဥတုရယ်ကြောင့်မသောက်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ ဆေးရုံကိုအသွား အရက်ဆိုင်ကထွက်လာတော့ သူငယ်ချင်းကာတွန်းဆရာကို ..ဟေ့ကောင်!! မင်းတို.မြို.က ကဗျာဆရာတွေတအားများနေတာ
ထူးထူးဆန်းဆန်း အတွေးတွေနဲ.ကာတွန်းဆရာတွေထွက်လာတာငါခုသိပီကွ.. ပူရတဲ့ကြားထဲအရက်တွေစွတ်သောက်ပီး ဦးနှောက်ပျက်တဲ့လူတွေများလို.နေမှာ..ဆိုပီးပြောတော့ ကျနော်ဘော်
မိုးချုပ်ခါနီး ဆေးရုံထဲဝင်လာတော့ ကျနော့်သူနာပြုဆရာမချောချောလေးနဲ.တစ်ညလုံးတူတူပူးပူးကပ်ကပ်ထိုင်ရင်း မိုးလင်းပေါက်စကားတွေပြောရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ.အလို
ကျနော့်အဘိုးလည်း သေမလိုဖြစ်နေရာကပြန်ပီး ထူထူထောင်ထောင်လေးဖြစ်စပြုလာပါတယ်။ ဆေးရုံကတော့ဆင်းလို.ရတဲ့အနေအထားမရောက်သေးဘူးပေါ့ဗျာ။ ကျနော်နဲ.သူနာပြုဆရာမလေး
ရဲ.အခြေနေကလည်းတော်တော်လေးတိုးတက်စပြုလာပါပီ။ ညတိုင်းပူးပူးကပ်ကပ်ကလေး ထိုင်ပီး အဘိုးကိုမပြုစုရတဲ့အချိန်တွေဆို စာပေအကြောင်းဆွေးနွေး ငြင်းခုန်ရင်းနဲ.ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို
တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့်စိတ်တွေကလည်း တဖြေးဖြေးတွယ်ငြှိစပြုလာပီဗျ။ ကျနော့်ပင်ကိုယ်ဗီဇက ကိုအတွေးအခေါ်အသိဥာဏ်နည်းတဲ့မိန်းမတွေကိုဆို ဘယ်လောက်ပဲလှလှစိတ်ကိုမ
၀င်စားတတ်ဘူးလေ။ သူနာပြုဆရာမလေးရဲ.နာမည်က နီနီချိုတဲ့ဗျာ။ သူ.အသက်၂၃နှစ်ဆိုတာနဲ.မလိုက်အောင်ရင့်ကျက်နေတယ်ဆိုတာ ကျနော်စကားပြောကြည့်ရင်းနဲ.ပိုပိုသိလာတယ်ဗျ။ အမြဲ
ပီးတော့ သူကိုယ်တိုင်လည်း ကျနော့်အပေါ်သံယောဇဉ်ရှိလာပီဆိုတာ ကျနော်ရိပ်မိလာတယ်လေ။
ရင်းနှီးမှုက မြန်လွန်းတယ်လို.မထင်ပါနဲ.ဗျာ။ ကျနော်ပြောခဲ့သလိုပဲ.. စာသမားအချင်းချင်းကအဲ့လိုပဲ ခဏလေးနဲ.ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသိကျွမ်းခဲ့သလိုချက်ချင်းဖြစ်သွားတတ်တာကိုးဗျ။ မိန်းမတော်
တော်များများရဲ.စိတ်ကလည်းခင်ဗျားတို.သိတဲ့အတိုင်း သူတို.အမြင်မှာ အထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စပြနိုင်ရင်ချက်ချင်း ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်လွယ်တယ်ကော။ အနီလေးနဲ.ကျနော်..(အနီလေးဆိုတာ သူ.ကိုကျနော်ချစ်စနိုးခေါ်တဲ့နာမည်) တစ်ယောက်နောက်ကျနေလို. ရောက်မလာသေးရင်တစ်ယောက်ကတမျှော်မျှော်လုပ်နေတတ်တာ ထူထူထောင်
ထောင်ဖြစ်လာတဲ့လူနာကျနော့်အဘိုးတောင်ဘေးကနေရိပ်မိလာပီဗျ။ ကျနော်တို.၂ယောက် ညဖက်သူမအိပ်သေးတဲ့အချိန် စာအကြောင်းပေအကြောင်းဆွေးနွေးကြရင် အဘိုးတစ်ယောက်
ကုတင်ပေါ်မှာခပ်စောင်းစောင်းမှီပီး ထိုင်ရင်း ကျနော်တို.ပြောသမျှနားထောင်၊ တပြုံးပြုံးနဲ.သဘောတွေကျနေတတ်တယ်။ ဆရာမလေးဆွေးနွေးတဲ့ စာအုပ်မှန်သမျှကျနော်ကဖတ်ဖူးနေတာကို
အဘိုးကောဆရာမလေးပါအထင်ကြီးနေကြတာဗျ။ လူတွေပြောသလိုကျနော့်အဘိုးဂွစာကြီး ဆိုတာလည်း ခုကျနော်နဲ.တွေ.မှကြောင်ပေါက်ကလေးလိုဖြစ်နေတယ်။
ညှင်းသိုးသိုးဖြစ်နေတဲ့ အဘိုးရဲ.နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေ၊မုတ်ဆိတ်မွှေးတွေကျနော်ကိုယ်တိုင်ရိပ်ပေးထားလို. အဘွားလေးမေတောင်အံ့သြတကြီးဖြစ်နေတာလေ။
ဒီလိုပဲသူ.အကြိုက်လေးပြောပီးရိပ်ပေးရတာပေါ့။ အဘိုးကလိမ္မာပါတယ်၊ ချေဂွေဗားရားတောင် ဘိုလီးဗီးယားကိုတော်လှန်ရေးလုပ်ဖို.အသွားမှာ ရုပ်ဖျက်တဲ့အနေနဲ. မုတ်ဆိတ်မွှေး၊နှုတ်ခမ်းမွှေး
တွေရိပ်သွားရတာဗျ၊ ဆေးရုံပေါ်မှာမို.လို.ခဏမျက်နာကြည်လင်သွားအောင်ရိပ်မယ်နော်ဘာညာနဲ. ချော့ပီးပြောတော့.. ချီး..မင့်သဘောပဲကွာဆိုပီးလက်ခံတာပဲလေ။ ကျနော့်သူနာပြုဆရာမ
လေးက..ပြုံးစိစိနဲ.ကြည့်ပီး အကိုကလူလည်နော်လို.တိုးတိုးလေးကပ်ပြောသေးတယ်။ ဆရာမလေးအလစ်မှာ အဘိုးကလည်း.. မြေး..မင်းဆရာမလေးကိုသဘောမကျဘူးလား? အဘိုးဆေးရုံ
ဆင်းရင်လိုက်တောင်းပေးရမလားလို.မေးစပြုလာပီ။ ကျနော်ကလည်းနွားပြာကြီးအောက်သွားမရှိဆိုသလို.. အဟီးဟီး..အဘိုးကလည်းဆိုပီးသဘောတွေကျနေတတ်တာပေါ့။
အသားဖြူဆွတ်ဆွတ်၊ပြုံးချိုချိုမျက်နာပေးလေး၊ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်တောင့်တောင့်လေးနဲ.ဒီလောက်လှတဲ့ဆရာမချောချောလေးကို ကျနော်မကြိုက်ပဲနေပါ့မလားဗျာ။
ပိုပီးသဘောကျတာက.. ရိုးအေးအေးလေးနဲ.သွက်သွက်လက်လက်ကလေးဗျ။ လူကြီးဖြစ်တဲ့ကျနော့် အဘိုးတောင်ငါ့မြေးမလေး ဆိုပီးချစ်သေးရင် ကျနော်ကကောဘာမှမဖြစ်ပဲနေမလားဗျာ။
စတွေ.စကထဲကရုပ်ကလေးကိုကြည့်ပီးကြိတ်ကြွေခဲ့တာပါဆို။ ခုလိုရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်လာတော့ အကြောင်းသိပီး ပိုတောင်တွယ်တာလာပီ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်ကအပြင်ကသူ.ဘ၀အကြောင်းဘာမှ
မသိသေးဘူးဗျ။ သူ.မှာချစ်သူရှိချင်ရှိနေနိုင်တာကိုး။ အဲ့လိုတွေးလိုက်ရင်လူကိုအသားလွတ်နေရင်းဆွေးသလိုဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ မဖြစ်တော့ဘူး ကွဲကာမှကွဲရောဆိုပီး အရဲစွန်.ဖို.ဆုံးဖြတ်
လိုက်တယ်။ တရက်ကျတော့ မနက်ဝေလီဝေလင်းမှာ အဘိုးကိုမျက်နာသစ်ပေး၊မနက်စာကျွေး၊ဆေးတိုက်ပီးလို. ဆရာမလေးနှုတ်ဆက်ပီး အပြန်ကျနော် အခန်းအပြင်ဖက်ထိပြေးလိုက်သွားပီး
အနီလေး.. ခဏ !! လို.လှမ်းအော်လိုက်တော့ ကော်ရစ်ဒါ နားမှာရပ်ပီးကျနော့်ကိုစောင့်နေတယ်။ ဝေလီဝေလင်းဆိုတော့ ဆေးရုံကြီးကော်ရစ်ဒါမှာလူရှင်းနေတယ်ဗျ။
သူ.အနားရောက်သွားတော့ ရော့ဆိုပီးစာအုပ်တစ်အုပ်ထိုးပေးလိုက်တော့ အူကြောင်ကြောင်နဲ.လှမ်းယူသွားတယ်။
ဗီယက်နမ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး ဟိုချီမင်း ရဲ.အတ္ထုပတ္ထိ။ ကျေးဇူးပဲ..အကိုလို.ပြန်ပြောနေတုံး... စာအုပ်နောက်ကျောဖုံးအတွင်းဖက်မှာကျနော် ဆရာမလေးအတွက်ရေးထား
တဲ့စာကြောင်းတွေပါတယ်..ဖတ်ကြည့်လို.ပြောပီးတာနဲ.တခါထဲလှည့်ပီးမြန်မြန်လစ်ပြေးလာခဲ့တယ်။ ရင်တွေအရမ်းခုန်လိုက်တာဗျာ။ စာအုပ်ကိုပြန်လာပေးမလားလို.ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ.နောက်
** ဆရာမလေး မနီနီချို..
ဒါပေမယ့်တရုတ်ပြည်သူသန်းပေါင်းများစွာကို စုစည်းပီးတော်လှန်ခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး မော်စီတုံးရဲ.ဘ၀ကိုကျနော်ပိုပီးသဘောကျတယ်ဗျာ။
သူ.မှာစာပေ၀ါသနာပါတဲ့ ဇနီးမဒမ် ချန်ချင်း ဆိုတဲ့လက်တွဲဖော်ရှိခဲ့လို.ပေါ့။
ဖိုးသက်**မိုးစင်စင်လင်းလို. အဘွားလေးမေ ဆေးရုံမှာလူလာချိန်းပေးပီး သူငယ်ချင်းနဲ.မနက်စာတူတူသွားစားနေတဲ့အထိ လူကဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူးဗျ။
ငါဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့် ဒီလိုလုပ်လိုက်တာလွန်သွားပီလား၊ငါ့ကိုများပစ်ပစ်ခါခါငြင်းလိုက်ရင် ရင်ကွဲရချေရဲ. လို.တွေးရင်းနေမထိထိုင်မသာ နဲ.ကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတယ်။ ဟူးး.... ... ... ....
လူကအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုမှဟိုမအေပေး ကာတွန်းဆရာကလည်း တဟီးဟီးနဲ.ကျောင်းတက်တုံးကအကြောင်းတွေစမြုံ.ပြန်ပြောရင်း အူမြူးနေလို. အင်း..အဲ နဲ.အလိုက်သင့်ပြောပေးနေရ
သေးတယ်ဗျာ။ မနက်စာကိုမြန်မြန်လက်စသတ်စားရင်း အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဟိုအမျိုးသမီး မီးဖိုချောင်ဖက်မှာချက်ပြုတ်နေတာလှမ်းတွေ.ရတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းတစ်လလောက်ရှိ
ပီဆိုတော့..ကျနော့်ကိုအရောဝင်ချင်သလိုလာလာလုပ်နေတာသတိထားမိတယ်။ ဟိုတစ်ခါသောက်မြင်ကပ်ကပ်နဲ. ပုခုံးကိုင်ပီး ညုလိုက်တဲ့ကိစ္စကြောင့်လားဘာလားတော့မသိဘူး။ ကျနော်ဝင်လာ
တာမြင်တော့ အနားမှာဟိုဟာလုပ်သလိုလိုဒီဟာလုပ်သလိုလိုနဲ. ရစ်သီသီလာလုပ်နေတယ်။ သူ.ကိုဂရုကိုမစိုက်အားဘူး။ ကိုယ့်ပြဿနာနဲ.ကိုယ်စိတ်ကအိုက်နေပီလေ။ ထုံးစံအတိုင်း စွပ်ကျယ်၊
ဘောင်းဘီတိုလေးနဲ.လှေကားရင်းနားက ကွပ်ပျစ်ကလေးပေါ်လက်လက်လှန် အိပ်ရင်း စီးကရက်တွေတစ်လိပ်ပီးသောက်နေမိတယ်။ အိပ်လို.ကလည်းမရဘူးဗျာ။ ဒီသူနာပြုလေးကိုကျနော်.. ...
တကယ်ကြွေနေပီဗျ။ ကိုယ့်ဖာသာလည်း ရယ်ချင်နေတယ်။ ဆက်ကျော်သက်အရွယ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ.ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေတာလဲမသိတော့ပါဘူးဗျာ။ ဒုက္ခ!!
မှေးကနဲအိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ ညနေစောင်းဆေးရုံပြန်သွားဖို.ဟိုအမျိုးသမီးကျနော့်ကို လာလှုပ်ပီးနိုးတော့မှထလာဖြစ်တယ်။
ဒီပြဿနာကလည်းတမျိုးဗျာ။ ကျနော့်ကိုလာနိုးတာ ကောင်းကောင်းမနိုးဘူး။ ရင်ဘတ်ကိုလာပွတ်သပ်ပီးနိုးတာဗျ။ ပထမတော့ အိပ်မက်လိုလိုဘာလိုလိုနဲ. ရင်ဘတ်ကိုလက်ဖ၀ါးနဲ.အသာလေး
ပွတ်နေသလိုဖြစ်နေတာ။ ဇတ်ကနဲမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်မှ အဲ့ဒီမိန်းမဗျ။ ရုပ်ကတော့ရုပ်တည်ပဲ.. ထတော့အကို ဆေးရုံသွားတော့မှာမလား..နေ.လည်စာလည်းထမစားဘူး လို.ပြောရင်းစိုက်
ကြည့်နေတာဗျ။ ကျနော်လည်း အူတူတူကောင်မှမဟုတ်တာ စိတ်ထဲမှာ ဘာမှဖီးလ်မလာ လို.မသိချင်ယောင်ဆောင်ပီးနေ နေလိုက်တာ။ ရေမိုးချိုး၊ပြင်ထားတဲ့ထမင်းမြန်မြန်လေးစားလိုက်တယ်
ဆေးရုံကိုဟိုကောင်နဲ.တူတူထွက်လာတော့ မိုးတောင်တော်တော်လေးချုပ်စပြုလာပီ။ ဆေးရုံပေါ်တက်ရမှာ ဒူးမခိုင်သလိုဖြစ်နေတယ်။ စိတ်အားတင်းပီး .. အဘိုးရဲ.အခန်းလေးထဲဝင်လိုက်တော့.. ...
အဘွားလေးမေရယ်.. သူနာပြုဆရာမအသက်ကြီးကြီး တစ်ယောက်ရောက်နေတယ်ဗျ။
သားဖိုးသက်ရေ!! ဘွားလေး မေပြန်မယ်နော်.. ဒီညဆရာမလေး မလာဖြစ်တော့ဘူးလို.ပြောတယ်ကွယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ဟော့ဒီဆရာမကိုထပ်ပီး ငှါးလိုက်တယ်။ ဘွားလေးမေပြန်သွားတော့။အဲ့ဒီ
အသက်နည်းနည်းကြီးတဲ့ဆရာမက ကျမညစာသွားစားဦးမယ်ဆိုပီးထွက်သွားရော။ ကျနော်တော့ ဘယ်လိုနားလည်ရမှန်းမသိပဲ ငိုင်နေမိတယ်။ ဆရာမလေးကဘာလို.မလာတာလဲဗျာ။ ကျနော့်
ကြောင့်လား? သူ.ဖာသာလူမှုရေးကိစ္စကြောင့်လား? ကျနော်အသည်းကွဲချင်သလိုလိုဖြစ်လာပီ။ ဖူးးးးးး!! အကယ်လို.ကျနော့်ကိုရှောင်သွားတာဆိုရင်တောင် ဘယ်ကိုလိုက်လို.လိုက်ရမှန်းမသိ
ဟေ့ကောင်!! လို.ခေါ်သံကြားမှခေါင်းငိုက်စိုက်ချပီး ငိုင်နေတဲ့ကျနော်လန်.ပီးလှမ်း ကြည့်လိုက်တော့ ကျနော့်အဘိုးက ပြုံးစိစိနဲ.စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုလှမ်းပေးနေတာတွေ.လို.လှမ်းယူလိုက်
တယ်။ ဟိုက်!! ဒါဆရာမလေးကိုကျနော်ပေးလိုက်တဲ့ စာအုပ်ပါလား.. ဟိုချီမင်း အတ္ထုပတ္ထိလေ။ နားမလည်နိုင်တဲ့ အကြည့်နဲ. အဘိုးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့.. မြေး!! မင့်ကောင်မလေးလာပေး
သွားတာဟ.. ညနေကဒီကိုလာပေးသွားတာ..အဘိုးဘာမှမဖတ်ထားပါဘူး .. လို.ပြောရင်း မျက်နာကြောတင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ကျနော့်အဘိုးက တဟားဟားရယ်နေတယ်။ ကျနော့်မှာရှက်တောင်
မရှက်အားပဲ တုန်ရီနေတဲ့လက်ချောင်းတွေနဲ. စာအုပ်နောက်ကျောဖုံး အတွင်းဖက်ကိုမြန်မြန်လှန်ကြည့်လိုက်တော့.. ... ... ၀ိုင်းစက်စက်လက်ရေးလေးနဲ.ဒီလိုရေးထားတယ်.. .. ...
ဘာလို.ဒီလိုစကားတွေပြောရဲတာလဲဟင်? ကျမ ကိုအထင်သေးလို.မလား?
ကျမတို.တွေ.တာတခဏတာလောက်နဲ.အကိုက ဘ၀လက်တွဲဖော်ဖြစ်ချင်နေပီဆိုတာကျမ ရယ်ချင်လိုက်တာရှင်ရယ်။
သံယောဇဉ်ဆိုတာ အချိန်ကာလနဲ.ဆိုင်လို.လား ကျနော့် အနီကလေးရာ။ ဒါဆိုကျနော့်ကိုရှောင်ပုန်းသွားတာပေါ့နော်။ စိတ်ထိခိုက်သွားလို. ပြူတင်းပေါက်နားသွားရပ်ပီး စီးကရက်တစ်လိပ်
လောက်ရပ်ပီးဖွာနေမိတယ်။ အဘိုးရှေ.မှာ ကျနော်မျက်ရည်ဝဲနေရင် ကလော်ဆဲခံရမှာစိုးလို.။ ကွဲတယ်ဗျာ။ ကျနော်ကွဲနေပီ။ အရင်ရည်းစား မမရဲ.လက်ချက်နဲ.အကင်းသေစလေးပဲရှိသေးတဲ့
ကျနော့်ရင်ဘတ်ထပ် ပီးထိပြန်ပီ။ ဘယ်မှာလိုက်ရှာရမလဲ ကျနော်ချစ်တဲ့ အနီကလေးရာ..မင်းထင်သလို အပေါစားမဆန်မှန်း အကို.ကိုရှင်းပြခွင့်ကလေးပေးပါလားကွယ်။ တွေတွေငေးနေရင်း
အဘိုးကုတင်ဘေးပြန်ရောက်လာတော့.. ဟေ့ကောင်ငါ့မြေး.. ဟိုချီမင်း ကတကယ်လူပျိုကြီးလား ငါတောင်သတိမထားမိဘူး ဆိုပီး အဘိုးကတဟားဟားရယ်နေလို. အာဗျာ!! ဆိုပီးပိုရှက်သွား
အဲ့ဒီတစ်ညလုံး မိုးသာလင်းသွားတယ် ကျနော်မှိုင်ငေးနေခဲ့ရတာပေါ့။ ဟိုးအရင်ကညတွေလို ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဘ၀လေးမရှိတော့ဘူးဗျာ။
မိုးလင်းလို.ဆေးရုံပေါ်ကဆင်းလာတော့ ကျနော်ခါတိုင်းလိုတက်တက်ကြွကြွမရှိတော့ဘူးဆိုတာတော်တော်သိသာနေတယ်။ သူငယ်ချင်းတောင် ချက်ချင်းရိပ်မိသွားတယ်။ ဖိုးသက်!! ဘာဖြစ်ပြန်
ပီလဲ..မင့်မျက်နာကညတွင်းချင်း အိုစာသွားတယ်ဟ..လို.တောင်မေးယူရတဲ့အထိပဲ။ ကျနော်ဘာမှပြန်မပြောပဲခေါင်းခါပြမိတယ်။ ကားမောင်းနေတဲ့သူ.ကို ကမ်းနားလမ်းကိုမောင်းကွာလို.ပြော
လိုက်တော့..ဘာလုပ်ဖို.လဲလို.အံ့သြတကြီးပြန်မေးလာလို. .. ချီးတယ်ကွာ..မောင်းမှာသာမောင်း ရောက်ရင်ပြောပြမယ်လို.ပိတ်ဟောက်လိုက်မိသေးတယ်။
ကမ်းနားလမ်းက ဘုံဆိုင်မှာ ဘီအီးတစ်လုံးထောင်ပီး စောစောစီးစီး ကျနော့်အသည်းကွဲဇတ်လမ်းကိုရင်ဖွင့်နေမိတယ်။
ငါ့ကို..စုံစမ်းပေးပါကွာ..သူငယ်ချင်းရာ လို.တောင်းပန်တော့ မင်းကတော့ကွာလို.ပြောရင်း မပူနဲ.လို.ဂတိပေးလာတယ်။
မနက်ခင်းစောစောပိုင်းမှာကို ကျနော်တော်တော်လေး မူးသွားတယ်။ ဘီအီးဆိုတာ ကျနော်တို.လိုအအေးပိုင်းကလာတဲ့လူအတွက်ရေမလိုပဲမော့သောက်လို.ရတယ်ဆိုပေမယ့်။ ခုဟာကအိပ်ရေး
ကလည်းမ၀ မသောက်တာလဲကြာပီဆိုတော့ နည်းနည်းခြေလှမ်းမမှန်ချင်တော့ဘူး။ ဟိုကောင်ကလည်းမနက်ကြီးကွာဆိုပီး သောက်မှမသောက်တာကိုးဗျ။ ကျနော်တစ်ယောက်ထဲဆိုတော့ထိ
တာပေါ့။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဘာမှမတွေးတော့ပဲ ထုံးစံအတိုင်းထိုးအိပ်ပလိုက်တယ်။ ဘာဆိုဘာမှမတွေးချင်တော့ဘူးဗျာ။ တုံးကနဲအိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ၎နာရီလောက်မှနိုးလာတော့တယ်။
လူကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကြည်လင်နေသလိုပဲ။ ချွေးတွေ အရက်နံ.တွေနဲ.တကိုယ်လုံးနံစော်နေလို. ရေချိုးတော့မယ်ဆိုပီးရေတွင်းဖက်ကိုထွက်လာတော့ ဟိုမိန်းမရေချိုးရင်းအ
၀တ်လျှော်နေတာတွေ.လို.စိတ်အိုက်သွားတယ်။ သူ.ကိုဂရုမစိုက်ပဲ ခပ်တည်တည်နဲ. စွပ်ကျယ်အင်းကျီကိုချွတ်ပလိုက်ပီး ရေတစ်ပုံးမြန်မြန်လေးငင်၊ ခေါင်းကနေလောင်းချိုးပလိုက်တယ်။
အားးးးးး!! အေးစိမ့်သွားတာပဲ။ နောက်ထပ်တစ်ပုံးထပ်ငင်ပီးထပ်လောင်းချလိုက်တယ်။ ၃-၄ပုံးလောက်ဆက်တိုက်လောင်းလိုက်ပီး ဟိုမိန်းမကို သတိထားမိလို.ကြည့်လိုက်တော့ တရော်ကင်
မွန်း ရည်တွေကိုဇလုံတစ်ခုနဲ.ထည့်ပီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ရင်း သူ.ဆံပင်ရှည်ရှည်တွေကိုလျှော်နေတာတွေ.လို.ကျနော်လည်း တရော်ကင်ပွန်းနဲ.ခေါင်းလျှော်ချင်လာတယ်။ ညစ်နေတာတွေကြည်သွားအောင်လို.အတွေးပေါက်မိလို. သူ.မျက်နာချင်းဆိုင်မှာ ဆောင့်ကြောင့်ဝင်ထိုင်ပီး ကျနော့်ကိုလည်း နည်းနည်းလောက်ဗျာ..ခေါင်းလျှော်ချင်လို. ဆိုပီးပြောလိုက်တယ်။
ဘုရားပေးပေးကျမ်းပေးပေးပါဗျာ.. အဲ့ဒီအချိန်ထိကျနော့်မှာ ဘာစိတ်ယုတ်မာမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကျိန်ဝံ့ပါတယ်။
ရုတ်တရက်ကြီး ဘာမပြောညာမပြောနဲ. တရော်ကင်မွန်း အရည်တွေကိုလက်ခုပ်၂ဖက်နဲ.ခတ်ပီး ကျနော့်ခေါင်းပေါ်လောင်းချလိုက်တော့ လန်.တောင်လန်.သွားတယ်။ ပီးမှဂုတ်ထောက်နေတဲ့
ကျနော့်ဆံပင်တွေကိုသေသေချာချာလက်၂ဖက်နဲ.လျှော်ပေးတော့တာဗျ။ ထထွက်သွားရအောင်လည်းမဟုတ်တတ်ဗျာ။ မထူးတော့ဘူးဆိုပီး ငြိမ်ငြိမ်လေး သူလုပ်သမျှခံနေလိုက်ရတော့တာပေါ့။
ပထမတော့အံ့သြစိတ်ကကြီးစိုးသွားသေးတယ်။ ဒီမိန်းမငါ့ကို ဘာလုပ်တာပါလိမ့်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် တရော်ကင်မွန်းနံ.သင်းသင်းလေးရှူရင်း သူကျနော့်ဆံပင်တွေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်သေချာပွတ်လျှော်ပေးနေတာကို သံမံတလင်းပေါ်ဖင်ထိုင်ချပီး မျက်လုံးမှိတ်လို.ဇိမ်ခံနေမိတယ်။ အိပ်ယာထထလာချင်းတုံးက ညစ်ထေးထေးဖြစ်နေတာ၊
ပူလောင်အိုက်စပ်နေတာတွေပြေပျောက်သွားလို.လူကလည်းတော်တော်လေးနေလို.ထိုင်လို.ကောင်းလာပီ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ.မျက်လုံးဖွင့်ပီး ခေါင်းကိုမသိမသာမော့ရင်း မျက်နာချင်းဆိုင်ကိုကြည့်
လိုက်တော့ ထမီရင်လျားထားတဲ့အောက်က နို.ကြီး၂လုံးကရေစိုထမီအောက်မှာထင်းနေတာပဲဗျာ။ ကျနော့်ကိုခေါင်းလျှော်ပေးနေတော့ စိတ်လှုပ်ရှားနေလို.နေမှာ ကြွတက်လာလိုက်နိမ့်ဆင်းသွား
လိုက်ဖြစ်နေတယ်။ လူသူမနီးတဲ့ခြံဝင်းကျယ်ကြီးထဲက အရိပ်ကောင်းကောင်းသစ်ပင်တွေအောက်က ရေတွင်းမှာ ဖိုနဲ.မ၂ယောက်ထဲ တိတ်တဆိတ်ပူးကပ်နေတော့ စိတ်ကသူ.အလိုလိုဖောက်ပြန်
လာတော့တာပဲ။ ကျနော့်ရေစိုဘောင်းဘီတိုလေး အောက်ကအငယ်ကောင်ကလည်း တဖြေးဖြေးထောင်ပီးထလာခဲ့ပီ။ ကျနော်စိတ်ကိုအတော်ထိန်းနေရတယ်။ မလွယ်ဘူးဗျာ။ ဖူးးးးးးးးးး !!!!
ကျနော်တုတ်တုတ်တောင်မလှုပ်မိသေးဘူး။ ခေါင်းကိုရေလောင်းပေးနေတာရပ်သွားတော့ ကျနော့်ကိုယ်ပေါ်ကပ်ညှိနေတဲ့ တရော်ကင်မွန်း အဖတ်တွေကို ပုခုံးပေါ်ကနေရေလောင်းချပီးဆေးချပေး
နေပြန်တယ်။ အဲ့ဒီမှာပြဿနာစတက်တာဗျ။ ရိုးရိုးရေလောင်းပေးတာမဟုတ်ပဲ ကျနော့်ရင်ဘတ်ပေါ်ကို လက်တစ်ဖက်နဲ.လာပွတ်နေပြန်ပီ။ ကျနော်ရေစိုပီးကပ်နေတဲ့မျက်နာပေါ်ကဆံပင်တွေကို
လက်နဲ.သပ်လိုက်ရင်း သူ.ကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့ သူ.မျက်လုံးတွေကပုံမှန်မဟုတ်ဘူး။ ရေစိုလို.အချောင်းချောင်းဖြစ်နေတဲ့ သူ.ဆံပင်ရှည်တွေက မျက်နာပေါ်မှာတွန်.တွန်.လေးတွေဖြစ်ပီးကပ်
နေတဲ့ကြားထဲက ကျနော့်ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေတဲ့သူ.မျက်လုံးတွေက တစ်ခုခုကိုဆာလောင်နေတယ်ဆိုတာ ကျနော်သိတယ်။ ကျနော့်ရင်ဘတ်ကို ပွတ်နေတဲ့သူ.လက်တွေက ချက်အောက်ဆီးစပ်
နားကိုဆင်းချသွားတယ်။ ရုတ်တရက်လန်.ပီး အောက်ကိုငုံ.ကြည့်လိုက်တော့..
ဟိုက်!! ကျနော့် အငယ်ကောင်က ဘောင်းဘီတို အ၀ါရောက်အောက်ကနေထောင်ထနေတာ သိသိသာသာကြီး။ ဒါကိုသူမလည်းကြည့်နေတယ်ဗျ။
ကျနော့်အသိစိတ်တွေ လွှတ်ထွက်သွားပီဗျာ။ သူမကိုကျနော့် ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းပီး နှုတ်ခမ်းပါးပါးလေးကို ဆွဲစုပ်ပီးနမ်းပလိုက်မိတယ်။ ၂ယောက်သားသံမံတလင်းပေါ်မှာလုံးထွေးကုန်ပီ။
နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်နေတာကိုမလွှတ်ပဲ သူ.နို.ကြီး၂လုံးကိုရေစိုထမီပေါ်ကနေ အုပ်ကိုင်ပီး သေသေချာချာချေပေးနေမိတယ်။ သူ.ပါးစပ်က .. အင်းးးးး!! ဆိုတဲ့သံရှည်ဆွဲပီးညည်းသံတစ်ချက်ပဲထွက်
လာတယ်။ လည်တိုင်ရှည်ရှည်လေးတလျှောက်လဲလျှာနဲ. အပြားလိုက် အစုန်အဆန်လျှက်ပေးလိုက်မိတယ်။ ကျနော်ဆွဲအဖက်မှာဒူးထောက်ပါလာတဲ့ သူမတဖြေးဖြေးပျော့ကျလာပီး သံမံတလင်းပေါ်တအိအိခွေဆင်းလာလို.ကျနော်လက်နဲ.သိုင်းဖက်ပီးထိန်းပေးထားရတယ်။ နမ်းရှုံ.နေရင်းပဲ သူ.ထမီရင်ခေါင်းလျားလေးကို ကျနော်ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ သူမအတင်းသံမံတလင်းပေါ် ပက်လက်လှဲချပီး မျက်လုံးကိုစုံမှိတ် နို.၂လုံးကိုလက်၂ဖက်နဲ.အုပ်ပီး ကားထားတယ်။ ရှက်စိတ်ကြောင့်လားမသိဘူး သူမနှုတ်ခမ်းတွေတဆတ်ဆတ်တုန်နေတယ်။
ကျနော်ကတော့ဘယ်လိုမှနောက်မဆုတ်တော့ဘူးလို.ဆုံးဖြတ်ပီးပီ။ ခါးအထိလျှောကျနေတဲ့ သူ.ရေစိုထမီကို ပေါင်၂ချောင်းဆွဲထောင်ပလိုက်ပီး အကုန်လုံးဆွဲချွတ်ပလိုက်တယ်။ အို!! လို.ကျယ်
ကျယ်လေးအော်ပီး သူ.ေ-ာက်ဖုတ်ကို လက်တစ်ဖက်နဲ.အုပ်ပီး ဖုံး၊ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်က နို.ကြီး၂လုံးကိုကာဖို.ကြိုးစားရှာတယ်။ မှိတ်ထားတဲ့မျက်လုံးလေးတွေပွင့်လာပီး.. ယုန်သူငယ်မလေး
ကျနော့်စိတ်ထဲမှာတော့... ဒီလောက်တောင် ငါ့ကိုသောက်ကျောတင်းထားတဲ့ မိန်းမ... ငါအိပ်ပျော်နေရင်လာလာရပ်ကြည့်ပီး စိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့မိန်းမ မျှော့သွားအောင် -ိုး ပစ်မယ်ဆိုပီး
ကြုံးဝါးနေမိတယ်။ ကျနော်လုပ်နေတာတွေမှားသလားမှန်သလား ဘာမှမတွေးတော့ဘူး။ ကျနော်က
thinzar on Tue Mar 15, 2011 1:30 am
ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒေါသထွက်နေတဲ့ ကျွဲပေါက်တစ်ကောင်လို တရှူးရှူးဖြစ်လာတဲ့အထိလိင်
စိတ်ကြွလာပီကော။ ခါးကိုမတ်၊ဒူးထောက်ပီး ကျနော့်ဘောင်းဘီတို အ၀ါလေးကိုဆွဲချွတ်ချလိုက်တော့ မာန်ဖီနေတဲ့ ကျနော့် အငယ်ကောင်က ဖြောင်းကနဲအပြင်ကိုထွက်ကျလာတယ်။မာတင်းပီး
ပြောင်လက်နေတဲ့ ကျနော့်ပစ္စည်း ကိုငိုမဲ့မဲ့မျက်နာနဲ.ငေးကြည့်နေတယ်။ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာဒေါသနဲ.လိင်စိတ်ရောထွေးနေပီ။ (နင်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုဖြစ်အောင်ဖန်တီးယူခဲ့ပီးတော့ ခုမှကြောက်မနေ
နဲ.လာခဲ့မီးပွင့်အောင်တွယ်ပြမယ်)။ ကျနော်သံမံတလင်းပေါ်ထိုင်ချလိုက်ပီး သူ.နို.၂လုံးပေါ်ကိုကုန်းပီးမျက်နာအပ်လိုက်တယ်။ ဘယ်ဖက်လက်နဲ.နို.အုံကို သေသေချာချာပယ်ပယ်နယ်နယ်ဆုပ်
ချေပေးပီး နို.သီးခေါင်းစူတူတူ ညိုတိုတိုလေးကိုလျှာဖျားလေးနဲ.ကစားပေးနေလိုက်တယ်။ ကျနော့်ညာလက်က သူ.ေ-ာက်ဖုတ်ကိုအုပ်ကိုင်လိုက်ပီး လက်ခလယ်နဲ.အစိလေးကိုကစားပေးလိုက်၊
အကွဲကြောင်းကလေးအတိုင်းပွတ်ပေးနေလိုက်တော့ အသံတိတ်ပီး သူမတစ်ကိုယ်လုံးထွန်.ထွန်.လူးလာတယ်။ နို.၂လုံးကိုဘယ်ညာပြောင်းကိုင်လိုက်ပီးချေပေးလိုက်၊ နို.သီးခေါင်းလေးတွေကို
တပြွတ်ပြွတ်စို.ပေးလိုက်၊လျှာဖျားလေးနဲ.ကစားပေးလိုက်နဲ.တော်တော်လေးကြာလာတော့..ေ-ာက်ဖုတ်ပွတ်ပေးဆွပေးနေတဲ့ ကျနော့်ညာလက်ခလယ်ကို သူ.ေ-ာက်ဖုတ်အ၀နှုတ်ခမ်းသားကို
ပွတ်နေရင်းရုတ်တရက်ထိုးထည့်လိုက်တော့.. အမေ့!! ဆိုပီးသူ.ဆီကအော်သံထွက်လာတယ်။ အရည်တွေတအားရွှဲနေလို.(ကျနော့်ကိုခေါင်းလျှော်ပေးနေကထဲကစိတ်ထနေပုံရတယ်) ချောချော
ရှူရှူ ၀င်သွားပေမယ့်ေ-ာက်ဖုတ်အတွင်းနံရံတွေက ကျနော့်လက်ချောင်းကိုအတင်းဆုတ်ကိုင်ထားသလိုပဲ။ ချက်ချင်းဘာမှဆက်မလုပ်သေးပဲ အပေါ်ပိုင်းမှာတိုက်စစ်ဆက်ဖွင့်နေရင်း နည်းနည်း
အချိန်ကြာလာမှ သူေ-ာက်ဖုတ်ထဲက ကျနော့်လက်ခလယ်ကို အသွင်းအထုတ်မှန်မှန်လေး ကစားပေးနေလိုက်တယ်။
အိုကေ! ဒီလောက်ဆိုရလောက်ပီ။ ကျနော်လည်းတအားတင်းလွန်းလို. အောင့်တောင်အောင့်သလိုဖြစ်လာပီ။
ဆတ်ကနဲထပီး သူ.ပေါင်ကြားထဲဝင်ပီး နေရာယူလိုက်တယ်။ ထိတ်လန်.နေတဲ့မျက်နာလေးနဲ. ကျနော့်ကိုသနားစဖွယ်လှမ်းကြည့်နေတယ်။ မရတော့ဘူးလေ..ဒီအခြေနေကြမှဘယ်လိုနောက်
ဆုတ်လို.ဖြစ်တော့မလဲဗျာ။ ဒူးထောင်ပေါင်ကားပက်လက်ကလေးဖြစ်နေတဲ့ သူမ ခေါင်းကလေးထောင်လာပီး မာတောင့်နေတဲ့ ကျနော့် -ီး ကို အရင်းကတင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ပီး သူ.ေ-ာက်ဖုတ်
၀မှာတေ့နေတာကိုလှမ်းကြည့်ပီး အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်ထားရင်း အံကြိတ်ထားတယ်။ ဖိသွင်းချလိုက်တယ်။ အားးးးး!! နွေးနေတာပဲ... စီးလိုက်တဲ့ေ-ာက်ဖုတ်လေးဗျာ။ ကျနော်ခါးကိုခပ်
ဆဆလေးကစားရင်း ရှေ.တိုးနောက်ငင် အ၀င်ချောအောင်လုပ်ပေးနေတယ်။ ဒီမိန်းမ တော်တော်သတ္တိရှိပုံရတယ်ဗျ။ အံကြိတ် မျက်လုံးလေးမှေးပီး အသံမထွက်၊ နည်းနည်းလေးမှမရုန်း မကန်
ပဲအောင့်ခံနေတာဗျ။ ကျနော်အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူသွင်းလိုက်ပီး အင့်ကနဲနေအောင်ဆောင့်ချပလိုက်တော့ အဆုံးထိဝင်သွားမှ.. အမေရေ!! လို.အကျယ်ကြီး သူ.ပါးစပ်ကအော်သံထွက်လာတယ်။
မရတော့ဘူးဗျာ။ ကျနော်တိရိစ္ဆာန်စိတ်ဝင်သွားပီ။ မညှာတာနိုင်တော့ဘူး။ လက်၂ဖက်နဲ.သူ.ပေါင်၂လုံးကိုဒူးခေါက်ကွေးနားက နေကိုင်ပီးဒူးနဲ.သူ.ရင်ဘတ်ထိအောင်တွန်းကပ်ပေးလိုက်တော့..
ေ-ာက်ဖုတ်ထဲ ကျနော့် -ီး အ၀င်အထွက်ကိုမြင်နေရတယ်။ ဖင်အိအိကြီးတွေကလည်း သံမံတလင်းအောက်ကိုမထိတော့ပဲကြွတက်လာတော့ ကြည့်ရတာစိတ်က ပိုပီးကြွလာတယ်။ တဖန်းဖန်းမြည်အောင်ဆောင့်ဆောင့်ချပီး အားပါးတရ -ိုး နေမိတယ်။ ဒီလောက်မီးကုန်ယမ်းကုန် ဆောင့်ပီး -ိုး နေမှတော့ ဘယ်လိုမှ ကြာကြာမထိန်းနိုင်တော့ဘူးဗျာ။ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်သူ.နို.
အကြီးကြီး၂လုံးကိုစုံလှမ်းကိုင်ချေရင်း ရှိသမျှအားတွေ အကုန်သုံးပီး ဆောင့် -ိုး ရင်းသုတ်ရည် ပူပူတွေသူ.ေ-ာက်ဖုတ်ထဲပန်းထုတ်ပလိုက်မိတယ်။ ချက်ချင်းလူလည်းနုံးခွေသွားပီး သူမအပေါ်
ကိုမှောက်အိပ်လိုက်ရင်း နှုတ်ခမ်းပါးပါးလေးကိုစုပ်ရင်းဇိမ်နဲ.အမောဖြေနေလိုက်တယ်ဗျာ။ကျနော်သတိဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်နာမည်တောင်မသိသေးတဲ့ အဲ့ဒီအမျိုးသမီး သံမံတင်းပေါ်မှာခွေခွေလေးလှဲနေတုံးပဲ။
မျက်လုံးတွေက ကျနော့်ကိုဆွေးဆွေးလေးငေးကြည့်နေတာပေါ့။ ၀စ်လစ်စလစ်ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်လုံးလေးကိုဆွဲထူလိုက်တော့ ခွေခေါက်ခေါက်ကလေး ပါလာတယ်။ စဉ့်အင်တုံထဲက ရေတွေကိုဖလား
နဲ.ခတ်ပီး သူ.ကိုယ်လုံးလေးကိုရေလောင်းချပွတ်သပ်ပီး ကျနော်သန်.စင်ပေးနေတော့ ကလေးလေးလိုငြိမ်ခံနေရှာတယ်။ လက်နဲ.ဖုံးထားတဲ့သူ.ေ-ာက်ဖုတ်လေးကိုရေဆေးပေးဖို.ဆွဲဖယ်လိုက်
တော့သွေးစ လေးတွေပေနေတာတွေ.ရလို. အံ့သြတကြီးသူ.မျက်နာကိုကြည့်လိုက်တော့ အောက်နှုတ်ခမ်းကိုသွားဖြူဖြူလေးနဲ. ကိုက်ပီးမျက်နာလွှဲသွားတယ်။ ဒီမိန်းမက အပျိုစင်ပဲလားဗျာ။
ကျနော်တော့မယုံနိုင်ပါဘူး။ သူ.ေ-ာက်ဖုတ်ကိုရေသေချာဆေးပေး၊တကိုယ်လုံးကိုသန်.အောင်ရေလောင်းချိုးပေးပီးမှ... ထတော့!! ရေသုတ်အ၀တ်လဲတော့ လို.ပြောတော့တုန်တုန်ရီရီနဲ.ထရပ်လိုက်
ပီးရေတွင်းဘေးအုတ်ခုံပေါ်က တဘက်နဲ.ရေလဲထမီကိုယူပီးအ၀တ်တွေလှဲ..ဆံပင်ရှည်တွေကိုခြောက်အောင်သုတ်နေတယ်။ ကျနော်လည်း ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်လက်သန်.စင်ရေ၄-၅-၁၀ခွက်လောက်
အိမ်ပေါ်တက်အ၀တ်အစားလဲပီး ပြန်ဆင်းလာတော့.. ဟိုမိန်းမထမင်းပွဲပြင်နေတာတွေ.လို.ထမင်းစားပွဲ ခပ်တည်တည်ဝင်ထိုင်ပီး သူခူးခပ်ပေးတာဝင်စားနေမိတယ်။
၂ယောက်လုံးစကားမပြောပဲတိတ်ဆိတ်နေမိတယ်။ စားသောက်ပီးလို. ပန်းကန်ခွက်ယောက်တွေ သူမဆေးကြောနေတုံးကျနော်ထလာပီး သူ.ဘေးမှာသွားရပ်လိုက်တော့ ကျနော့်ကိုမော့ကြည့်
တယ်။ ရှပ်အင်းကျီဖားဖားဝတ်ထားပီး၊ခေါင်းလျှော်ပီးစ သူမဟန်ပန်လေးက ကပိုကရိုလေးနဲ.ကြည့်လို.ကောင်းနေတယ်။ ကျနော်နဲ.မျက်နာချင်းဆိုင်ဖြစ်အောင်သူ.ပုခုံးလေးကိုဆွဲလှည့်လိုက်ပီး
နဖူးပြင်ပြောင်ပြောင်လေးကိုကျနော့်လက်ဖ၀ါးနဲ.သာသာဖွဖွပွတ်ပေးရင်း.. ... ....
ကျနော်.. တမင်ယုတ်မာချင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ.. ခင်ဗျားသိမှာပါ.. လို.သူ.မျက်လုံးတွေကိုစိုက်ကြည့်ရင်းပြောလိုက်တော့မျက်လွှာချပီး ငြိမ်နေတယ်။
.......... ........ ........... ........... ............. ...........
.......... ......... ........... ......... ............ ...... .........
............ .......... ........ .......... .......... .......... .......
အိမ်ကနေထုံးစံအတိုင်းဆေးရုံကိုထွက်လာတော့ ဒီနေ.ဖြစ်ခဲ့တာတွေမေ့သွားပီဗျ။ ခင်ဗျားတို.ဘယ်လိုထင်လို.လဲ? ဒီနေ.ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စက အချစ်မှမပါတာလေဗျာ။ ယောက်ျားတွေဟာဘယ်
နေရာမှာမဆို၊ကမ္ဘာပေါ်ကဘယ်မိန်းမနဲ.မဆို အိပ်ဖို.အသင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ(မလိမ်မညာကြေး)ခင်ဗျားတို.၀န်ခံရလိမ့်မယ်။ ကျနော်ပြောတာဟုတ်သလား? မိန်းမတွေဆိုတာ ကိုယ်ဖီးလ်လာတဲ့
မိန်းမပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အိပ်မိတဲ့မိန်းမတိုင်းကိုသံယောဇဉ်ထားဖို.ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးလေ။ ခုဟာကတိုက်ဆိုင်လို.ဖြစ်သွားတာမျိုးပါ။ ကျနော့်ကိုယောက်ျားကောင်းမပီသတဲ့ကောင်လို.
ခင်ဗျားတို.မြင်ချင်မြင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တမ်း ဒီလိုအခြေနေတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခါ ကိုယ့်ကာမစိတ်ကို ကိုယ်ထိန်းနိုင်ဖို.ဆိုတာပြောသလောက်တော့မလွယ်ဘူးဗျ။ထားလိုက်ပါတော့
ကျနော့်ဇတ်လမ်းကိုဆက်ပြောရရင်.. ကျနော်ချစ်မိနေတဲ့သူနာပြုဆရာမလေးကျနော့်ကို ရှောင်သွားတာတော်တော်လည်းစိတ်ထိခိုက်နေမိတယ်ဗျာ။
ကျနော်သူ.ကိုအရမ်းသဘောကျနေမိပီ။ ဘ၀မှာအိမ်ထောင်ပြုရင် ကျနော့်ဘ၀ ကြင်ဖော်ဟာအဲ့ဒီလို စာတတ်ပေတတ်တစ်ယောက်၊စိတ်နှလုံးကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်စေချင်ခဲ့တာလေ။
ကျနော်ချဉ်းကပ်ပုံချဉ်းကပ်နည်းမှားသွားပီလားလို.တွေးနေမိတယ်။ ခုအဘိုးကို ညဖက်ပြုစုဖို. ငှါးထားတဲ့ နာ့စ်မအသက်ခပ်ကြီးကြီးတစ်ယောက်ကိုမသိမသာ အစ်ကြည့်တော့ လောလောဆယ်
ဆေးရုံကနေခွင့်ယူထားတယ်လို.ပဲသိရတယ်။ ကျနော်နေရတအားခက်တဲ့ ချစ်ဝေဒနာကိုခံစားနေရပီဗျာ။ ကျနော့်အဘိုးလည်းဆေးရုံကနေဆင်းရခါနီးလာပီ။ ဒီလိုဆိုကျနော်အသည်းကွဲပီးပြန်
မင့်ဆရာမလေးက မြို.ပြင်မှာနေတယ်..ငါလိပ်စာရလာပီ..ပီးခဲ့တဲ့၃-၄ရက်က ငါတို.မြို.တစ်ဖက်ကမ်းက သူ.ဇာတိကို သူ.အဖေနေမကောင်းတာပြုစုဖို.ပြန်သွားတာ..
... ခုမနေ.ညက ပြန်ရောက်လာပီ..မင့်ကိုရှောင်တာတော့မဟုတ်ဘူးလို. ငါထင်တာပဲလေ.. မင်းခုသူ.ဆီလိုက်သွားချင်လားHuh
ကျနော့်ဘော်ဒါကာတွန်းဆရာကမနက်ခင်း ဆေးရုံမှာလာကြိုရင်း အဲ့လိုပြောလာတော့ကျနော်ရင်တွေအရမ်း ခုန်လာတယ်။
ပြောရင်းအိမ်ကိုခဏပြန်ရေမိုးချိုး အ၀တ်အစားလဲပီး ဒီကောင်နဲ.အတူတူအိမ်ကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ မြို.ပြင်ရပ်ကွက်တစ်ခုက ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးတစ်ထပ်အိမ်ကလေးရှေ.မှာကျနော့်ကိုချထား
ပေးပီး...ကဲ!! Do or Die ပဲသူငယ်ချင်း လို.ပြောပီးကာတွန်းဆရာလစ်သွားရော။ ကျနော်လည်းတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ခြံဝင်းထဲရင်တထိတ်ထိတ်နဲ.၀င်လာခဲ့တယ်။ အိမ်ပေါက်ဝရောက်တော့ ဧည့်ခန်း
ကျနော့်ဆရာမလေးက အံ့သြနေတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ.ဧည့်ခန်းထဲက ပက်လက်ကုလားထိုင်ပေါ်မှာစာဖတ်နေရာက .. အကို!! လို.လှမ်းခေါ်တယ်။
ကျနော်တစ်ယောက်လေအဝှေ.မှာလွှင့်ပါသွားတဲ့ စက္ကူတစ်စလိုပဲ ဆရာမလေးအနားကိုဖတ်ကနဲ ကပ်သွားတယ်။
ဆွေးမြေ့နေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ. အသနားခံတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ.ဆရာမလေးကိုစိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ ကျနော့်ဆရာမလေးက ချောလိုက်တာဗျာ။ တီရှပ်အပြာလက်ပြတ်ကလေးဝတ်ထားတော့ ဖြူဝင်း
နေတဲ့လက်မောင်းသွယ်သွယ်လေးကို ဆွဲကိုက်လိုက်ချင်စရာလေးဗျာ။ အိမ်နေရင်းထမီ အနက်ခံပေါ်မှာပန်းပွင့် အနီကလေးတွေပါတဲ့တပတ်နွမ်းလေးနဲ.၊ခါတိုင်းမြင်နေကျ ဆံထုံးလေးအစားဆံပင်
နက်နက်ရှည်ရှည်လေးတွေကို ပခုံးကျော်ရုံဖားလျားလေးချထားတယ်။ ကျနော့်ကိုဒီလိုရုတ်တရက်မြင်ရလိမ့်မယ်လို.ထင်ထားပုံမရတော့ ကြောင်ငေးကြည့်နေရှာတယ်။ ကျနော့်ရင်ဘတ်ထဲမှာပြော
ချင်တဲ့စကားတွေအများကြီး ဒါပေမယ့်ထွက်မလာဘူး။စိတ်ထဲမှာတော့ အော်ဟစ်နေမိတယ်.. ဟေ့ကောင်!! ဖိုးသက်ပြောလေကွာ..မြန်မြန်..ဒီတစ်ခါမှမပြောရဲရင်မင်းလိုချင်တဲ့အရာကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။ ပြောလိုက်တော့!! မင်းဘယ်လောက်သူ.ကိုမြတ်နိုးတယ်ဆိုတာပြောလိုက်..ပြောသာပြောချလိုက်။
ဖန်ဂေါ်လီလုံးလေးတွေလို ၀ိုင်းစက်ကြည်လင်နေတဲ့မျက်လုံးလေးတွေ နဲ.ငေးကြောင်ကြည့်နေတဲ့ ကျနော့်သူနာပြုဆရာမလေးရဲ.မျက်နာ နားကိုတိုးကပ်လိုက်ရင်း အဆက်စပ်မဲ့နေတဲ့စကားတွေဆက်
ဆရာမလေးရယ်.. ကျနော်လေ..ရမလားလို.အပျော်ကြံမိတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ.. ... ကျနော့်ကိုရှောင်မပြေးပါနဲ.ဗျာ.. ကျနော်ဆရာမလေးမရှိပဲ နေလို.မတတ်တော့လို.ပါ...
ကျနော့်ဘ၀မှာ ဒီလိုကောင်မလေးမျိုးတစ်ခါမှာ မတွေ.ဖူးခဲ့ပါဘူး..ကျနော်ဆရာမလေးကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုး ချစ်တာပါနော်..ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်မျိုးနဲ.မှ ကျနော့်ကိုမငြင်းပေးပါနဲ.ဗျာ..
ခုဆိုနေ.တိုင်း ကျနော်ငရဲကျနေသလိုပဲ..ကျနော့်ကိုသနားပါဗျာ.. နော်ဆရာမလေး.. ... ...နော်
ဆီမန်းမန်းနေသလို တတွတ်တွတ်လျှောက်ပြောနေတဲ့ကျနော့်ကို ကြည့်နေရင်း ဆရာမလေးတခစ်ခစ်ရယ်လိုက်တော့ကျနော်အံ့သြပီး ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်။
အကို..ရည်းစားစကားပြောတာကြီးကလည်း..ရယ်ချင်စရာကြီး..အနောက်ကကျားလိုက်သလိုတတွတ်တွတ်ရွတ်နေတယ်.. ပီးတော့သူများအိမ်ထဲလာပီး ချစ်စကားကြိုက်စကားပြောရတယ်လို.ရှင်..ဆိုပီး တခစ်ခစ်ရယ်နေပြန်တယ်။
အကို.ကိုရှောင်ပြေးနေတာလို. ဘယ်သူကပြောခဲ့လို.လဲ.. အနီ.ဖေဖေနေမကောင်းလို.ခွင့်ယူပီး ပြန်သွားတာလေ.. အကိုကဘာဖြစ်နေတာလဲ..သူ.ကိုယ်သူ၁၆နှစ်သားကလေးမှတ်နေလားမသိဘူး.. ပီးတော့သူများကို ရည်းစားစာပေးတာကလည်း ဘယ်လိုကြီးရေးလာမှန်းမသိဘူး..ခစ်ခစ်... ... ရယ်လည်းရယ်ချင်တယ်..အမြင်လည်းကပ်တယ်..တကထဲမှပဲ..ခုကောဘာကိစ္စမျက်နာငယ်လေးနဲ. ဖြစ်နေတာလဲ??
ရယ်ပြုံးနေတဲ့မျက်နာလေးနဲ. အဲ့လိုပြောလာတော့.. ကျနော်စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘူး..
ပျော်လွန်းလို.ရင်ထဲမှာလှိုက်ကနဲဖြစ်ပီး လက်တစ်ကမ်းလောက်အကွာမှာရပ်နေတဲ့ ကျနော့်ဆရာမလေးကိုခါးကျင်ကျင်လေးက နေဆွဲကိုင်ပီး ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းပီး တင်းကျပ်နေအောင်
ဖက်ထားမိတယ်။ ဆရာမလေး မနီနီချိုလေးရာ..ကျနော့်အချစ်ကလေး..ကျနော့်အသက်ဗူးကလေး...ကျနော့်မေးစိထိရုံကလေးဖြစ်နေတဲ့ အနီလေးရဲ.ခေါင်းပေါ်ကဆံပင်နက်နက်မွှေးမွှေးလေး
တွေကို ကျနော့်နှာခေါင်းနဲ.ဖိကပ်ပီးနမ်းရှုံ.နေမိတယ်။ ကျနော့်ရင်ထဲမှာ မြတ်နိုးတွယ်တာမှုတွေအပြည့်အသိပ်နဲ.လင်းမြမြခံစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်လို.ပေါ့လေ။
အကို..အနီ အသက်ရှူကျပ်လာပီရှင့်.. ဖက်ထားတာနည်းနည်းလျှော့ပေး.. လို.ပြောလာမှ ကျနော်သူ.ကိုအသားကုန်ပွေ.ဖက်ထားမိတယ်ဆိုတာသတိရလို.လျှော့ပေးလိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့်ခါးကျင်ကျင်လေးကို လက်၂ဖက်နဲ.စုံကိုင်ထားပီးမလွှတ်ပေးသေးပဲနဲ. ဆရာမလေးကိုငုံ.ကြည့်လိုက်တော့ ချစ်ရည်လွှမ်းနေတဲ့ မျက်နာနီနီကလေးနဲ. ကျနော့်ကိုရွှန်းရွှန်းစားစားမော့
အကိုက လူ အ ကြီးပဲ..သိလား.. ကျနော့်နှုတ်ခမ်းကို သူ.လက်ချောင်းပျော့ပျော့လေးတွေနဲ.လာထိကပ်ဆော့ကစားရင်း ဆရာမလေးကပြောတယ်။
ဟုတ်တယ်လေ.. ဒီကဖြင့်သူနဲ.တူတူပူးကပ်ပီးထိုင်ရင်း ရင်တွေတဒိုင်းဒိုင်းခုန်...သူ.မျက်နာကိုခိုးခိုးကြည့်ပီး..စိတ်တွေလှုပ်ရှား..
ခစ်ခစ်..ဒါကြောင့်အကိုလူ အ လို.ပြောတာပေါ့
ကျနော်ဆရာမလေးကို..ချစ်နေတယ်ဆိုတာလည်း ရိပ်မိတယ်ပေါ့ ဒါဆို??
မတော်တဆ လက်ချင်းကိုယ်လုံးချင်းထိမိ သွားရင် အကို ကခြေတုန်လက်တုန်ဖြစ်ဖြစ်နေတာ သိတာပေါ့လို.
ပြောပီးပီလေ.. အကိုရေးတဲ့ရည်းစားစာကြီးကိုရယ်ချင်လို. နောက်လိုက်တာပါဆို.. အကို.ကိုအနီစကားစပြောကထဲက သဘောကျနေတာသိလား..အနီ.ဘ၀မှာရည်းစားသနာရယ်လို.
တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဖူးဘူး..အကိုနဲ.ရင်းနှီးတာကြာလာလေလေ ပိုပီးသံယောဇဉ်တွယ်လာလေလေ.. နောက်ဆုံးအကို မပြောရဲရင်တောင်မှ .. အနီ မရှက်ဘူးနော်..အနီကိုယ်တိုင် အကို.ကိုရည်းစားစာ
ပေးမလို.စဉ်းစားနေတာ.. ဟိုချီမင်းတွေ၊မော်စီတုံးတွေတော့ မပါဘူးပေါ့လေ.. ခစ်ခစ်..
လျှာကလေးတစ်လစ်ထုတ်ပီးကျနော့်ကို ပြောင်ချော်ချော်လုပ်ပြနေတဲ့ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲက ချစ်သူဆရာမလေးကိုကြည့်ပီးကျနော်မရိုးမရွဖြစ်လာပီဗျာ။
ခါးကျင်ကျင်လေးကိုစုံကိုင်ပီးဖက်ထားတဲ့ ကျနော့်လက်၂ဖက်ကို အောက်ကိုလျှောချလိုက်ပီး တင်ပါးလုံးလုံးလေးကို လက်ဖ၀ါး၂ခုနဲ.သေချာကိုင်ပီး ကျနော်ဆွဲမလိုက်တော့ ခြေဖျားလေးထောက်ပီး မျက်နာလေးမော့လာတယ်။
အကို!! အင်းးးးး.... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ...
ဆရာမလေးမျက်တောင်တွေစင်းကျသွားပီ။ ဘာစကားသံမှလဲမထွက်နိုင်တော့ဘူး။ စင်ယော်ငှက်ကလေးနဲ.တူတဲ့ နှုတ်ခမ်းကွေးကွေးအိအိလေးကိုကျနော် ဆွဲစုပ်ပီးနမ်းလိုက်တာကိုး။ ငြိမ်ငြိမ်
လေးနေပီး နှုတ်ခမ်းကိုအတင်းစိထားတယ်။ ပုံမှန်လေးနမ်းစုပ်နေရာက ကျနော့်အောက်နှုတ်ခမ်းကိုသူ.နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာထဲမ၀င် ၀င်အောင်ထိုးထည့်ပီး သူ.အပေါ်နှုတ်ခမ်းကိုညင်ညင်သာသာ
ယုယုယယလေးစုပ်ပေးနေမိတယ်။ တုံ.ပြန်မှုကို ကြည့်ချင်းအားဖြင့် ကျနော့်ဆရာမလေးဟာ ဖိုသတ္တ၀ါနဲ.ထိတွေ.ဖူးပုံမပေါ်ဘူးဆိုတာသေချာနေတယ်။ ၅မိနစ်လောက်ဆက်တိုက်စုပ်နမ်းပေးနေ
ပီးလွှတ်ပေးလိုက်တော့.. ကျနော့်ရင်ခွင်ကိုမှီတွယ်လာရင်း တကိုယ်လုံးပျော့ခွေနေလို. ဖေးမပီးပွေ.ထားပေးရတယ်။ ဘာနေရာကိုမှမထိရသေးဘူး။ တင်ပါးလေးသာသာကိုင်ပီးနှုတ်ခမ်းလေး
စုပ်နမ်းတာနဲ. ကျနော့် အနီကလေးခမျာဒီလိုဖြစ်သွားပီ။ အနီလေး.. ဘာဖြစ်တာလဲလို.မေးတော့ ဘာမှပြန်မပြောပဲ.. မျက်လုံးလေးမှိတ်ပီး ကျနော့်ရင်ဘတ်ကိုပါးဖောင်းဖောင်းလေးအပ်ပီးမှီတွယ်ထားရှာတယ်။
အကို!! အနီလေ .. ဒူးတွေပျော့နေတယ်သိလား ...ရင်ထဲမှာလည်းတစ်ဆို.ဆို.ကြီး ဆိုပီး အသက်ပြင်းပြင်းရှူနေရတဲ့အသံနဲ.ကျနော့်ကို မော့မကြည့်ပဲပြောလာတယ်ဗျာ။
thinzar on Tue Mar 15, 2011 1:31 am
ကျနော်ပွေ.ထားတဲ့ ကျနော့်ချစ်သူဆရာမလေးဟာဘာမှအတွေ.အကြုံမရှိရှာသေးတဲ့ အရိုင်းမလေးဆိုတာ ခုလက်တွေ.ကြုံနေရတာတွေကြည့်တာနဲ.သိသာနေတယ်။ အနီလေး.. ခုအိမ်မှာဘယ်သူ
ရှိသေးလဲ..လို.ကျနော်သူ.ကျောလေးကိုပွတ်ရင်းမေးလိုက်တော့.. ဟင့်အင်း.. အကိုလို. မော့မကြည့်ပဲတုန်ယင်နေတဲ့အသံကလေးနဲ.ပြန်ဖြေရှာတယ်။ ဧည့်ခန်းထဲမှာ အပြင်ကမြင်နေရတယ်.. အနီ.
အိပ်ခန်းထဲသွားရအောင်နော်လို.ပြောတော့ဘာမှပြန်မပြောပဲ ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲမှာ ငြိမ်နေရှာတယ်။ ပေါင်၁၀၀ စွန်းစွန်းလေးပဲလေးမယ်ထင်ရတဲ့သူ.ကိုယ်လုံးလေးကို ကျနော်ဆွဲပွေ.ချီလိုက်တော့..
စွေ.ကနဲပါလာတယ်။ ဧည့်ခန်းနဲ.ကပ်လျှက် အိပ်ခန်းတံခါးဝကိုရောက်တော့ ကျနော်ပွေ.ချီထားတဲ့ အနီက လက်အမူအရာနဲ.၀င်ဖို.ပြတယ်။ အိပ်ခန်းထဲပွေ.ချီထားလျှက်နဲ.ရောက်သွားပီး အနီလေး
ကိုအိပ်ယာပေါ်အသာချပီး ကုတင်အောက်ကိုခြေချပီးထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ကျနော်သတိရှိရှိနဲ.အိပ်ခန်းတံခါးကိုကလန်.ထိုးလိုက်တယ်။
ပြန်လှည့်လာပီးကြည့်လိုက်တော့ ကျနော့်ချစ်သူလေးခမျာတောင့်တောင့်ကလေး လက်နောက်ပြန်ထောက်ပီး ကုတင်ပေါ်ထိုင်လို.ကျနော့်ကိုရီဝေေ၀ကြည့်နေတယ်။
ခုနကသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်နေတဲ့ပုခုံးကျော်ရုံဆံပင်လေးတွေက ဖွာလံကျဲနေရှာပီ။ တကိုယ်လုံးလည်းသိသိသာသာတုန်တုန်ရီရီဖြစ်နေတယ်။ မျက်နာကလေးက ပန်းသွေးရောင်သမ်းနေတယ်။
ရှင်!! အကို .. လို.ပြန်ဖြေလာတယ်
ကျနော်.. အနီ.လေးကို... လေ.. ဆိုပီးဆက်ပြောဖို.ဆွံ. အ နေမိတယ်
အကို.ကို အနီအရမ်းချစ်နေပီသိလား .. အကို.သဘော..အနီမကြောက်ဘူး.. လို.အံကြိတ်ထားတဲ့လေသံလေးနဲ.ဆက်ပြောတယ်
(ဒါဟာကျနော့်ကိုတော်တော် ရှော့ခ်ရ သွားစေတယ်ဗျ။ ကျနော့်ချစ်သူလေးဟာ ဘာမှအတွေ.ကြုံမရှိဘူးဆိုတာ ကျနော်သေချာတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားမိန်းမတွေလို လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မူနေတာတို.
ရုန်းကန်တာတို.၊ ငြင်းဆန်တာတို.ဘာတစ်ခုမှမလုပ်တဲ့အပြင် ခုလိုပြန်ပြောတာတွေဟာ ကျနော့်အတွက် အံ့သြစရာကောင်းနေတယ်၊ ဘာကြောင့်အတွေ.အကြုံမရှိတဲ့ သူကဒီလောက်သတ္တိရှိနေ
ကုတင်နားကိုတိုးကပ်သွားပီး အနီ.ကိုဆွဲထူမယူလိုက်တော့ အလိုက်သင့်ကလေးပါလာတယ်။
ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းပီးခပ်တင်းတင်းဖက်ထားမိပြန်တယ်။ ၂ယောက်သားမတ်တပ်ရပ်လျှက်အကြာကြီး ဖက်ထားပီးတော့မှ လူချင်းခွါလိုက်ပီး ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲက လမင်းလေးနဲ.တူတဲ့ အနီ.မျက်နာ
လေးကိုငုံ.ကြည့်လိုက်ရင်း ဖန်ဂေါ်လီလုံးလေးတွေလိုဝိုင်းစက်ပီး အရည်လဲ့နေတဲ့ အနီ.မျက်လုံးလှလှလေးတွေကို ကျနော့်နှုတ်ခမ်းနဲ.ဖိကပ်ပီးနမ်းပေးနေမိတယ်..နောက်..ပါးဖောင်းဖောင်းလေး
တွေကိုဘယ်ပြန်ညာပြန်ဆက်နမ်းတယ်။ ဆရာမလေးဟာမျက်လုံးလေးမှေးစင်းပီး ကြောင်ပေါက်စကလေးလို မှိန်းခံနေရှာတယ်။
မျက်လုံးလေး ဖတ်ကနဲပွင့်လာပီး ... အကို!! လို.ရေရွတ်ရင်းနားမလည်နိုင်တဲ့အကြည့်နဲ.ကြည့်နေတယ်။
ဘာလို.လဲ? အနီ.ကိုအထင်သေး... ...အင်းးး ...ဆက်ပြောလို.မရအောင်သူ.နှုတ်ခမ်းလေးကိုကျနော်ဆွဲစုပ်ပေးလိုက်တယ်။ တပြွတ်ပြွတ်နဲ.၄-၅ချက်လောက်စုပ်နမ်းပီးမှပြန်ခွါလိုက်ရင်း
အနီလေးရာ.. ကျနော့်ချစ်သူဟာအပျိုစင်ကလေးဆိုတာ ကျနော်သိတာပေါ့.. ခုဟာက ကျနော်အနီ.ကိုမလိုချင်လို.မဟုတ်ဘူးသိလား..
ချက်ချင်းကြီး မလုပ်ရက်လို. တန်ဖိုးထားချင်လို.ကျနော်အောင့်အီးလိုက်တာ.. ကမ္ဘာပေါ်ကဘယ်မိန်းမထက်မဆို အနီ.ကိုကျနော်လိုချင်တပ်မက်တယ်ဟုတ်ပီလား..
ခုဟာက ချစ်လွန်းလို.မလုပ်ရက်တာပါဗျာ.. တခြားဘာမှတောင်တောင်အီအီမတွေးရဘူးလေ နော်..အနီလေး.. ကျနော့်နတ်သမီးလေး.. ...
ခုလိုကျနော့် ဆန္ဒကိုချက်ချင်း လိုက်လျောပြတာကို အထင်မသေးတဲ့အပြင် ..ပြတ်ပြတ်သားသား မာကျောတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုမြင်လိုက်ရတော့ ပိုတောင်မြတ်နိုးသေးတယ်ဗျာ...
အဲ့ဒီစကားတွေကိုကျနော့်ရင်ခွင်ထဲက ဆရာမလေးကိုငုံ.ကြည့်ရင်း.. ပါးဖောင်းဖောင်းလေးတွေကိုပွတ်ပေး၊ နဖူးလေးကိုမွှေးမွှေးပေး၊မျက်လုံးလှလှလေးတွေကိုနမ်းပေးရင်းဆက်တိုက်ပြောနေမိ
တယ်။ ရုတ်တရက် ဖန်ဂေါ်လီဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေထဲကနေ မျက်ရည်တွေပေါက်ကနဲပေါက်ကနဲစီးကျလာပီး.. မပီဝိုးတ၀ါးအသံနဲ. .. အကို.ကိုအနီပိုလို.တောင်ချစ်လာပီသိရဲ.လားရှင်ရယ်လို.ပြော
ပီးကျနော့်ကိုပျောက်သွားမှာစိုးတဲ့အတိုင်းပဲ တအားကြီးဖက်လာရှာတယ်။ ကျနော့်ရင်ထဲမှာခုနက ပြင်းထန်ပေါက်ကွဲနေတဲ့ လိင်စိတ်အစား အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တဲ့ မြတ်နိုးတဲ့စိတ်တွေ
၂ယောက်သားတစ်ယောက်ခါးတစ်ယောက်ဖက်ထားရင်းအပြင်ကို ယိုင်နဲ.နဲ. လျှောက်လာကြပီး ဧည့်ခန်းထဲမှာပူးကပ်ထိုင်နေကြတယ်။
ခုနကပြင်းထန်တဲ့ မုန်တိုင်းဆန်ဆန် စိတ်ဆူပွက်မှုတွေနေရာမှာ.. မွှေးမြတဲ့ အချစ်စိတ်တွေနေရာယူထားခဲ့ပါပီ။ ခင်ဗျားတို. ဘယ်လိုမြင်သလဲဗျာ? ကျနော့်စိတ်ကိုနားမလည်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်
တယ်မလား? ကျနော်လူကောင်းမဟုတ်မှန်း ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်တစ်ခုက ရေတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ ကိစ္စမှာခင်ဗျားတို.သိခဲ့ပီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် လောကမှာထူးဆန်းတဲ့ အီမိုးရှင်းတွေ အများကြီးဗျ။
ဟုတ်တယ်ခုနက ကျနော်လိင်စိတ်ထနေတာ..ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့ မေတ္တာစိတ်က အဲ့ဒီလိင်စိတ်ကိုဖုံးသွားတယ်ဗျာ။ အကယ်၍ကျနော့်ချစ်သူအနီလေးက အတင်းရုန်းကန်တာတို.၊မူသလိုလို
လုပ်တာတို.နဲ.တုံ.ပြန်လာရင်ကျနော် ရှေ.ဆက်ကောင်းဆက်မိမှာသေချာတယ်။ ခုလိုမျိုး ကျနော့်ကိုချစ်တဲ့အတွက် လုပ်ချင်သလိုလုပ်ပါဆိုပီး လိုက်လျောလာတော့ ပထမအံ့သြတယ်၊နောက်ဆုံး
ခုပဲကြည့်လေ..ကျနော့်ကို မျက်လုံးရွှဲကြီးတွေနဲ.စိုက်ကြည့်နေတဲ့ကျနော့်ချစ်သူ သူနာပြုဆရာမချောချောလေး..
သူ.အကြည့်တွေထဲမှာ တွယ်တာမှု၊အထင်ကြီးမှု၊မြတ်နိုးမှု.. ငါ့အပေါ်တော်တော်တန်ဖိုးထားပါလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်တွေအပြည့်ပါနေတယ်ဆိုတာ ကျနော်မြင်နေရတယ်ဗျ။ အဲ့လိုတစ်ယောက်နဲ.
တစ်ယောက်ထိုင်ငေးနေရင်း ကြည်နူးနေကြတာတော်တော်လေးကြာလာတော့.. ၂ယောက်သားမီးဖိုချောင်ဖက်ထသွားပီး နေ.လည်စာ စားကြတယ်။ အနီလေးချက်ထားတဲ့ဟင်းက ဘာမှအထူး
တလည်မဟုတ်ဘူး။ ခရမ်းချဉ်သီးချက်နဲ.ဘဲဥကြော်လေး..ဒါပေမယ့်ကျနော့်ဘ၀မှာစားဖူးသမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးသောနေ.လည်စာဗျ။ ကြွေရည်သုတ်ဇလုံလေးထဲထမင်းတွေခူးထည့်ပီးခရမ်း
ချဉ်သီးချက်နဲ.နယ်ဖတ်..ဘဲဥကြော်လေးဖဲ့ထည့်ပီး ချစ်သူက..အကို..ပါးစပ်ဟ..ရော့ ဆိုပီးခွံ.ကျွေးတဲ့ထမင်းဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောနေ.လည်စာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ။
thinzar on Thu Mar 17, 2011 8:31 am
တစ်မြို.လုံးရဲ.လမ်းတကာကို ငှက်မြီးရှည်တံဆိပ်တရုတ်စက်ဘီးလေး ပေါ်မှာ ကျနော့်ချစ်သူ သူနာပြုဆရာမလေးချောချောလေးကိုတင်ပီး မမောမပန်းနိုင်အောင်နင်းခဲ့ဖူးတယ်။ အဘိုးကိုညဖက်
စောင့်အိပ်ပီးတာနဲ.ဆေးရုံကနေ ဆရာမလေးမနီနီချိုနဲ.တူတူလိုက်သွားတတ်တယ်။ ဆရာမလေးအိမ်မှာတူတူနေတဲ့အဒေါ်ကမြို.လည်ကဈေးထဲမှာ အထည်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့အပျိုကြီးဆိုတော့ညနေ
စောင်းမှပြန်လာတတ်တယ်။ ကျနော်တို.၂ယောက်ထဲပျော်စရာကောင်းတဲ့ဘ၀လေးပေါ့ဗျာ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်တဲ့ အခါ အနီလေးကဘေးကနေကူညီပေးရင်း ဟ!! အကို.ဟင်းတွေကမစား
ရသေးဘူးအနံ.ရှူရတာ မြင်ရတာနဲ.တင်ဗိုက်ဆာလိုက်တာ.. အနီလေးတော့ ဟင်းချက်ကျွမ်းတဲ့ယောက်ျားရတော့မှာကံကောင်းတယ်တော့်.. လို.ပြောရင်းတခစ်ခစ်သဘောတွေကျနေတတ်ပါတယ်
စားသောက်ပီးတာနဲ. အနီ.ကုတင်ပေါ်မှာ၂ယောက်သားတူတူလှဲအိပ်၊စာအုပ်တစ်အုပ်လောက်တူတူဖတ်ရင်း ဖက်ပီးအိပ်ပျော်သွားတတ်တယ်။
ဟဲဟဲ..ဟုတ်ပါ့..ပြောဖို.မေ့နေတာဗျ။ ချဉ်သီးနဲ.ဆားအတူထားမှတော့ မဖြစ်ပဲနေပါ့မလားလေ။ ပထမဆုံးချစ်သူဖြစ်သွားတဲ့နေ.ကတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကမြတ်နိုးလွန်းလို.အရမ်းထိန်းလိုက်မိ
တာပေါ့။ နောက်နေ.တွေကျတော့ ဒီလိုဗျာ..မီးဖိုချောင်ထဲချက်ပြုတ်ရင်း..တစ်ယောက်နဲ.တစ်ယောက်က အငြိမ်နေတာမှမဟုတ်တာကိုးဗျ။ တစ်ယောက်နဲ.တစ်ယောက်အလစ်ချောင်းပီး တပြွတ်
ပြွတ်နဲ.ဦးတဲ့လူက ဖက်ဖက်နမ်းနေကြလေ။ မသိမသာမတ်တပ်ရပ်ပီး မီးဖိုခုံမှာပန်းကန်ဆေး ဟင်းရွက်သင်နေတဲ့ ဆရာမလေးရဲ.တင်ပါးကားကားဝိုင်းဝိုင်းလေးကို ကျနော်က အနောက်ကနေ
သိုင်းဖက်သလိုလိုနဲ.ကျနော့် အငယ်ကောင်နဲ.ထောက်ထောက်လိုက်ရင်..အာကွာ..ဆိုပီးဆရာမလေးမျက်နာနီနီဖြစ်ပီး ကော့ကော့တက်သွားနေကျပေါ့။ ဒါမှမဟုတ်ရင် အိမ်နေရင်းတီရှပ်အပါး
လေးဝတ်ထားတဲ့ ဆရာမလေးကိုအလစ်မှာ ကျနော်တီရှပ်အောက်လက်လျှိုပီး ကျနော့်လက်နဲ.မဆံ့လောက်အောင်ကြီးတဲ့နို.အိစက်စက်ထွားထွားလေးကို ဘရာပျော့ပျော့လေးအပေါ်ကနေကိုင်
ပီးညှစ်ညှစ်ပေးတတ်တာပေါ့။ နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်တာကတော့ တချိန်လုံးလိုလိုပဲ။ ဟင်းချက်နေတဲ့ကျနော့်ကို ဘေးကနေ.. အကိုလို.လှမ်းခေါ်လို. ကျနော်ကလှည့်ကြည့်လိုက်ရင် ပလွတ်ကနဲ
ဆရာမလေးက စုပ်နမ်းပီး သဘောတွေကျ၊ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း..အားရင်အားသလိုချစ်သူ.နှုတ်ခမ်းရဲရဲလေးကို ခဏခဏနမ်းစုပ်နေကျလေ။ အဲ့လိုတွေဖြစ်နေမှတော့ ၂ယောက်လုံးက
သာထိန်းနေတာ စိတ်ထဲမှာတော့ တမြေ့မြေ့လောင်ကျွမ်းနေပီ။ သူကလည်းတော်တော်လေး စိတ်ကြွကြွလာတယ်ဆိုတာ ကျနော်ရိပ်မိသလို၊ ကျနော်လည်းသူ.ကိုတအားလုပ်ချင်နေရှာပီဆိုတာ
တရက်ကျတော့မနက်ခင်း၁၀နာရီလောက်မှာ ကျနော်တို.ချက်ပြုတ်လို.ပီးသွားတော့ ထမင်းပွဲပြင်ပီး ရေမိုးချိုးသန်.စင်ကြတယ်။
အဲ့ဒီနေ.ကမနက်ခင်း အိမ်ကိုအတူပြန်လာကထဲက.. ၂ယောက်လုံးမထိတထိလုပ်တာတော်တော်လေး များမိတယ်။ မထိတထိဆိုတာက နမ်းလိုက်ကိုင်လိုက် ဆွလိုက်တွေပေါ့။ အဲ့ဒီမှာအဆင့်က
တော်တော်လေးကျော်စပြုလာပီဗျ။ ခါတိုင်းလိုနို.ကိုင်ဟိုထောက်ဒီထောက်လုပ်တဲ့အပြင် ကျနော့် အငယ်ကောင်ကို ပုဆိုးပေါ်ကနေ သူ.လက်ချောင်းလေးတွေနဲ.ကိုင်ပီးဆော့ခိုင်းတာတွေ
ဘာတွေဖြစ်လာတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကျနော့်အနီလေး မျက်နာလေးပန်းရောင်ဖြစ်ပီး အသက်ရှူသံတွေပြင်းလာတာတွေဖြစ်စပြုလာတယ်။ အပျိုစင်လေး ကိုကျနော့်မာတောင့်နေတဲ့ ပစ္စည်းကြီးသွား
ကိုင်ခိုင်းလိုက်တာကိုးဗျ။ ကိုင်ပီးရှေ.တိုင်းနောက်ငင်နည်းနည်းလုပ်ခိုင်းလိုက်တော့ သဘောပေါက်ပီး ကျနော်ချက်ပြုတ်နေတာကိုအနောက်ကနေ မှီပီးသိုင်းဖက်ထားရင်း တချက်ချက်ပုဆိုးပေါ်
ကနေလာလာကိုင်ပီး ပွတ်ပေးနေတယ်။ သက်ပြင်းလေးတဟင်းဟင်းချပီးပေါ့။ ဒါပေမယ့်၂ယောက်လုံးထိန်းပီး ပေါက်ကွဲလုလုအခြေနေကိုထိန်းထားကြပါသေးတယ်။ ပြဿနာက ရေမိုးချိုး
ပီး အိပ်ခန်းထဲမှာ အ၀တ်လဲကြတော့မှစတာဗျ။
ရေမိုးချိုးပီးစ ထမီရင်ခေါင်းလျားလေးနဲ. မွှေးပျံ.ပျံ.ဖြစ်နေတဲ့ ချစ်သူလေးက ဘရာအနက်ကလေးဝတ်မလို.ပြင်ရင်း ကျောပေးထားရာကနေ အကို..အနီ.ကိုချိတ်တပ်ပေးဆိုပီး ခိုင်းလာ
တော့ ကျနော်လည်း အင်းကျီတုံးလုံးရေလဲပုဆိုးတိုတိုလေးနဲ. အနားကိုကပ်သွားပီး သူ.ကိုကူညီမလို.လုပ်ရင်း စိတ်မထိန်းနိုင်လို.သူ.ဂျိုင်းကြားလေးအောက်ကနေ နို.ကြီး၂လုံးကို မ၀တ်ရသေး
ပဲဖုံးထားတဲ့ ဘရာအပေါ်ကနေဖွဖွလေး စုံကိုင်လိုက်မိတယ်။ ကိုင်နေရင်းနဲ. အနီ.ဂုတ်ပိုးလေးကို ကျနော့်နှုတ်ခမ်းနဲ.ဖွဖွလေးပွတ်ပေးရင်း အောက်က အငယ်ကောင်နဲ.သူ.တင်ပါးလေးကိုခပ်ဆ
ဆလေး၂ချက်၃ချက်လောက်ဆောင့်ပေးလိုက်မိတယ်။ အင်းးးး.. အကိုရယ်..ဆိုပီး ကျနော့်ဆရာမလေးညည်းသွားတော့မှ ဘရာချိတ်ကလေးကိုသေချာတပ်ပေးလိုက်ပီး ကျောပေးရင်း အ၀တ်
လဲ၊မီးဖိုချောင်ထဲထွက်လာမိတယ်။ ထမင်းလက်ဆုံစားနေရင်းနဲ. အနီ.မျက်နာကိုကြည့်မိတော့ တော်တော်လေးမူပျက်စပြုလာပီ။ ကျနော်စကားတွေဖောင်ဖွဲ.နေတာတောင် အင်း အဲ နဲ.သေချာ
စားသောက်ဆေးကြောပီးလို.ခါတိုင်းလို နားဖို.တူတူအိပ်ခန်းထဲဝင်လာကြတော့ ကျနော့်ခါးကိုမလွတ်တမ်းဖက်ထားတယ်။
အခန်းထောင့်မှာရှိတဲ့အနီ.စာအုပ်စင်လေးပေါ်မှာ မအိပ်ခင်ဖတ်ဖို.စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုကျနော်မွှေနှောက်ပီး ရှာရင်းရလာတော့ ကုတင်ဆီပြန်လှည့်လာတော့ အနီလေး ကုတင်ပေါ်မှာတစောင်းခွေ
ခွေလေးလှဲနေရင်း ကျနော့်ကိုရီဝေေ၀ငေးနေရှာတယ်။ လျှော်ပီးစ ဖားလျားချထားတဲ့ ဆံပင်လေးတွေကရင်ဘတ်အရှေ.ဘက်မှာခွေကျနေတယ်။ ကျနော်ကုတင်ပေါ်တက်ပီး သူ.ကိုရင်ခွင်ထဲ
ဆွဲထည့်လိုက်တော့ ကျနော့်ရင်ဘတ်ပေါ်ပါးလေးအပ်ပီး ခြေထောက်တစ်ချောင်းက ကျနော့်ကိုခွလာတယ်။ စာအုပ်ဖတ်ပြဖို.ပြင်နေတဲ့ ကျနော့်လက်ထဲက စာအုပ်ကိုဆွဲယူပီး သူ.နောက်ကျောဖက်ကို
နောက်ပြန်ပစ်ချလိုက်တယ်။ ပီးတော့ ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲကနေအရည်လဲ့နေတဲ့ မျက်ဝန်းလေးတွေနဲ.မော့ကြည့်ပီး အနီ.ကိုနမ်းစမ်းပါ လို.လေသံခပ်မာမာလေးနဲ.ဟောက်သလိုလိုပြောလာတယ်။
နီရဲရဲလေးနဲ.ပါးလျလျချိုမြိန်တဲ့ နှုတ်ခမ်းအိအိလေးကို ကျနော်ငုံ.ပီးဆွဲစုပ်လိုက်တော့ ကျနော့်အပေါ်နှုတ်ခမ်းကို တပြွတ်ပြွတ်ပြန်စုပ်ရင်း တုံ.ပြန်မှုပြင်းလာတယ်။ တဟင်းဟင်းနဲ.အသက်ရှူသံလေး
လက်ချောင်းပျော့ပျော့လေးတွေက ကျနော့်ပုဆိုးပေါ်ကနေ အောက်ကမာတောင့်စပြုနေတဲ့ ကျနော့်ပစ္စည်းကိုလိုက်စမ်းပီးရှာနေရင်းတွေ.သွားတော့ တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားပီး မနက်ကလိုရှေ.
တိုးနောက်ငင်လုပ်ပေးရင်းဆော့နေလိုက်တာ ချက်ချင်းပဲ ကျနော့်ပစ္စည်းကသံပိုက်လုံးတစ်ခုလိုမာတောင့်လာပြန်ပီ။ နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်နေရာက ဆတ်ကနဲခွါသွားပီး ၀ုန်းကနဲသူထထိုင်လိုက်တော့
အကို..အနီ.ကို လိုချင်နေရက်သားနဲ.ဘာလို. အဲ့လိုအောင့်ထားရတာလဲ.. လို.နီမြန်းနေတဲ့မျက်နာလေးနဲ.ဆရာမလေးကလေသံတင်းတင်းလေးနဲ.မေးလာရောဗျာ..
ရုတ်တရက်ကျနော့်စကားသံတိတ်သွားပီ။ အနီ.လက်ဖ၀ါးလေးကဆတ်ကနဲကျနော့်နှုတ်ခမ်းကို လာဖိကပ်ပီးပိတ်လိုက်တာဗျ။ ပီးတာနဲ.တီရှပ်ကလေးကို ခပ်မြန်မြန်ဆွဲချွတ်ပလိုက်တာ မြန်လွန်းလို.
ကျနော်မှင်တက်နေမိတယ်။ ကြည့်စမ်းပါဦးဗျာ။ ဘရာအနက်ရောင်ကလေးခမျာမနိုင်မနင်း အနီ.နို.၀ိုင်းဝိုင်းစက်စက်အိအိကြီးတွေကို သယ်မထားရတာလေ။ လှလိုက်တာဗျာ။ ကျနော်ဘာလုပ်ရမှန်း
မသိငေးနေတာကို အောက်နှုတ်ခမ်းကိုသွားဖြူဖြူလေးနဲ.ကိုက်ထားတဲ့ ဆရာမလေးက စိုက်ကြည့်ရင်း လက်ကိုနောက်ပြန်ပစ်ပီး ဘရာချိပ်တွေကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်။
ဟားးးးးးးးးး !! ၀င်းဝါပီးစိုပြေလှတဲ့ နို.ကြီး၂လုံးက အိကနဲထွက်ကျလာတယ်။ နို.သီးခေါင်းပန်းရောင်လေးတွေက စူတူတူလေးထောင်ထနေတာ တန်းနေတာပဲဗျာ။
ကပိုကရိုဆံနွယ်တွေနဲ. နီမြန်းနေတဲ့မျက်နာလေး၊ ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းဗလာဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့်နတ်သမီးလေး ကအံကြိတ်ထားတဲ့ လေသံစူးစူးလေးနဲ.
ဟေ့..အကို..အနီ.ကိုချစ်တယ်ဆို .. တဲ့ဗျာ... ...
.... ... ... ... .... ..... .....
.... ... ... ... ... .... ... ....
... .... .... .... ... ... ... ....
thinzar on Sun Mar 20, 2011 11:34 pm
ပက်လက်လှန်အိပ်နေတဲ့ကျနော် ဆတ်ကနဲထထိုင်ပီး အိမ်နေရင်းဝတ်ထားတဲ့ မြင်းခေါင်းတံဆိပ်စွပ်ကျယ် အဖြူလေးကိုဆွဲချွတ် ရင်း အနီ.ကိုယ်လုံးလေးကိုရင်ချင်းအပ်ပီးဆွဲဖက်လိုက်တယ်။
အားးး..အကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့ရင်ဘတ်ချင်းထိမိတော့ အိစက်ချောမွေ.တဲ့အထိအတွေ.ကကျနော့်ကိုရှိန်းတိမ်းဖိမ်းတိမ်းဖြစ်သွားစေတယ်။ ခပ်တင်းတင်းလေးဖက်ထားလိုက်ပီး မှလူချင်းခွါလိုက်ပီး
အနီ.ရင်သားလုံးဝိုင်းဝိုင်းကြီး၂ခုကိုတဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ကျနော့်လက်ချောင်းတွေနဲ.မရဲတရဲကိုင်လိုက်မိတယ်။ အရင်ကခုလိုအခုအခံမပါပဲတစ်ခါမှမကိုင်ဖူးသေးဘူးဗျ။ ပန်းရောင်သမ်းပီးစူတူတူ
မာတောင့်တောင့်လေးဖြစ်နေတဲ့ နို.သီးခေါင်းလေးတွေကို လက်ညိုးလက်မ၂ခုကြားညှပ်ကိုင်ပီး ဖွဖွလေးလှိမ့်ပေးလိုက်တော့ အနီ.လက်ချောင်းတွေကကျနော့်လက်မောင်းကိုအတင်းလာဆုပ်ကိုင်
ထားပီး ဟင်းးး..အကို...ဟင်းးးး ဆိုပီးညည်းသံထွက်လာတယ်။ လက်ကအဲ့လိုဘယ်ညာပြောင်းပီးကစားပေးနေရင်း ကျနော့်နှုတ်ခမ်းတွေကလည်း အနီကလေးရဲ.လည်တိုင်ဝင်းဝင်းလေးကိုတပြွတ်
ပြွတ်စုပ်ပီးနမ်းပေးနေမိတယ်။ လိင်စိတ်နဲ.အချစ်ရောထားတဲ့အခါဖြစ်လာတဲ့ နတ်ပူးသလိုတုန်ခါတဲ့ ခံစားချက်မျိုး၂ယောက်လုံးဖြစ်စပြုလာပီဗျာ။ ဒါဟာသာမန်လိင်စိတ်ကြွလာလို.မိန်းမတစ်ယောက်
ကျနော်ဟာအနီကလေးနဲ.မတိုင်ခင်က အတွေ.အကြုံတွေရှိပီးသား မို.တော်တော်လေးထိန်းနိုင်ပေမယ့် ခုကျနော့်ချစ်သူဆရာမလေးကတော့ ဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်း ပြန်ပြောပြလို.မရတဲ့
ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ အရိုင်းလေးကိုးဗျ။ မိုင်ပေါင်းများစွာပြေးလာရတဲ့ လူတစ်ယောက်လို မောဟိုက်နေတဲ့ပုံမျက်လုံးလေးမှိတ်ပီး..နှုတ်ခမ်းလေးတွေက လှုပ်ရွရွ..ဒါပေမယ့်ဘာပြောနေမှန်းမသေ
ချာတဲ့မပီဝိုးတ၀ါးအသံတွေ။ ကျနော်အနီ.ကိုယ်လုံးလေးကိုကုတင်ပေါ်တွန်းလှဲလိုက်တယ်။ ခါးတ၀က်ရောက်တဲ့အထိလျှောကျနေတဲ့ သူ.ထမီလေးကို အကုန်ကွင်းလုံးကျွတ်သွားအောင်ဆွဲချွတ်
လိုက်တော့... ချစ်မွှေးရေးရေးလေးနဲ.သူ. အဖုတ်လေးက ဖောင်းကားကားလေးဟက်တက်ကွဲလေး။ ကျနော့်လက်ချောင်းတွေက သူ.အဖုတ်လေးဆီသာသာလေးအုပ်ကိုင်ပီးရွရွလေးပွတ်ပေး
လိုက်တော့...အဟင့်!! ဆိုပီးညည်းသံလေးထွက်လာတယ်။ ကျနော်သတိရှိတယ်ဗျ။ ချစ်သူက အပျိုစင်ကလေး..ခုချိန်လက်ချောင်းလေးသွားထိုးထည့်ဖို.တောင်မလွယ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်
တယ်။(ခင်ဗျားတို.ယုံမလားမသိဘူး ကျနော့်ရည်းစားဦး မမနဲ.တုံးက၆လလောက်ကြာသွားတယ်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး ထိပ်ကလေးသွင်းတာနဲ.နာတယ်ဆိုပီးစွတ်အော်လို.မလုပ်ရဲပဲရပ်ရပ်လိုက်ရ
တာလေ..နောက်ဆုံးအဖုတ်လျှက်ပီးတွယ်မှအောင်မြင်သွားတာဗျ) ဒါကြောင့်ကျနော်ခု တော်တော်သတိထားနေရတာ..နူးနပ်တာကိုစိတ်ရှည်မှရမယ်။
၀ိုင်းစက်စက်နို.ကြီးတွေကို ပထမဖွဖွလေးစ စို.ပေးတယ်..အရှိန်ရလာတော့ခပ်ကြမ်းကြမ်းတပြွတ်ပြွတ် အသံတွေမြည်လာအောင်စို.ပေးနေတယ်။ အောက်ကပွတ်တာလည်း မရပ်ပေးဘူး။
ကျနော့်ချစ်သူအနီလေးကတော့ ကျောနဲ.အိပ်ယာမထိတော့အောင်ကော့တက်ပီး တဟင်းဟင်းညည်းနေရှာပီ။ ကျနော်တွေဝေနေတယ်ဗျ။ ကျနော်ခုချက်ချင်း ချစ်သူရဲ.ေ-ာက်ဖုတ်ကိုကောက်ပီး
လျှက်ပလိုက်ရင်ဘယ်လိုနေမလဲ? အထင်သေးသွားမလား? နောက်ဆုံး မထူးတော့ဘူးဆိုပီး နို.စို.နေတာကိုရပ်ပီး အနီ.ပေါင်ကြားထဲဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပီး ခေါင်းအုံးတစ်လုံးကိုဆွဲယူလိုက်ရင်း
အနီ.ကို.. အကိုအရမ်းချစ်လို.ပါနော်လို. လှမ်းပြောလိုက်တော့ တွေဝေနေတဲ့ကျနော့်ချစ်သူလေးက ပက်လက်လှန်အိပ်နေတဲ့နေရာကနေဝေခွဲမရတဲ့ မျက်လုံးလေးတွေနဲ.လှမ်းကြည့်ရင်းခေါင်းငြိမ့်ပြတယ်။ ချက်ချင်းပဲကျနော် အနီ.ေ-ာက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်း ပေါ်ကိုမျက်နာအပ်ချပလိုက်တယ်။ အကို!! လို.အော်ပီး..အနီထထိုင်ဖို.ကြိုးစားသေး
တယ်။ ဒါပေမယ့်မရတော့ဘူး။ ကျနော့်နှုတ်ခမ်းတွေက အနီ.ေ-ာက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ခဲမိသွားပီဗျ။ေ-ာက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုစုပ်လိုက် လျှက်လိုက်အသားကုန်ဆက်တိုက်လုပ်ပေး
လိုက်တော့ အနီ.ပါးစပ်က တရှီးရှီးအော်သံနဲ.အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းတွေထွက်လာတယ်။ အကိုရေ...အကို..လို.အော်ရင်းကျနော့်နားရွက်၂ဖက်ကိုလက်၂ဖက်နဲ.စုံကိုင်ပီး အတင်းဆွဲထားတာနား
ရွက်တွေတောင်ထူပူလာတယ်။ အဖုတ်ထဲက အရည်တွေဟာကျနော့်နှုတ်ခမ်းတွေမျက်နာတွေမှာတောင်ပေကျံကုန်ပီဗျ။ တချက်တချက် အစိကလေးကိုလျှာနဲ.ဖိဖိပီးထိုးပေးလိုက်ရင် တင်ပါး
လေးတွေခေါင်းအုံးနဲ.လွတ်ထွက်သွားတဲ့အထိကော့ပျံနေတာပဲ။ တော်တော်လေးဟုတ်လာပီလို.ယူဆလာတာနဲ. သူ.ေ-ာက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား၂ခုကို လက်ညိုးလက်မနဲ.ဖြဲပီး ကျနော့်လျှာကိုအထဲ
ထိထိုးထိုးသွင်းပီးကစားပေးလိုက်တော့ တစ်ကိုယ်လုံးဓာတ်လိုက်သလိုအကြောတွေဆွဲစပြုလာတယ်။ အကို..အနီလေ..အနီသေတော့မလားမသိဘူး...မောလိုက်တာ..လို.သူ.ပေါင်ကြားထဲမျက်
ကျနော်ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပီး မျက်နာကိုပြန်ခွါလိုက်တယ်။ ကျနော့်ပုဆိုးကို ချွတ်ဖို.ပြင်တယ်။လက်တစ်ဖက်ကတော့ အနီ.ေ-ာက်ဖုတ်ကိုလက်မနဲ.ပွတ်ပေးနေတာကိုမရပ်ဘူး။
ပြေကျနေတဲ့ကျနော့်ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်တော့ နီရဲပီးတင်းပြောင်နေတဲ့ ကျနော့် -ီးက ဖြောင်းကနဲပေါ်လာတယ်။ တော်တော်လေးဖီးလ်တက်နေတဲ့ ချစ်သူကမျက်လုံးလေး ၀ိုင်းစက်စက်နဲ.
ကျနော့်ပစ္စည်းကိုခေါင်းထောင်ပီး လှမ်းကြည့်နေတယ်။ ကျနော့် -ီး ကိုအရင်းကနေကိုင်ပီး အောက်ကိုငိုက်ငိုက်ထားရင်း သူ.ေ-ာက်ဖုတ်ဝမှာတေ့လိုက်တော့ မျက်လုံးလေးမှေးစင်းပီး အံကြိတ်
ထားရှာတယ်။ အရည်တွေစိုရွှဲနေတဲ့ သူ.ေ-ာက်ဖုတ်ဝအိအိလေး ထဲကျနော့်မာတောင့်နေတဲ့ အငယ်ကောင်ကိုတအိအိဖိသွင်းတော့ ထိပ်ကလေးတောင်မ၀င်နိုင်ပဲ တင်းခံနေတယ်ဗျာ။ ဒီလောက်
အနီ..မတင်းထားနဲ.နော်..အကိုသွင်းလိုက်တော့မယ် လို. ကျနော်လှမ်းပြောတော့..မျက်နာမှာချွေးစက်ကလေးတွေသီးနေတဲ့ ချစ်သူကမောနေတဲ့ဟန်ကလေးနဲ.ခေါင်းငြိမ့်ပြတယ်။
အားနည်းနည်းစိုက်ပီး ဖိချလိုက်ပီ။ အိ!! ဆိုတဲ့အသံလေး အနီ.ဆီကထွက်လာတယ်။ မဆိုးဘူးဗျ။ တစ်ဝက်လောက်ဝင်တယ်။ ပြန်ထုတ်တယ်..ပြန်ဖိပီးသွင်းတယ်။၉-၁၀ချက်လောက်ဒီတိုင်းပဲ
တစ်ဝက်လောက်သာသာအ၀င်အထွက်အတိုင်း -ိုးပေးနေမိတယ်။ ကြပ်လွန်းတော့ အိစက်စက်အရသာကို ကြိမ်းစပ်စပ်အရသာက ဖုံးလွှမ်းထားတယ်ဗျာ။ အဲ့လိုလေးညော့သွင်းပီး ဖွဖွလေးတစ်
ချက်ချင်း -ိုးနေရင်း ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိပဲဟာကနဲဖြစ်သွားတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်မမျှော်လင့်ထားမိဘူးဗျ။ သတိထားလိုက်မိတော့ ကျနော့် -ီး ကြီးသူ.အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးထဲ အဆုံးထိ
၀င်သွားပီဗျ။ သေသေချာချာဆောင့် -ိုး ပလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနော့် တစ်ဝက်လောက်အထုတ်အသွင်းလုပ်နေရင်း အဆုံးထိဝင်သွားတယ်။
အနီကတော့..ဘာမှမသိရှာဘူး..မျက်လုံးလေးမှိတ် အံကလေးကြိတ်ပီး ခံနေရှာတယ်။ တော်တော်သတ္တိရှိတဲ့ကောင်မလေး။ နာတယ်၊စပ်တယ်ဘာညာတွေတစ်ခွန်းမှမပြောသလို
ကျနော်အရင်ကကြုံခဲ့ဖူးသလိုတွန်းတာရုန်းတာ လုံးဝမလုပ်ဘူးဗျ။ အဆုံးထိဝင်နေတဲ့ ကျနော့်အငယ်ကောင်ကိုဖြေးဖြေးချင်းပြန်ဆွဲထုတ်၊ဖြေးဖြေးချင်းပြန်သွင်း..တစ်ထစ်ချင်းစီးပိုင်ပိုင်အရသာ
လေးကိုခံစားနေရပီ။ ဘယ်လောက်ပဲကြပ်တယ်ပြောပြော အသွင်းအထုတ်အကြိမ်အရေတွက်များလာတော့..တော်တော်လေးဟုတ်လာပီ။ အားတင်းထားရတဲ့ကျနော်..သက်ပြင်းခိုးချရင်း အနီ.
ကိုယ်လုံးလေးပေါ်ဖိကပ်ပီး ကြိတ်ဆောင့်လေးဆောင့်လို.ရလာပီ။ ဆောင့် -ိုးနေရင်း အနီ.နို.၂လုံးကိုသေချာဆုပ်ချေပေးနေတယ်။ ပါးဖောင်းဖောင်းလေးကို ဘယ်ညာနမ်း၊နှုတ်ခမ်းလေးကိုစုပ်
ဒီလိုမှန်မှန်လေး၁၅မိနစ်လောက် -ိုးနေရင်းနဲ. အနီ.ေ-ာက်ဖုတ်လေးက၃-၄ချက်လောက်ဆက်တိုက် ကျနော့် -ီး ကိုဆွဲညှစ်သလိုခံစားလိုက်ရတယ်။
အနီ.ဆီကလည်း ...အကိုရေ..အကို..အင်းးးးးးးးးးးး ဆိုတဲ့အော်သံကြားလိုက်ရတယ်။ ကျနော်ချစ်သူအပျိုစင်ကလေးကို ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ. အလိုဖြည့်ပေးနိုင်လိုက်ပီဆိုတာချက်ချင်းရိပ်
မိလိုက်ပီးအားတက်လာတယ်။ ဆောင့်ချက်တွေကို နည်းနည်းမြန်ပလိုက်တယ်။ ဆီးခုံနှစ်ခုရိုက်ခတ်တဲ့အသံတဖတ်ဖတ်က ကျယ်လောင်လာပီ...
အားးးးးး!! အနီလေးရေ... အကို ပီးပီ...ရှီးးးးးးးးးးးးးးး.. အားးး ချစ်လိုက်တာအနီလေးရာ....
အဲ့လိုတွေဒရောသောပါးကျနော့်ပါးစပ်အော်ရင်း ရက်ပေါင်းများစွာအောင့်ထားရတဲ့ ကျနော့်အချစ်ရည်ပူပူတွေကို အနီ.အပျိူစင်ေ-ာက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးထဲတဖျင်းဖျင်းပန်းထုတ်လိုက်မိ
thinzar on Sun Mar 20, 2011 11:38 pm
အနီ.ကို အကိုပစ်မသွားရဘူးနော်.. အနီသေလိမ့်မယ်..နော်လို.အကိုနော်!!
ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲမှာချွေးစက်ကလေးတွေသီးနေတဲ့ ချစ်တဲ့ဆရာမလေးကမော့ကြည့်ပီး ချစ်ရည်လွှမ်းနေတဲ့မျက်နာလေးနဲ.မော့ကြည့်ပီးချွဲချွဲလေးပြောရှာတယ်။ ကျနော်ကဘာမှပြန်မပြောပဲအနီ.နဖူး
ကြည့်လေ!! ဘာပြုံးနေတာလဲ.. အကိုလို. ခုပေးဂတိပေး.. ...
စူတူတူနှုတ်ခမ်းလေးနဲ.မျက်နာအိုအိုလေးလုပ်ပီး ကျနော့်ကိုအတင်းကပ်ချွဲနေတဲ့ ကျနော့်အနီလေးဟာ ဘ၀မှာမြင်ဖူးသမျှမိန်းမတွေထဲမှာအလှဆုံးပါလားကွယ်။ အခန်းထဲကိုဖွင့်ထားတဲ့ပြူတင်း
ပေါက်ကလေနုအေးလေးတွေတနော့နော့တိုးဝင်လာတော့ ချွေးတွေစိုရွှဲနေတဲ့ ကျနော်တို.၂ယောက်လုံးအေးကနဲခံစားလိုက်ရတယ်။ ရင်ခွင်ထဲကငါးရံ.ကိုယ်လုံးလေးကို ခပ်တင်းတင်းတိုးဖက်လိုက်
ရင်း.. ... ...
အနီလေးသာ အကို.ကိုကျောရရုံမကြံသွားနဲ.သိလား ...ပစ်ပြေးသွားလို.ကတော့ သမဆိုင်ကရေနံဆီတစ်ဆယ်ဖိုးဝယ်သောက်ပလိုက်မယ်ဟီးဟီး!!
အဲ့လိုပေါက်ကရနောက်ပြောင်ရင်း ကျနော့်လက်တွေက အကာအကွယ်ဗလာဖြစ်နေတဲ့ အနီ.နို.သီးခေါင်းလေးတွေကိုဆော့ကစားသလိုလုပ်ရင်းချေပေးလိုက်တော့ ဆရာမလေးက အာကွာ...ဆို
အနီလေး ဟိုဝတ္ထုဖတ်ဖူးလား.. John Steinbeck. ရဲ. Of Mice and Men: ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေ။
အင်း..ဘာသာပြန်ဖတ်ဖူးတယ်လေ..ဒို.ပိုင်တဲ့မြေ ဆိုတာမဟုတ်လား အကို? သူငယ်ချင်း၂ယောက်ဇတ်လမ်းမလား? သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး..အကိုနည်းနည်းပြန်အစဖော်ပေးလေ..
George နဲ.Lennie ဆိုတဲ့အိမ်ခြေယာမဲ့အမေရိကန်လယ်ကူလီ၂ယောက်နဲ. ရင်နင့်စရာဇတ်လမ်းလေးပါ အနီလေးရာ..
ခပ်တိုတိုလေးအကျဉ်းချုပ်ပြန်ပြောရရင်..တစ်နေ.တစ်ဒေါ်လာနဲ.စိုက်ပျိုးရေးခြံတွေထဲမှာ ဘာလီအိတ်တွေကူလီထမ်းတဲ့ တစ်ကောက်ကြွက်သူငယ်ချင်း၂ယောက်ပေါ့။ တွယ်တာစရာဆိုလို.ဒီသူ
ငယ်ချင်း၂ယောက်ပဲလောကမှာရှိတာပေါ့လေ။ George ကလူကောင်သေးတယ်ဥာဏ်ရှိတယ်...Lennie ဆိုတဲ့ကောင်က လူကောင်အကြီးကြီး ဒါပေမယ့် ကျပ်မပြည့်ဘူး..လောကမှာGeorge
ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းသာသူ.အတွက်ကိုးကွယ်ရာပေါ့။ ခြေဦးတည့်ရာလျှောက်သွားရင်း ကူလီအလုပ်နဲ.အသက်မွေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်း၂ယောက်ပေါ့။ တနေ.မှာသူတို.မှာ အကြံတစ်ခုရလာတယ်။
အဲ့ဒီအိမ်လေးက မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းလေးနဲ.တောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိသတဲ့။ အနီရောင်လေရဟတ်ကလေးလဲပါမယ်။ ပြောင်းဖူးအချိုပင်တွေစိုက်ကြမယ်။ ဆိတ်နည်းနည်းမွေးမယ်။ဘယ်တုံးကမှ
သူတို.၂ယောက်မနေဖူးတဲ့အခြေတကျဘ၀လေးပေါ့ကွာ။ အဲ့ဒီအရမ်းလှတဲ့အိပ်မက်ကလေး မက်ပီးတော့သူတို.၂ယောက်ပိုက်ဆံစုကြတာပေါ့နော်။ တနေကုန်ဘာလီအိတ်တွေပင်ပင်ပန်းပန်း
သယ်ပိုးပီးလို. အလုပ်သမားတန်းလျားက သူတို.အိပ်ယာပေါ်မှာ လှဲလျောင်းရင်း အဲ့ဒီအိပ်မက်ကိုတတွတ်တွတ်ပြောရင်းပျော်နေကြတာပေါ့လေ။ ခုအကို အနီ.ကိုပြောချင်တာကအဲ့ဒီသူတို.ည
တိုင်းပြောလေ့ရှိတဲ့ ဒိုင်ယာလော့တွေကွ..နားထောင်နော် အကိုရွတ်ပြမယ်!!
George ငါတို.နေမယ့်အိမ်ကလေး အကြောင်းမအိပ်ခင်ပြောပြပါလားလို.Lennie ကတောင်းဆိုတော့ Georgeကစပြောတယ်..
အေး..ဟော့ဒီအမေရိကန်ပြေမှာ မင်းတို.ငါတို.လိုခြေသလုံးအိမ်တိုင်လယ်ကူလီတစ်ကိုယ်တော်တွေအများကြီးပေါ့ ..အနာဂတ်မရှိ..အပေါင်းအဖော်မရှိ..လကုန်ရင်ဒေါ်လာ၃၀ထုတ်ပီး
အရက်မူးအောင်သောက်မယ်..ဖာအိမ်မှာပါတဲ့ငွေတွေအကုန်သုံးမယ်..နောက်တနေ.မှာ ကူလီပြန်ထမ်းမယ်။ ဒါပဲသူတို.ဘ၀က။ အေးငါတို.နဲ.တော့မတူဘူးကွ။ မင့်မှာငါရှိသလို ငါ့မှာလည်းမင်း
ရှိနေပီ။ငါတို.ခုပိုက်ဆံစုလို.ပြည့်ပီဆိုရင် အိမ်ကလေးတစ်လုံးဝယ်မယ်။ ဒီလိုကူလီအလုပ်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။
ငါတို.အိမ်ကလေးက မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းလေးနဲ.တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာရှိတယ်ကွာ။ လေရဟတ်အနီကလေးပါတယ်။ ပြောင်းဖူးလေးဘာလေးနည်းနည်းစိုက်ကြတာပေါ့ကွာ။
ငါတို.ကိုဘယ်အလုပ်ရှင်မှ ခိုင်းလို.မရတော့ဘူးကွ။ George ငါတို.ယုန်ကလေးတွေကောမွေးမှာလားဟင်? အေးပါLennie ရာမင့်အကြိုက်ယုန်ကလေးတွေလည်းမွေးပေါ့ကွာ။ (Lennie ကကျပ်
သိပ်မပြည့်တဲ့အပြင် နူးညံ့တဲ့အမွှေးလေးတွေကို ပွတ်ချင်တဲ့စိတ်ရောဂါရှိနေတာ..ခုအကို အနီ.နို.ကလေးတွေကိုအမြဲပွတ်ပွတ်နေသလိုမျိုးပေါ့ဟီးဟီး.. အကိုနော်အကျင့်ပုတ်) ငါတို.ပိုင်တဲ့မြေ
ငါတို.ပိုင်တဲ့အိမ်... .... .... ..... ... ... .... .... .... ....
အကို.ကို အနီအထင်မကြီးနဲ. အကိုဟာတော်တော်ဆိုးပေတဲ့ကောင်ကွ။ ဒါပေမယ့်ခု အကို.စိတ်တွေပြောင်းလဲသွားပီသိလား။ အကိုအိမ်ပြန်ရင် အနီလေးကိုခေါ်သွားတော့မယ်။
အကိုမဆိုးတော့ဘူးလို.ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပီးပီ။ ခုပြောတဲ့ဝတ္ထုထဲကလို အိမ်ကလေးတစ်လုံးဆောက်ပီး အနီနဲ.အကို..Georgeနဲ. Lennie လိုဘ၀အသစ်စရအောင်နော်။ အကိုကလူကောင်
ကြီးပီးကျပ်မပြည့်တဲ့ Lennie ပေါ့လေဟားဟား..အနီလေးကဥာဏ်ရှိပီး လူကောင်သေးတဲ့George ပေါ့။ ယုန်ကလေးတွေမမွေးပဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကလေးလေးတွေမွေးကြမယ်လေဘယ်လို
လဲ? မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းနဲ.တောင်ကုန်းပေါ်ကအိမ်ကလေး..လေရဟတ်အနီရောင်လေးနဲ.။ လောကမှာလူတွေအားလုံးအထီးကျန်နေကြတာကွ........ဒါပေမယ့် အကိုတို.၂ယောက်တော့မပါဘူး။
အကို.ဘေးမှာအနီရှိသလို အနီလေးရဲ.ဘေးမှာအကိုရှိနေတယ်လေ။ ကျနော့်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် အတွေးတွေကိုပြောပြလိုက်တော့ ချစ်သူဆရာမလေးက ကြည်နူးနေတဲ့မျက်နာလေးနဲ.ပြုံးနေ
အကို...အနီက အကို.အတွက်ဟောဒီအထဲကနေ(ဗိုက်ရှပ်ရှပ်ကလေးကိုပုတ်ပြရင်း) ယုန်ကလေးဘယ်နှစ်ကောင်မွေးပေးရမှာလဲဟင်?
ကျနော်ကဘာမှပြန်မပြောပဲ လက်ချောင်း ၆ချောင်းထောင်ပြလိုက်တော့ လျှာကလေးတစ်လစ်ထုတ်၊ဇက်ကလေးပုပီး.. သေရောပေါ့ အကို ရာ လို.တခစ်ခစ်ရယ်ရင်းသဘောတွေကျနေပြန်တယ်။
နေဦး အကိုရ..အဲ့ဒီဇတ်လမ်းနောက်ဆုံးမှာ George က Lennie ကိုမျက်ရည်တွေကျပီး ခြောက်လုံးပူးနဲ.ပစ်သတ်လိုက်ရတာမလား အနီ မှတ်မိပီ.. အနီဖြင့်အဲ့ဒါဖတ်ပီးငိုလိုက်ရတာ
နိမိတ်မကောင်းပါဘူး.. ဆိုပီးမျက်နာလေး ညှိုးငယ်သွားရှာပြန်တယ်။
ဟာ..ဒီအရူးမလေး အဲ့ဒါဝတ္ထုကွ..ခုဘယ်သူ.ဆီမှာမှ ခြောက်လုံးပူးမရှိဘူး.. အဲ့ဒါတွေတွေးစရာမလိုဘူး.. လောလောဆယ်အကို.မှာ နှစ်လုံးပြူးတစ်လက်တော့ရှိတယ် ရော့...
ဆိုပီး ပြန်တောင်စပြုလာတဲ့ ကျနော့် အငယ်ကောင်ကို ရုတ်တရက်ဒူးထောက်ထထိုင်လိုက်ပီး အနီ.ဖ၀ါးလေးထဲကို ထိုးထည့် လိုက်တော့ အယ်... သူ.ဟာကြီးကလည်းဆိုပီး မျက်လုံးလေးပြူး
အကိုကပြန် ဖြစ်လာတာမြန်လိုက်တာဆိုပီး ကျနော့် -ီး ကြီးကိုသေသေချာချာ ကိုင်ပီးလက်ပြန်လေး -ွင်းထုသလိုကစားပေးရင်း စိတ်ဝင်တစားစူးစမ်းနေပြန်တယ်။
ပီးမှပြုံးစိစိနဲ. အနီလည်းအကို.ကိုအရမ်းချစ်တော့မယ်ကွာ ဆိုပီး ပက်လက်အိပ်နေရာက တတောင်ဆစ်ကလေးထောက်ပီး ကိုယ်တစ်ပိုင်းထလာရင်း ကျနော့် -ီး ရဲ.ထိပ်ဖူး -စ် ကိုလျှာနီနီလေးနဲ.
မရဲတရဲထိုးလျှက်ပေးလာတယ်။ နည်းနည်းလုပ်ရဲလာတော့မှ နှုတ်ခမ်းပါးလျလျလေးကိုခပ်ဟဟလေးလုပ်ပီး ပလွတ်ကနဲစုပ်သွင်းလိုက်တော့ ကျနော့်မှာ နွေးတေးတေးအရသာလေးနဲ.အတူ
ကျင်ဆိမ့်တဲ့အရသာကိုခံစားရင်း အနီ.ဆံနွယ်လေးတွေကို ခပ်တင်းတင်းဆွဲရင်း
ရှီးးးးးးး!! ကနဲအော်ညည်းလိုက်မိတယ်.... .... .... ... ....
.... .... .... .... .... .... ...
.... ... .... .... ... ..... ..... ....
thinzar on Sun Mar 20, 2011 11:41 pm
၀ါသနာတူ သူနာပြုဆရာမချောချောလေး နဲ.သာယာတဲ့ဘ၀လေးကိုဖြတ်သန်းနေရတဲ့အချိန်တွေလေ။ ဆေးရုံကနေ အနီလေးကိုစက်ဘီးလေးနဲ.တင်နင်းပီး ပျဉ်ထောင်တစ်ထပ်အိမ်ကလေးဆီကို
လာရာလမ်းမှာ ရင်တလှပ်လှပ်တုန်ခဲ့ရတာနေ.တိုင်းပေါ့။ တူတူချက်ပြုတ်ကြ၊ရေမိုးချိုးစားသောက်ပီးတာနဲ. အရူးအမူးချစ်ကြ..ပီးမှဖက်ပီးအိပ်ပျော်သွားကြနဲ.ရွှေရောင်လွမ်းခဲ့တဲ့ ကာလတွေပေါ့ဗျာ။
ကျနော်နဲ.အချစ်စခန်းဖွင့်ဖို.ဆိုရင် ဘယ်တော့မှတွန်.ဆုတ်မနေတတ်တဲ့ ချစ်သူလေးပေါ့။ ချစ်မယ်လာ..အကိုစိတ်ရှိသလောက်ချစ်..အနီ.ကိုငြီးငွေ.သွားတဲ့အထိချစ်ပလိုက်လို.ပြုံးရင်းပြောတတ်တာ
ပေါ့.. အဲ့လိုပြောတိုင်း ကျနော်ကလည်း အို!! တသက်လုံးမငြီးငွေ.ဘူးလို.အကျယ်ကြီးပြန်အော်လေ့ရှိတာပေါ့လေ။ ဘယ်လိုလုပ်ငြီးငွေ.မှာလဲဗျ..တကိုယ်လုံးအပြစ်ဆိုစရာမရှိတဲ့ ကိုယ်လုံးပိုင်ရှင်
သူနာပြုချောချောလေးကိုချစ်ရတာလေ။ ပီးတော့ ကျနော်နဲ.ချစ်ကြတယ်ဆိုတာ တခြားမိန်းမတွေလို ရှက်နေတာ၊တွန်.ဆုတ်နေတာတွေလုံးဝမရှိဘူး။ အရမ်းတက်ကြွတယ်၊ပွင့်လင်းတယ်..ဒါကို
အရှက်မဲ့လွန်းတယ်လို.ခင်ဗျားတို.မထင်နဲ.ဗျ။ ကျနော့်အမြင်အရတော့ ကျနော်နဲ.အနီဟာကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ အင်မတန်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလိုဖြစ်ပီး ကုတင်ပေါ်မှာကြတော့
၂ကိုယ့်၁စိတ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ ခင်ဗျားတို.စဉ်းစားကြည့်လေ.. သာမန်မိန်းမတွေပြောမထွက်ရဲလောက်တဲ့ စကားတွေသူကျနော့်ကိုပြောရဲတယ်ဗျ။
ဒီလိုဗျာ..တခါတလေအိမ်ပြန်ရောက်လို.ကျနော်ကကြော်လှော်ချက်ပြုတ်နေတုံး အနောက်ကနေကျနော့်ကိုသိုင်းဖက်တော့..ကျနော်က ဟေ့ကောင်အနီကလေးပူတူတူး..ဟင်းချက်နေတယ်..လာမနှောက်ယှက်နဲ.လို.အော်လိုက်ရင်..ကျနော့်နားရွက်နားကို ခြေဖျားလေးထောက်သူ.နှုတ်ခမ်းလေးကပ်လာပီးလေသံတိုးတိုးလေးနဲ.
အကို.. .. အနီ.အဖုတ်ကလေးတစ်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်နေလို.သိလား .. အကိုနမ်းပေးတာခံချင်လို.နေမှာ.. ဆိုပီးရယ်သံလေးစွက်ပီးကပ်ပြောတတ်တယ်ဗျာ။
ကဲ!! ကျနော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲခင်ဗျားတို.စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ ကျနော်တကိုယ်လုံးဖျင်းကနဲဖြစ်သွားတာပေါ့..ကိုယ့်ချစ်သူကအဲ့လိုပြောလာရင်စိတ်မလှုပ်ရှားပဲနေမလား။ ချက်ချင်းမီးဖိုပေါ်က
ဟင်းအိုးကိုမ ချလိုက်ပီး အနီ.ထမီလေးကိုကောက်လှန်ပီးေ-ာက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို ကောက်လျှက်ပေးလိုက်တာပေါ့။ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ အနီ.ကိုဒူးထောက်ပီး လျှက်ပေးရင်းညောင်း
လာရင် ထမီဂွင်းလုံးချွတ်ချပလိုက်ပီး ထမင်းစားပွဲပေါ်ပွေ.တင်ပီး ဒူးထောင်ပေါင်ကားထိုင်ခိုင်း ကျနော်ကထိုင်ခုံကိုဆွဲယူပီး ထိုင်စိမ်ပြေနပြေကိုေ-ာက်ဖုတ်လျှက်..ေ-ာက်စိစုပ်ပေးတော့တာလေ။
အင်..ငင်..ငင်.. ဆိုပီးဆက်တိုက်အော်သံထွက်လာရင်ကျနော်သိလိုက်ပီ..(အနီလေး ပီးခါနီးရင် အဲ့လို အင်..ငင်..ငင်..ဆိုပီးထူးထူးဆန်းဆန်းအသံတွေထွက်လာတာဗျ)
ချက်ချင်းကျနော်မတ်တပ်ရပ် ပလိုက်ပီးပုဆိုးကိုချွတ်ချ.. အနီ.ေ-ာက်ဖုတ်ဝမှာ ကျနော့် -ီး ကိုတေ့ပီးဆောင့် -ိုး ချပလိုက်တယ်။ အဖုတ်လျှက်ပေးလို.ပီးတော့မလို အဖြစ်မှာ အဲ့လို -ိုး ပီး အမြင့်ဆုံး
ပို.ပေးတာတော်တော်ထိရောက်တယ်ဗျ။ တကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ်အကြောတွေဆွဲပီး တွန်.လိမ်ရင်းပီးသွားတဲ့အပြင်..ကျနော်အဆက်မပြတ် တဖုန်းဖုန်းဆောင့် -ိုး ရင်းခပ်မြန်မြန်သုတ်ရည်တွေ
ထမင်းစားပွဲပေါ်မှာထပ်လျှက် ကလေး၂ယောက်သားမှောက်အိပ်နေကြပီး ခဏကြာမှလူးလဲထပီး တဟားဟားနဲ.ကြည်နူးတတ်ကြတာပေါ့။
ပုဆိုးလေး၊ထမီလေးတွေကောက်ဝတ်..သုတ်သင်သန်.ရှင်းပီးမှ ကျနော်လည်းထမင်းဟင်းတွေဆက်ချက်ရတော့တာပေါ့။ အနီကတော့ရေချိုးခန်းထဲ တန်းပြေးပီးလျှော်ဖွတ်ရေမိုးချိုး..အမယ်အဲ့
ဒါပီးသွားပီမထင်နဲ.သူရေမိုးချိုးအ၀တ်လဲပီးရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာရင် ထမင်းပွဲပြင်နေတဲ့ ကျနော့်ကို မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြရင်း အကိုရေမြန်မြန်သွားချိုးချေ..ထမင်းတူတူစားပီးရင် အနီလေး
တချို.ရက်တွေကြတော့ ရိုးရိုးတန်းတန်းပွေ.ဖက်ပီး စာတွေတူတူဖတ်၊ငြင်းကြခုန်ကြနဲ.ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဘ၀ကလေးပေါ့။
ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကြီးတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်.. ကျနော်အနီကလေးကိုချစ်တယ်.. ...
ဟားဟား!! ဟေ့အကို အဲ့ဒါသုခမိန်လှိုင်ရဲ.ကဗျာကြီး.. ခစ်ခစ်
... .... .... ..... ....
ဒါဆိုပီးပီပေါ့။ သာယာတဲ့ဘ၀လေး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဇတ်သိမ်းပေါ့။ မဟုတ်သေးဘူးဗျ။ ခင်ဗျားတို.သိတဲ့အတိုင်း ဖိုးသက်ဆိုတဲ့ကျနော်ဟာ မိန်းမတွေနဲ.ပတ်သက်လာရင်တော်တော်ကိုရှုပ်ရှုပ်
ထွေးထွေးပြဿနာတက်တတ်တဲ့ကံအကြောင်းတရားကပါတာတာကိုးဗျ။ ကျနော့်ဆရာသမား ကိုရွှေဘက ညစ်တီးညစ်ပတ်တခါကပြောဖူးသလိုပေါ့.. ဟေ့ကောင်ဖိုးသက်..မင်းဆိုတဲ့ကောင်က
ေ-ာက်ဖုတ်ကျိန်စာသင့်နေတဲ့ကောင်ပါကွာဆိုလား။ မိန်းမတွေနဲ.ပတ်သက်လာရင် အဲ့လိုကျိန်စာဆန်ဆန်တွေဖြစ်ဖြစ်လာတာ တစ်ဘ၀လုံးပဲ။ ပြဿနာက ဆေးရုံတက်နေတဲ့ကျနော့်အဘိုးဆေး
ရုံကနေကောင်းလို.ဆင်းရမယ့်နေ.မနက်မှာစတာဗျို.။ အနီတစ်ယောက်ညဂျူတီကတစ်ယောက်ထဲပြန်သွားပီ။ ကျနော်ကဟိုကောင်ကာတွန်းဆရာကို ဒီနေ.အဘိုးဆေးရုံဆင်းမှာမို.ဒီကောင့်ဂျစ်
ကားလေးယူပီးလာကြိုဖို.မှာထားတယ်။ ဘွားလေးမေရယ်ကျနော်ရယ်ပစ္စည်းလေးဘာလေးသိမ်းပီး ဆရာဝန်ကြီး ရောင်းလှည့်ပီးရင် ဆင်းလို.ရပီဆိုပီးပြင်ဆင်နေကြတာပေါ့။ မနက်ခင်း၉နာရီ
လောက်ကြတော့ ဆရာဝန်ကြီးရောက်လာပီး.. ဦးရဲမြင့်ဆင်းလို.ရပါပီ..နောင်ကိုဆင်ခြင်ဖို.ဘာညာတွေ..ကျနော့်အဘိုးကလည်း ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျနော်တော်တော်အသိတရားရပါပီ
ဘာညာတွေပြန်ပြောနေတုံး.. ဆရာဝန်ကြီး ဘေးကပါလာတဲ့လက်ထောက်ဆရာဝန်မက ဘွားလေးမေအနားမှာကပ်ပီး ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ.စကားတွေတိုးတိုး တိုးတိုးပြောရင်းကျနော့်ကိုလှမ်းလှမ်း
ဘုရားဘုရား!! ဂျူတီကုတ်အဖြူ၊ထမီအနက်ရောင်နဲ.ဆံပင်တွေကိုသေချာထုံးထားတဲ့ ဆရာဝန်မဟာ.... ...ဟိုရေတွင်းနားမှာကျနော်နဲ.ဖြစ်ခဲ့တဲ့မိန်းမပါလား!!
အမြဲတမ်းတင်းမာနေတတ်တဲ့သူ.မျက်နာက ခုတော့ချိုပြုံးလို.ပါလားဗျာ။ နေပါဦး..ဒီဆရာဝန်မက ဘာကိစ္စ တစ်လလုံးလုံးဆေးရုံမှာရှိမနေပဲ..ကျနော့်ကိုထမင်းဟင်းတွေချက်ကျွေးနေခဲ့တာလဲ
ခုဘွားလေးမေကော..အဲ့ဒီဆရာဝန်မကော..ကျနော့်ကိုကြည့်ပီးဘာတွေတပြုံးပြုံးပြောနေကြတာလဲမသိဘူး။ ကျနော်တော်တော်လေးရင်ထိတ်နေပီ။ ပီးတော့.. ကျနော်ပြဿနာကြီးကြီးမားမား
thinzar on Mon Mar 21, 2011 12:05 am
ဆေးရုံအောက်ကို အားလုံးဆင်းလာကြတော့ အဲ့ဒီမိန်းမပါလိုက်လာတယ်ဗျ။
ကျနော်ကတော့ အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင်တော်တော်လေး ခြောက်ခြားနေပီ။ စိတ်လည်းတော်တော်ရှုပ်ထွေးစပြုလာတယ်။ ပစ္စည်းပစ္စယတွေအကုန်ကားပေါ် တင်ပီး အဘိုးလေးကိုတွဲပီးကားရှေ.ခန်း
ကိုပွေ.တင်ရင်း ဟိုဆရာဝန်မ ကိုတချက်လောက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အောက်နှုတ်ခမ်းကိုသွားလေးနဲ.ဆတ်ကနဲကိုက်၊မချိုမချဉ်လေးလုပ်ပြနေတယ်။ ဖူးးးးးးးး!! ကျနော်တော့ရင်မောနေပီဗျာ။
ရီရီလေး..အရီးမေတို.သွားပီကွယ်.. ညနေမှနင့်မောင်ကို အကြိုလွှတ်လိုက်မယ်နော်.. ဘွားလေးမေလှမ်းအော်တာကို..
ဟုတ်..အရီး.. ဆို.အဲ့ဒီဆရာဝန်မကလှမ်းပြောရင်း ပြုံးရယ်လို.လက်ပြပီး ကျန်ခဲ့တယ်။
အိမ်ရောက်တော့ အဘိုးကိုအတက်အဆင်းခက်မှာ စိုးလို. အိမ်အောက်ထပ်ဧည့်ခန်းနဲ.ကပ်လျှက်အခန်းမှာ နေရာချထားပေးလိုက်တယ်။ ဟိုလိုလူမမာကြီးမဟုတ်တော့ပေမယ့် အားတော့သိပ်မရှိ
သေးဘူးဆိုတော့ သက်တောင့်သက်သာလေးရှိအောင်စီစဉ်ပေးရတာပေါ့လေ။ အားလုံးပီးသွားတော့မှ ကျနော့်သူငယ်ချင်းလည်းပြန်သွားတယ်။ အဘိုးကို အခန်းထဲကပြူတင်းပေါက်တွေအလင်း
ရောင်ကောင်းကောင်းရအောင်ဖွင့်ထားပေးခဲ့ပီး စာအုပ်၃-၄အုပ်အပျင်းပြေဖတ်ဖို.ချထားပေးခဲ့ပီး မီးဖိုချောင်ဖက်ကိုဗိုက်ဆာလာတာနဲ. မနက်စာတစ်ခုခုစားမယ်ဆိုပီးထွက်လာခဲ့တယ်။ဘွားလေးမေ
မြေးလေး.. ရော့ မြေးအကြိုက် အုန်းထမင်း.. ကော်ဖီခါးခါးလေးကောပါတယ်..စားနော်သား... ဆိုပီးကျနော်အားရပါးရစားနေတာကိုပြုံးပီးသဘောတွေကျနေတယ်။
ဖိုးသက်အိမ်ပြန်မလာတာခုတလောကြာနေပီတဲ့.. ရီရီလေး ကထမင်းဟင်းတွေချက်ပီးနေ.တိုင်းစောင့်နေတာတဲ့ ဟုတ်လားမြေးရဲ.
ကျနော်..သူငယ်ချင်းအိမ်သွား သွားလည်နေတာနဲ.အိမ်မပြန်ဖြစ်တာပါ ဘွားလေးမေ!!
ရီရီ ကဆေးရုံမှာ ပီးခဲ့တဲ့ ၂လလောက်ကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လို. ခွင့်တင်ပီးအိမ်မှာနားနေတာလေ မြေးရဲ. စိတ်နည်းနည်းထိခိုက်သွားတာဆိုလားကွယ်.. လူနာကတော့မဖိတ်မစင်သွား
ပေမယ့် သူ.အမှားကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုပီး ရီရီ.ခမျာတော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရှာတာကွယ့်.. ခုမှသူလည်းရယ်ရယ်ပြုံးပြုံးပြန်ဖြစ်လာတာ...
သြော်..ဟုတ်ဘွားလေး!! (ဒါကြောင့်သူ.မျက်နာက ခက်ထန်သလိုလိုဖြစ်နေခဲ့တာကိုးလို.ခုမှသဘောပေါက်တော့တယ်)
ဟဲ့.. အဲ့ဒီ ရီရီဆိုတဲ့ဆရာဝန်မလေးက မြေးသူငယ်ချင်း ပုံ.ပုံ.လေကွယ်..ဖိုးသက်
ကျနော်မျိုချနေတဲ့ အုန်းထမင်းတွေလည်ချောင်းမှာတစ်ဆို.ဆို.ကြီးဖြစ်သွားပီဗျာ။ ကျနော်မှင်တက်ပီးဘာမှလည်းဆက်မပြောနိုင်တော့ဘူး။ ဘွားလေးမေကိုငေးကြည့်နေမိတယ်။ ဘွားလေးမေ
ကတော့ဘာမှမသိရှာဘူးဗျာ။ တပြုံးပြုံးနဲ.စကားတွေဆက်ပြောနေတယ်... .... ...
ဘွားမေရဲ.တူမလေ မြေးရ..ငါမြေးလေးဆိုးပေနေတယ်ဆို!! ဘွားမေတူမလေးနဲ.ဆိုသားမိဘတွေကမြန်မြန်ပေးစားချင်တယ်လို.ဖုန်းဆက်တယ်ကွယ့်
ရီရီ.ကိုသားမိဘတွေကလည်း သဘောကျပီးသား.. ဘွားမေတူမလေးကိုလည်း နည်းနည်းစကားလမ်းကြောင်းကြည့်တော့ သားကိုသဘောကျပုံရတယ်ကွယ့်.. .... ...
ပုံ.ပုံ.ကငယ်ငယ်ကထဲကဖိုးသက်ဖိုးသက်နဲ.ခုထိမမေ့ရှာဘူးလေ.. သားအံ့သြနေတာလား..ညနေဆေးရုံကပုံ.ပုံ.ပြန်လာရင် သားသွားကြိုနော် ဟုတ်ပီလား... .... ...
ကျနော်ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိလို.စားလက်စမနက်စာကိုမြန်မြန်လက်စသတ်လိုက်ရင်း ပူလာလို.ရေချိုးတော့မယ်ဆိုပီး အကြောင်းပြရင်း ရေတွင်းဖက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။
ကျနော့်ခေါင်းတွေမီးတောက်တော့မတတ်ပူလောင်နေပီဗျာ။ ရေအေးအေး၃-၄ပုံးလောက်ခေါင်းကနေလောင်းချလိုက်ပီး ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပီလဲလို.တွေးကြည့်နေမိတယ်။ ရီရီ၊ပုံ.ပုံ. မျက်လုံးကိုစုံ
ကျနော့်ငယ်ဘ၀.. ... ....
အိပ်ယာကနေမနက်စောစောနိုးလာရင်.. အသားညိုညိုဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ.ကောင်မလေးတစ်ယောက် ကျနော့်အိပ်ယာဘေးမှာရောက်ရောက်နေတတ်တာမှတ်မိတယ်။ ကျနော့်ထက်၂နှစ်လောက်
ကြီးတဲ့ပုံ.ပုံ.ဆိုတဲ့ကောင်မလေး။ အိမ်နားက မူလတန်းကျောင်းကိုတူတူသွားရင် ကျနော့်လွယ်အိတ်ကလေးကိုအတင်းဆွဲယူပီး ပုံ.ပုံ.သယ်ပေးမယ်ဆိုပီးအတင်းလုတတ်တဲ့ကောင်မလေး။
ကလေး၂ယောက် အိမ်ခြံအနောက်က ရေကန်မှာရေတူတူချိုးရင် မေမေစပ်ထားပေးတဲ့တရော်ကင်မွန်းခေါင်းလျှော် ရည်ကိုလက်ခုပ်လေးနဲ.ခပ်ခပ်ပီး ကျနော့်ကိုခေါင်းလျှော်ပေးတတ်တဲ့ကောင်
မလေး။ ကျနော်အနိုင်ကျင့်သမျှ ငိုမဲ့မဲ့နဲ. ဖိုးသက်လေးက ပုံ.ကိုအရမ်းနိုင်စားပေးတယ်ဆိုပီး သည်းခံတတ်တဲ့ကောင်မလေး။ ဘွားမေနဲ.အဘိုးလေးတို.ဘွားမေရဲ.ဇာတိကိုအပီးပြောင်းတော့မယ်
ဆိုတော့ ဖိုးသက်လေးရေ တာ့တာ... ငါပြန်လာရင်နင့်အတွက် ပူစီပေါင်းတွေ၅ပန်းကန်ပြားလောက်ယူလာမယ်နော်လို. အော်ရင်းမြင်းလှည်းလေးပေါ် ငိုရင်းပါသွားတဲ့ကောင်မလေး။ ကျနော်
တော်တော်အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အထိ ပူစီပေါင်း၅ပန်းကန်ပြားဆိုတဲ့ငိုသံပါပါအော်သံကလေးကို အမှတ်ရနေခဲ့ဖူးတယ်ဗျာ။
သူကျနော်အိပ်နေရင် လာလာရပ်ကြည့်နေခဲ့တာ ဖောက်ပြန်တာမှမဟုတ်ပဲ.. ဟိုးငယ်ငယ်ကလို ကျနော်မထသေးရင်လာလာစိုက်ကြည့်နေရှာတာပါလား။ ကျနော့်ကိုငေးငေးကြည့်နေခဲ့တာဟာ
ငယ်ငယ်က ကောင်လေးဆိုတဲ့ သံယောဇဉ်နဲ.ပေါ့။ ဒါဆိုရေတွင်းမှာတုံးက ကိစ္စဆိုတာ သူ.စိတ်ထဲမှာငယ်ငယ်ကလို ကျနော့်ကိုခေါင်းလျှော်ပေးဖို. .. ... ..... ဟားးးးးးးးးးးးးးးးး !!! သွားပီဗျ။
မှားကုန်ပီ။ ကျနော်ထင်သလိုမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်ဟာသက်သက်မဲ့ထင်တစ်လုံးနဲ.နိုင့်ထက်စီးနင်း လုပ်ခဲ့တာပေါ့? ကဲ..ကျနော်ဘာဆက်လုပ်ရတော့မလဲဗျာ။
ရေချိုးပီးတော့ အိပ်ယာပေါ်မှာခွေခေါက်ရင်း စီးကရက်တွေတစ်လိပ်ပီးတစ်လိပ်ဖွာနေမိတယ်။
စိတ်မကောင်းတာတွေ၊နောင်တရတာတွေ၊ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိတာတွေနဲ.ဘယ်လိုမှနေလို.ထိုင်လို.မရတော့ဘူးဗျာ။ ညနေစောင်းတော့ ဘွားမေက မြေးမင့်ဆရာဝန်မလေးကိုသွားကြိုတော့
လောလောဆယ်... ကျနော့်ငယ်ငယ်က သူငယ်ချင်းကိုဘယ်လိုမျက်နာချင်းဆိုင်ရမလဲတွေးလို.တောင်မရဘူးဗျာ.. ... ... ... ... ...
thinzar on Wed Mar 30, 2011 12:42 am
ဆင်ဝင်အောက်က အုတ်ခုံနားမှာစက်ဘီးကိုဒေါက်ထောက်ပီးထောင်ထားလိုက်တယ်။ ထိုင်ရမလိုထရမလိုဂနာမငြိမ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ ကျနော့်ညာဖက်လက်ချောင်းတွေစိတ်လှုပ်ရှားလို.တုန်နေတာ
တော်တော်လေးသိသာနေတယ်။ သက်ပြင်းကြိတ်ချလိုက်ရင်း ကျနော်ဝတ်ထားတဲ့AR>>တံဆိပ်တရုတ်စပို.ရှပ်အပြာရောင်နုနုလေးနဲ.ဂျင်းပန်အနက်ရောင်ကိုဆွဲဆန်.လိုက်ဆွဲမလိုက်လုပ်နေမိတယ်
ဆေးရုံထဲဝင်ပီးသွားခေါ်ရမှာလား၊ ဒီနေရာမှာပဲစောင့်နေရမလား..ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ ကြံရာမရဖြစ်ပီး အုတ်ခံလေးပေါ်တက်ပီးဆောင့်ကြောင့်ထိုင် ရင်းခေါင်းကုတ်ဖင်ကုတ်ဖြစ်နေတုံး. ..
သံမံတလင်းနဲ.ဖိနပ်ရှပ်တိုက်လို.ထွက်လာတဲ့အသံကြားရတယ်။ လူတစ်ယောက်အပြင်ကိုထွက်လာတာ။ ကျနော်ရုတ်တရက်လှမ်းမကြည့်ရဲလို.ခေါင်း ငုံ.နေမိတယ်။ ခြေသံရပ်သွားတော့မှမရဲတရဲ..
မော့ကြည့်လိုက်တော့.. ... ...
ဒေါက်တာမလေးရီရီဒါမှမဟုတ် ကျနော့်ငယ်ငယ်ကသူငယ်ချင်း ပုံ.ပုံ. ဂျူတီကုတ်ဖြူဖြူလေးကို လက်ဖျံပေါ်ခေါက်ပီးတင်ထားတယ်၊မနက်ကလိုဆံထုံးနဲ.မဟုတ်တော့ပဲ ဆံပင်အရှည်ကြီး
ကိုထုံးစံအတိုင်းအရှေ.ဖက်ကို ချထားပီးလက်ကိုင်ပ၀ါဖြူဖြူလေးနဲ.စည်းနှောင်ထားလို.၊ အဖြူရောင်အခံမှာပန်းပွင့်ဝါ၀ါလေးတွေပါတဲ့ ဘလောက်စ်လက်ပြတ်ကလေးနဲ.ထမီအနက်ရောင်ကလေးကို
ပိပိပြားပြားလေးဝတ်ထားတယ်။ သွယ်လျလျကိုယ်လုံးကလေးနဲ.အရပ်မြင့်မြင့်ဆိုတော့ကြည့်ကောင်းလွန်းနေတယ်ဗျာ။ တခါကတင်းလွန်းလှတဲ့ မျက်နာလေးက ခုမချိုမချဉ်ပြုံးတုံ.တုံ.လေး၊ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးက စိုလက်လက်ဖြစ်နေတာစိတ်ယားစရာလေး(ခုမှနှုတ်ခမ်းနီဆိုးလာမှန်းသိသာနေတယ်)၊ လေညှင်းလေးကဆေးရုံအရှေ.က ပန်းခင်းလေးကိုတိုးခတ်ရင်းဖြတ်တိုက်လာတော့
ဆရာဝန်မလေးရဲ.ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်ဆံနွယ်ရှည်တွေက လွှင့်ပါနေတာကိုလက်ကလေးနဲ.ထိန်းထားရင်း ကျနော့်ကိုပြုံးပြနေရှာတယ်။
အုတ်ခုံလေးပေါ်ကနေကျနော်ဖျတ်ကနဲခုန်ဆင်းလိုက်ရင်း ဆရာဝန်မလေးကို လက်၅ချောင်းထောင်ပြလိုက်ရင်းခပ်တည်တည်မေးဆတ်ပြလိုက်တယ်။
ဟိုးငယ်ငယ်က မြင်းလှည်းလေးပေါ်ကနေငိုရင်း အော်သွားတဲ့ ပူစီပေါင်း၅ပန်းကန်ပြားဆိုတာ သူသတိရသေးလားလို.စမ်းလိုက်တာလေ။ ချက်ချင်းမျက်လုံးညိုညိုလေးတွေက အုံ.မှိုင်းသွားပီး
မျက်ရည်တွေဝဲတက်လာတာကိုမျက်နာချင်းဆိုင်ရပ်နေတဲ့ ကျနော်မြင်လိုက်ရတယ်ဗျာ။ ဘုရားရေ!! သူမမေ့သေးဘူးပေါ့.. နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့တာတောင် ခုထိငယ်ငယ်ကကောင်မလေးလို
စိတ်ထိခိုက်လွယ်နေသေးသတဲ့လားကွယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ထိခိုက်နေပီဗျာ။ ကျနော့်ကိုမျက်နာလွှဲပီး ဟိုးအဝေးကိုငေး ရင်းမျက်တောင်တွေကိုပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လှုပ်နေရှာတယ်။
အခြေနေကိုထိန်းတဲ့သဘောနဲ.ကျနော်သူ.လက်ထဲက အိတ်အနက်ကလေးကိုဆွဲယူပီး စက်ဘီးဒေါက်ကိုဖြုတ်ရင်း စက်ဘီးကယ်ရီယာပေါ်တက်ဖို. လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ.ပြလိုက်တယ်။ စွေ.ကနဲ
ဆေးရုံအပြင်ဖက်ရောက်သွားတာနဲ.အနောက်ကနေ ကျနော့်ခါးကိုသူ.ညာဖက်လက်နဲ.သိုင်းဖက်ရင်း ကျနော့်ကျောကို မျက်နာလာအပ်ထားတယ်။
ကျနော်စက်ဘီးကိုကမ်းနားလမ်းဖက်ကို ဦးတည်ပီးနင်းနေမိတယ်။ ကျနော့်ရင်ဘတ်ထဲမှာ ပြောစရာစကားတွေအပြည့် ဒါပေမယ့်ခုထိပြောလို.မထွက်သေးဘူး။ ကမ်းနားလမ်း မြစ်ကမ်းပါးအမြင့်
ကြီးနှုတ်ခမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ မန်ကျည်းဖျော်ရည်ရောင်းတဲ့ ခုံပုပုလေးတွေနဲ.ဆိုင်တစ်ဆိုင်အရှေ.ရောက်မှစက်ဘီးကိုရပ်လိုက်တယ်။ အစွန်အကျဆုံး စားပွဲပြာပြာလေးတစ်ခုမှာထိုင်လိုက်ရင်း.. ...
မြစ်ကမ်းပါးထနောင်းပင်အောက်မှာ လေအေးအေးလေးတွေတိုက်နေတယ်။ ငါးကြင်းကွက်ဖန်ခွက်ကြီးထဲကမန်ကျည်းဖျော်ရည်ချိုချိုကိုမော့ချလိုက်ပီး ကျနော့်အိပ်ကပ်ထဲကစီးကရက်
တစ်လိပ်ထုတ်ပီးဖွာရင်း အရှေ.မှာထိုင်နေတဲ့ဆရာဝန်မလေးကို စိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ သူကလည်းဖျော်ရည်မော့လိုက် ကျနော့်ကိုစူးရဲရဲလေးပြန်စိုက်ကြည့်လိုက်နဲ. စိတ်လှုပ်ရှားနေမှန်းတော်
တော်လေးသိသာနေတာပေါ့။ ဂျူးလိယက်ဆီဇာ၊မတ်ခ်အန်တိုနီတို. ကိုရူးအောင်ဖမ်းစားခဲ့တဲ့ အီဂျစ်ပြေကအလှဘုရင်မ ကလီယိုပက်ထရာ ဆိုတာတခြားသူမဖြစ်နိုင်ဘူး..ခုကျနော့်ရှေ.မှာတောင့်
ကျနော်ရုတ်တရက်ခေါ်လိုက်တော့ အလန်.တကြားလေး ကျနော့်ကိုငေးနေရာကပြန်ဖြေတယ်။
ဘယ်မှာလဲ ငါ့အတွက် ပူစီပေါင်း၅ပန်းကန်ပြား?
အာကွာ.. Kiss Kiss
နင့်ပူစီပေါင်းကိုငါမျှော်ခဲ့တာ အနှစ်၂၀လောက်ကြာသွားတယ်ဟာ.. ..
တော်ပါဟာ.. ကျောင်းတက်တုံးက ပုံ.လာရှာတယ်နော်..ဖိုးသက်လေးကသာမေ့နေတာ ဟွန်း!!
အင်း.. ဖိုးသက်လေးကနာမည်ကြီးလေ.. ဖဲတအားရိုက်.. ဂစ်တာတီးတာနာမည်ကြီး.. စာမေးပွဲတွေတဖုန်းဖုန်းကျ ..ဟုတ်လား?
ပုံ. ကတစ်ရက်မှမမေ့ခဲ့ပါဘူးနော်.. ဖိုးသက်လေးကသာပြန်တွေ.တော့ လုံးဝမမှတ်မိတာ.. ...
အော.. ငါသိတဲ့သူငယ်ချင်းက ရုပ်ဆိုးဆိုး မဲတူမလေးကိုး .. ခုလိုချောချောလှလှဒေါက်တာရီရီ မှန်းဘယ်လိုမှတ်မိမလဲ..
ကျနော်အဲ့လိုပြုံးစစနဲ.ပြောလိုက်တော့ မျက်နာလေးကရှက်သွေးဖြာ သွားပီး ရှက်စနိုးပုံစံလေးနဲ. အောက်နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ပီးခေါင်းငုံ.သွားပြန်ရောဗျ။ ကျနော်သူ.ဟန်ပန်ကလေးကိုကြည်ကြည်
နူးနူးနဲ.ငေးကြည့်နေရင်း ဟိုးရေတွင်းနားမှာ သူ.ကိုအနိုင့်အထက်လုပ်ခဲ့မိတာသတိရသွားတယ်။ ကျနော်တော်တော်စိတ်ထိခိုက်တယ်ဗျာ။ ယုန်သူငယ်မကလေးလိုဖြူစင်ပီး တသက်လုံးကျနော့်
ကိုမမေ့နိုင်ရှာတဲ့ သူ.အပေါ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့မိတာ ယူကြုံးမရဖြစ်မိတာအမှန်ပါ။
ပုံ.ပုံ. ငါလေ..ဟို..ဟို..ရေတွင်းမှာလေ.. ...အဲ့ဒါ... ငါ... ငါ
တော်ပီဟာ.. မပြောနဲ.တော့ (မျက်လုံးစုံမှိတ်ပီး အော်ရှာတယ်)
ငါနင်မှန်းမသိလို. ငါ.. .. လေ..
ကျနော်ဘာဆက်ပြောရမှန်း မသိလို.သူ.ကိုအသနားခံတဲ့အကြည့်နဲ.ကြောင်ငေးနေမိတယ်။ ၂ယောက်လုံးဘာစကားမှဆက်မပြောဖြစ်တော့ဘူး။ တိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ ၁မိနစ်...၃မိနစ်...၅မိနစ်
ကျနော်တို.ထိုင်နေတဲ့အပေါ်က ထနောင်းရွက်တွေကိုလေတိုးသံတရှဲရှဲကလွှဲပီး ဘာသံမှမကြားရလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်နေပီ။
..... .... .... .... .... .... ... .... ........
..... ... .... ..... ... .... .... .... .........
.... ..... .... .... ... ... ... ... ... ... .....
... .... ... ... ... .... .... ... .... ... .... ..
အရီးမေ ကငါ့ကိုပြောတယ်..နင်နဲ.ငါ့ကိုပေးစားမလို.တဲ့.. ... ...
ကျနော့်ကိုမော့ကြည့်ပီး တုန်ယင်နေတဲ့လေသံနဲ.တိုးတိုးပြောပီးခေါင်းလေးပြန်ငုံ.သွားတယ်။ ခဏငြိမ်သွားပီး ဆရာဝန်မလေး မတ်တပ်ရပ်ဆတ်ကနဲရပ်လိုက်တော့ ကျနော်လန်.ပီးမော့ကြည့်မိ
ဖိုးသက်လေး..နင်ကငယ်ငယ်ကအတိုင်းပဲ ဘာမှမပြောင်းလဲဘူး ... ငါ့ကိုနိုင်စားပေးတယ်..
နင်ငါ့ကိုရှောင်နေတော့..ငါအရမ်းဝမ်းနည်းတယ်သိလား... ရေတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စ ငါလေ..ငါ.. နင့်ကိုစိတ်မဆိုးပါဘူးဟာ..
ငါမှတသက်လုံးနင့်ကို မေ့မရခဲ့တာဟာ... ...
အဲ့လိုဆက်တိုက်ပြောပီး လှစ်ကနဲသမင်မလေး လိုထွက်ပြေးသွားရှာတယ်။ အအေးဖိုးရှင်းပီး ကျနော်ထလိုက်သွားတော့ စက်ဘီးလေးဘေးမှာ ခေါင်းငုံ.ပီးတုန်တုန်ယင်ယင်နဲ.ရပ်ရင်းခေါင်းကို
အတင်းငုံ.ထားတယ်။ ဆရာဝန်မလေး ကိုတင်ပီး စက်ဘီးလေးကိုနင်းရင်း ထွက်လာခဲ့တော့ ကျနော့်ရင်ဘတ်ထဲမှာ လှိုက်ဖိုနေရင်း သက်ပြင်းတွေခိုးချနေမိတယ်ဗျာ။
thinzar on Wed Mar 30, 2011 12:43 am
ညကတိတ်ဆိတ်နေတယ်။ ပိုးပုရစ်အော်သံကလေးတွေ တစီစီကလွဲပီး လူသံသူသံဘာမှမ မကြားရဘူး။
ကျနော်နဲ.ဆရာဝန်မလေးရီရီတို.၂ယောက် ခြံအနောက်ဖက်ကိုရောက်နေကြတယ်။ ရေတွင်းဘေးက ခါးလောက်မြင့်တဲ့ အုတ်ရေလှောင်ကန်ကလေး အောက်ခြေသံမံတလင်းမှာ နှီးချောဖျာကလေး
ခင်းပီး အုတ်ကန်ကိုကျောမှီရင်းထိုင်နေကြတယ်။ အိမ်မကြီးကိုကျောပေးထားလျှက်နဲ.ပေါ့။ အဘိုးလေးနဲ.ဘွားမေတို.အိပ်ပျော်သွားလောက်ပီ။ ညကလည်းတော်တော်နက်လာပီလေ။ ညနေကအိမ်
ပြန်ရောက်တော့ ၂ယောက်သားရေတွင်းမှာ ရေတူတူချိုးကြတော့ ကျနော့်ကို ဖိုးသက်လာဆိုပီး ခေါင်းလျှော်ပေးသေးတယ်။ ပီးတော့ ကျနော့်ကို တချိန်လုံးအရိပ်တကြည့်ကြည့်လုပ်နေရှာတယ်။
ထမင်းဝိုင်းမှာလည်း ခွံ.မကျွေးရုံတမယ် ယုယပြနေတော့..ဘွားလေးမေကတောင်..ပြုံးစိစိလုပ်ပီး သားတို.သမီးတို.လွတ်လွတ်လပ်လပ်စားကြနော်ဆိုပီး ရှောင်ထွက်သွားခဲ့တာဗျ။ ညဦးပိုင်းအဘိုး
လေးကို ဆရာဝန်မလေး ကြည့်ရှုပေးပီးပြန်သွားတော့မှသက်ပြင်းချမိတယ်။ (သူကတဖက်ခြံမှာ ခိုင်းတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ.နေတာဗျ) သူပြန်သွားတော့မှကျနော်လည်းလှေကားရင်းနားက
ကုတင်ပေါ်မှာ ဇာခြင်ထောင်လေးထောင်ပီး ဒီနေ.တနေ.လုံး ဘာတွေမှန်းမသိဖြစ်ခဲ့တာတွေပြန်တွေးရင်း တလူးလူးတလှိမ့်လှိမ့်နဲ.အိပ်လို.မရဖြစ်နေတာဗျ။
ည၁၁နာရီလောက်ကြတော့ ကျနော့်ခြင်ထောင်အပြင်ဖက်မှာ လူရိပ်တစ်ခုတွေ.တာနဲ.ဆတ်ကနဲထထိုင်ပီး ခြင်ထောင်အပြင်ဖက်ကိုထွက်လိုက်တော့...
ဆရာဝန်မလေးဖြစ်နေတယ်။ ကျနော့်ကိုနှုတ်ခမ်းပေါ်လက်ညှိုးလေးတင်ပီး တိုးတိုးဆိုတဲ့ အမူရာလုပ်ပြပီး သူ.နောက်လိုက်ခဲ့ဆိုပီး လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ.ပြတော့ အသာလေးထပီး လိုက်သွားမိတယ်။ နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်တံခါးကနေ ၀င်လာဟန်တူရဲ.။ အိမ်အပြင်ရောက်သွားတာနဲ. ကျနော့်ကိုရင်ချင်းအပ်ပီး အတင်းဖက်ထားတော့တာဗျ။ ကျနော်လည်းဘာလုပ်ရမှန်းမသိ
တာနဲ.ခပ်တောင့်တောင့်ကြီးရပ်နေမိတယ်။ ပူအိုက်လွန်းတဲ့ရာသီဥတုကြောင့် မိန်းမ၀တ်စွပ်ကျယ်အဖြူပါးပါးလေး ၀တ်ထားပီးအောက်က အခုအခံမပါတော့ သူ.ရင်အစုံဟာကျနော့်ရင်ဘတ်နဲ.ဖိ
မိပီးအိကနဲဖြစ်သွားတယ်။ သက်ပြင်းကြိတ်ချရင်း သူ.ကိုယ်လုံးလေးကို ပုခုံးကနေကိုင်ပီးဆွဲခွါလိုက်တော့... မပီဝိုးတ၀ါးအလင်းရောင်မှာ ကျနော့်ကို အရမ်းမြတ်နိုးချစ်ခင်တဲ့ဟန်နဲ.မျက်လုံးလေး
ကျနော်လည်းအကြည့်ကိုလွှဲဖယ်လိုက်ရင်း သူ.လက်ကလေးကိုဆွဲပီး အုတ်ရေကန်လေးနားကို အိမ်မကြီးနဲ.ဝေးနိုင်သမျှဝေးအောင်ဆွဲခေါ်လာလိုက်တယ်။
အုတ်ကန်လေးကို၂ယောက်သားမှီတွယ်ရင်း တူတူထိုင်နေကြတယ်။ ဘေးတိုက်အနေအထားနဲ.သူ.ကိုကျနော်စောင်းငဲ့ ကြည့်မိတော့ အုပ်ဆိုင်းနေတဲ့ သစ်ပင်တွေကြားထဲက ဖြာကျနေတဲ့
လရောင်ဖြူဖြူအောက်မှာ ကပိုကရိုဆံနွယ်ရှည်ရှည်တွေဖုံးထားတဲ့ မျက်နာသွယ်လျလျလေးက ကျနော့်ကိုလှမ်းကြည့်နေပုံက ကလူ၏သို.မြူ၏သို.။ နှုတ်ခမ်းလေးတွေက တလှုပ်လှုပ်တရွရွနဲ.
တစ်ခုခုပြောတော့မလိုလို။ အိမ်ထဲမှာအိုက်စပ်စပ် ဖြစ်လာတာ ခုခြံထဲဆင်းလာတော့ အေးစိမ့်စိမ့်လေးနေလို.ကောင်းနေပေမယ့် ကျနော့်ရင်ဘတ်ထဲမှာ မီးစနဲ.ထိုးသလိုလောင်မြှိုက်လာပီဗျာ။
ကျနော်ဘာလုပ်ရမလဲဗျာ။ တိတ်ဆိတ်နေတာကို သည်းမခံနိုင်တဲ့အဆုံး ကျနော့်ငယ်ငယ်က သူငယ်ချင်းလေးက ခပ်တိုးတိုးစကားစပြောတယ်..
ဖိုးသက်လေး!! (အဲ့လိုခေါ်ရင်း ကျနော့်မျက်နာကိုသူ.လက်ချောင်းတွေနဲ.ကိုင်တွယ်ပွတ်သတ်စပြုလာတယ်)
ငါလေ..ငါတသက်လုံးနင့်ကို သတိရနေခဲ့တာပါဟာ.. (အသံလေးကတုန်တုန်ခါခါကလေးဖြစ်နေတယ်)
ငါသိပါပီဟာ.. ပုံ.ပုံ.ရာ..ငါလည်း အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀အထိ နင်ငိုရင်းအော်သွားတဲ့ ပူစီပေါင်း၅ပန်းကန်ပြားဆိုတာ..အိပ်မက်တွေထဲမှာအမြဲကြားခဲ့တာပါ..
ငါလေ..ငါကအရူးပါဟာ..သိလားဖိုးသက်ကလေး.. ကျောင်းတက်တော့..နင်နေတဲ့အဆောင်H-2 အရှေ.ကနေ နင့်ကိုလာလာရပ်ပီးကြည့်ဖူးတယ်..ခေါ်လည်းမခေါ်ရဲ..ငါ့မှာလေ...
ဘုရားရေ!! အဲ့ဒါတွေကျနော်မှမသိခဲ့တာဗျာ။ အဖျားခတ်နေတဲ့ရှိုက်သံလေးနဲ.ဆက်မပြောတော့ပဲ ဆို.နင့်နေတဲ့ဟန်ကလေးနဲ. ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲအတင်းတိုးဝင်ပီး ကျနော့်ရင်ဘတ်ပေါ်ပါးအိအိ
လေးကိုကပ်ထားပီးတကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ်တုန်နေရှာတယ်။ မြင်းခေါင်းစွပ်ကျယ်လက်ပြတ်ဝတ်ထားတဲ့ ကျနော့်ရင်ဘတ် မှာနွေးကနဲနွေးကနဲဖြစ်သွားတယ်။ ပုံ. လို.ကျနော်အဖျားဆွတ်ခေါ်
ခဲ့ဖူးတဲ့ကောင်မလေး ရဲ.မျက်ရည်တွေစိုကုန်ပီဗျာ။ တဟင့်ဟင့်နဲ.ရှိုက်နေတဲ့ သနားစရာကျနော့်ရင်ခွင်ထဲက ကောင်မလေးကို ကျောလေးဖွဖွပွတ်ရင်းချော့နေမိတယ်။ ရင်ထဲမှာတော်တော်ထိထိ
ရှရှခံစားနေရပီ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်း ဘာလုပ်မိမှန်းမသိခင် ကျနော့်မေးစိအောက်က ဆံနွယ်ရှည်လှလှလေးတွေကို ခေါင်းငုံ.ပီး မွှေးမွှေးပေးနေမိတယ်။ ရုတ်တရက်မော့လာတဲ့ နဖူးတင်းတင်း
လေးကိုပါ မွှေးပလိုက်မိတယ်။ မျက်ရည်တွေနဲ.စိုလက်နေတဲ့ ကောင်မလေးနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပြုံးနေရှာပီဗျာ။
ပုံ.လေ ဒီတစ်ခါ ဖိုးသက်လေးနဲ.ခွဲရရင်သေမှာသိလား.. ဘယ်မှမသွားနဲ.တော့နော်..ပုံ.နဲ.မခွဲကြေးနေစို.နော်..
ကျနော်ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိပဲခေါင်းငြိမ့်ပြနေမိတယ်။ ကျနော့်ရှေ.မှာရှိနေတာဟာ ဒေါက်တာရီရီ မဟုတ်ဘူးဗျ.. သနားစရာကောင်းတဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းမလေး။ မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်း
လောက်အောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျနော့်ကိုမမေ့မလျော့ သံယောဇဉ်ကြီးရှာတဲ့ အပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်မလေး။ အငိုတိတ်ပီး ပျောက်သွားတဲ့ကစားစရာလေး ပြန်ရသလို မျက်ရည်တွေကြားထဲက
၀မ်းသာကြည်နူးနေရှာတဲ့ ပုံ.ပုံ.လေးရယ်လေ။ ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲပါးလေးအပ်လိုက် ပြန်ခွါပီး ကျနော့်မျက်လုံးတွေထဲစိုက်ကြည့်လိုက်နဲ. တကယ့်ပီဘိ ကလေးလေးပါလားကွယ်။ ရုတ်တရက်စိုက်
ကြည့်နေရင်း ကျနော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို သူ.နှုတ်ခမ်းတွေနဲ.ငုံပီး တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ယူလိုက်ပီး ပြန်ခွါသွားပြန်တယ်။ ကျနော့်ရင်ဘတ်ထဲဗြောင်းဆန်သွားတယ်ဗျာ။
ဖိုးသက်ကလေးက ငယ်ငယ်ကအတိုင်းပဲ တော်တော်အရိုင်းဆန်တယ်..ဟွန်း ...ပုံ.ကိုဟိုရေတွင်းမှာလေ.. ရှက်လို.သေတောင်သေချင်တယ် အဲ့ဒီနေ.က..သိလား..
ငါတမင်လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး ပုံ.လေးရာ..
သိဘူး..ပုံ.ခုအပျိုမဟုတ်တော့ဘူး..ပြန်လျော်ပေး .. (ရှက်ပြုံးလေးနဲ.ပြောရင်း လက်ဖ၀ါးလေးကျနော့်ရှေ.မှာဖြန်.ပြနေတယ်)
ပုံ.နဲ.တသက်လုံးတူတူနေပီးလျော်ပေးရမှာ..ခစ်ခစ်.. ဟေ့အေးနော်..ဖိုးသက်လေး ထွက်မပြေးရဘူး..ဒါပဲ..
ကျနော်ဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးဗျာ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ အကုန်ရှုပ်ကုန်ပီကော။
ရုတ်တရက် ကျနော့်လည်ပင်းကို ဆွဲခိုလိုက်တော့ကျနော် ငိုက်ကနဲပါသွားတယ်။ ကျနော့်နားရွက်နားကိုကပ်ပီး ထိုင်ရတာညောင်းလို. ခဏလှဲရအောင်ဆိုပီး နှီးချောဖျာလေးပေါ်ကိုဆွဲလှဲချလိုက်
တော့ကျနော်အလိုက်သင့်ပါသွားရော။ ကဲဗျာ! ၂ယောက်သားဖက်လျှက်ကလေးဘေးတိုက်လှဲအိပ်ထားမိပီ။ သူ.အသက်ရှူသံကပိုပိုပီးပြင်းလာတယ်ဆိုတာ မျက်နာချင်းကပ်နေတော့ကျနော်သိ
နေပီ။ သူ.ဆံပင်အရှည်ကြီးဆီက မွှေးပျံ.ပျံ.အနံ.လေးတွေက ကျနော့်နှာဝကိုချူနေတဲ့အပြင် ရင်ဘတ်ရှေ.မှာကပ်ထားတဲ့ ကျနော့်တထောင်ဆစ်နဲ. ထိကပ်မိနေတဲ့ သူ.နို.အိစက်စက်အထိ.. ..
အတွေ.တွေကြောင့် ကျနော့်သွေးတွေပွက်ပွက်ဆူလာပြန်ပီ။ သူ.ကိုယ်သူထိန်းလို.မရတော့ဘူးနေမှာဗျ။ ရေကာတာကျိုးပေါက်သွားသလိုပဲ.. ကျနော့်ကိုအတင်းဖက်ပီး နမ်းတယ်..နှုတ်ခမ်းချင်း
တပြွတ်ပြွတ်စုပ်တယ်..ကျနော့်ရင်ဘတ်ကို သူ.တဆတ်ဆတ်တုန်ခါနေတဲ့လက်ချောင်းတွေနဲ.ပွတ်ရင်း... ....
ပုံ.ပုံ. လေ.. ဖိုးသက်လေးကို ချစ်တယ်... တဲ့ဗျာ။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်းသွက်သွက်ခါသွားခဲ့ပီဗျ။ သူ.စွပ်ကျယ်ပါးပါးလေးကိုလှန်တင်လိုက်ပီး လရောင်အောင်မှာဖွေးကနဲလက်ကနဲပေါ်လာတဲ့ အိတွဲတွဲဖြစ်နေတဲ့ နို.ကြီး၂လုံးကို ကုန်းပီး.. ..
thinzar on Wed Mar 30, 2011 12:45 am
အိပ်စုံမှုန်မွှားနဲ.မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မှ သနပ်ခါးရေကျဲလေး ပွတ်ထားတဲ့ပြုံးရွှင်နေတဲ့ ပုံ.ပုံ.မျက်နာကိုမြင်ရတယ်။ အိပ်ပုတ်ကလေး!! ထတော့ရေချိုးမျက်နာသစ်ဆိုပီး ပြုံးစစလေးပြောတော့
မှလူးလဲထပီးရေတွင်းကိုတဘက်တွေသွားပွတ်တံတွေဆပ်ပြာခွက်တွေယူပီး ရေမိုးချိုးကိုယ်လက်သန်.စင်နေမိတယ်။ ရေတွင်းဘေးက အုတ်ကန်လေးကိုလှမ်းကြည့်ရင်း ညကကျနော်နဲ.ပုံ.ပုံ.
မီးကုန်ယမ်းကုန် ချစ်ခဲ့ကြတာပြန်ပုံဖော်နေမိတယ်။ ၃ချီလောက်ဆက်တိုက် -ိုး ခဲ့မိတာဗျ။ သူကတော့ဘယ်လိုနေမယ်မသိဘူး ကျနော်ကတော့ကိုယ်တွေလက်တွေနည်းနည်းညောင်းသလိုတောင်
့ဖြစ်နေတယ်။ ရေအေးအေးလောင်းချိုးလိုက်မှပြေသွားတယ်။ အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာတော့ အဘိုးလေးရဲ.အခန်းထဲကနေပုံ.ပုံ.ထွက်လာတာတွေ.တယ်။ ကျနော့်ကိုပြုံးပြရင်း ဘကြီးကတော့ပုံမှန်ဖြစ်
နေပါပီ..ဟိုမှာအရီးမေ နန်းကြီးသုတ်ပြင်ထားပေးတယ် သွားစားချေတော့..ပီးမှပုံ.ကိုဆေးရုံလာလိုက်ပို.နော် ဖိုးသက်လေး..ပုံ.ဟိုဖက်အိမ်မှာပြင်ဆင်ရင်းစောင့်နေမယ်လို.ပြောပီးသူ.အိမ်ဖက်ကို
မီးဖိုချောင်ထဲဝင်ပီးနန်းကြီးသုတ်ကိုဆာဆာနဲ.လွေးနေရင်း.. ကျနော်ဟိုတွေးဒီတွေး တွေးနေမိတယ်။
ပုံ.ပုံ.နဲ.အနီလေးက တစ်နေရာထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေတာဗျ။ တချိန်မဟုတ်တချိန်တော့ ကျနော်ပြဿနာတက်တော့မယ်ဆိုတာသေချာနေပီ။ အဲ့လိုတွေးပီးရင်မောလာလို.စားနေတဲ့နန်းကြီးသုတ်
တောင်အရသာမရှိတော့သလိုဖြစ်လာတယ်။ ဖူးးးးးးးးး!! စားလက်စကိုခပ်မြန်မြန်လက်စသတ်လိုက်ရင်း အ၀တ်အစားကောက်လဲ၊ စက်ဘီးလေးတွန်းပီး တဖက်ခြံကို ဘေးဖက်ခြံစည်းရိုးအလည်
မှာဖောက်ထားတဲ့အပေါက်ကနေတိုးဝင်ပီးတဖက်ခြံထဲရောက်သွားတယ်။ အိမ်ရှေ.မှာစက်ဘီးကိုထောင်ထားခဲ့ပီး အိမ်အောက်ထပ်(အိမ်က ဘွားလေးမေတို.အိမ်နဲ.ဆင်တူ၂ထပ်အိမ်ကြီး) ဧည့်
ခန်းထဲကိုဝင်ရင်းပုံ.ပုံ.ကိုရှာတော့မတွေ.ဘူးဗျ။ ဧည့်ခန်းနံ.ကပ်လျက် အခန်းရဲ.တံခါးဝနားရောက်တော့ စေ့ရုံစေ့ထားတဲ့ တံခါးကခပ်ဟဟလေးဖြစ်နေတော့ ဘာရယ်မဟုတ်အထဲကိုလှမ်းကြည့်
လိုက်တော့.. အလုပ်သွားဖို.ပြင်ဆင်နေတဲ့ပုံ.ပုံ.ဗျ။ ရင်ထဲမှာဗြောင်းဆန်သွားတယ်။
ဘေးတိုက်အနေအထားနဲ.မြင်နေရတာ.. ဆံပင်အရှည်ကြီးကိုလက်၂ဖက်နဲ.သေချာ ထုံးဖို.လုပ်နေတာဗျ။
ကိုယ်ပေါ်မှာက ဘရာပန်းရောင်လေးနဲ.အောက်ကပင်တီအနီရဲရဲလေး။ ဘရာကတအားသန်မာထွားကျိုင်းလွန်းတဲ့ သူ.နို.တွေကိုအတင်းစည်းနှောင်ထားရတော့ မနိုင်မနင်းဖြစ်နေဟန်ကလေး။
ပင်တီအနီရဲရဲလေးကလည်းတူတူပဲ..တင်းကားပီးအိစက်တဲ့ တင်ပါးပေါ်မှာတင်းကျပ်ကျပ်ကလေးဖြစ်နေတာဗျ။ ဆံထုံးထုံးဖို.လက်၂ဖက်ကိုမြှောက်ထားတော့ ရင်ကော့ကော့၊တင်ကော့ကော့
လေးဖြစ်နေတာအသည်းယားလိုက်တာဗျ။ မနေ.ညက၃ချီလောက် -ိုး ထားတာတောင် ကျနော့်အောက်ကကောင် ဒီလိုတွေမြင်နေရတော့ ပြန်ထောင်ထချင်လာပြန်ပီ။ မနေ.ညက အားရပါးရ
-ိုးတယ်ဆိုပေမယ့် ခုလိုလင်းလင်းချင်းချင်းမြင်ရတာမှမဟုတ်တာကိုးဗျ။ ကျနော့်စိတ်တွေပွက်ပွက်ဆူလာပီဗျ။ ပီးတော့ ဆံပင်ရှည်နဲ.မြင်နေကျ ပုံ.ပုံ.ကိုခုလို ဆံထုံးကစ်ကစ်လေးနဲ. အတွင်းခံ
လေးတွေနဲ.မြင်ရတော့ ဘယ်လိုမှနေလို.မရတော့ဘူး။ စိတ်ထိန်းလို.ကိုမရတော့လို. တံခါးကိုအသာလေးဆွဲဟပီး လှစ်ကနဲအခန်းထဲဝင်လိုက်တယ်။
ဟေးးးးး!! ဆိုပီး ဆရာဝန်မလေးရှက်ဝဲ၀ဲဖြစ်ပီး လက်တွေနဲ.ကယောင်ကတမ်း သူ.ကိုယ်လုံးလေးကိုဖုံးကွယ်ဖို.ကြိုးစားနေတယ်။
ကျနော်အနောက်ကိုလှည့်ပီး အိပ်ခန်းတံခါးကို ကလန်.ထိုးလိုက်တယ်။ ပီးတာနဲ.သူ.ဆီတစ်လှမ်းချင်းလှမ်းသွားလိုက်တော့ အနောက်ကိုဆုတ်ရင်း ငိုမဲ့မဲ့မျက်နာလေးနဲ.
ဖိုးသက်လေး... ပုံ.အလုပ်နောက်ကျတော့မယ်ဟာ... ညမှတွေ.မယ်လေနော် လို.တောင်းပန်ရှာတယ်...
ငါမြန်မြန်လုပ်မယ်လေနော်... ပုံ.ပုံ. ငါနင့်ကိုဒီလိုမြင်လိုက်ရတော့ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘူးဟာ... ဆိုပီးကျနော်ဝတ်ထားတဲ့ သော့တံဆိပ်ပုဆိုးအပြာကိုဖြေလျှော့ပီးချွတ်ချလိုက်တယ်။
အတွင်းခံဘောင်းဘီအောက်က ကျနော့်အငယ်ကောင်ကသောက်ရမ်းတင်းမာနေပီဗျ။ မထူးတော့ပါဘူးဆိုပီး ကျနော့်အတွင်းခံကိုပါချွတ်ချပလိုက်တယ်။ ကျနော့်ပုံစံကိုလည်းကြည့်ဦး ရှပ်အကျီ
အဖြူလက်ရှည်နဲ.အောက်ကဖင်တုံးလုံး -ီး ငေါက်တောက်နဲ. သူ.အနားကိုတရွေ.ရွေ.တိုးကပ်သွားနေတာလေ။ ငိုမဲ့မဲ့ မျက်နာလေး ပုံစံပြောင်းသွားပီဗျ။ ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးမမြင်ဖူးတော့ ကြောင်
ငေးငေးလေးကြည့်နေရှာတယ်။ နောက်ဆုံးအခန်းထောင့်က ကုတင်နားရောက်တော့ သူအနောက်ထပ်ဆုတ်လို.မရပဲပိတ်မိသွားပီ။ မာတင်းပြောင်ပီးနီရဲနေတဲ့ ကျနော့် -ီး ကြီးကလည်း သူ.ဗိုက်
အာကွာ... ဘယ်လိုလုပ်ဒီလောက်ကြီး ပြန်ဖြစ်လာတာလဲ.. ပုံ.ရင်တွေအရမ်းတုန်လာပီ.. ဖိုးသက်ကဆိုးတယ်ကွာ...
ဒါကြီးကို မြန်မြန်ပျော့သွားအောင် လုပ်ပေးနော်.. ပုံ.!!
စိတ်လှုပ်ရှားလို.အသံတွေတုန်နေတဲ့ဆရာဝန်မလေးကိုကျနော်ကုတင်ပေါ်ပွေ.ပီးတင်လိုက်ရင်း သူအတွင်းခံတွေကိုဆွဲချွတ်ချလိုက်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့.. .... ညည်းငြူသံတွေ...
ဆီးခုံချင်းတဖတ်ဖတ်ဆောင့်တဲ့အသံတွေ.. အင်းးးးးးးး အင်းးးးးးးးးးးး ဆိုပီးအော်သံတွေ ..အခန်းထဲမှာဆူညံလို.
.. ... .... ... ..
ဒီလိုနဲ.ကျနော်နဲ.နှစ်ပေါင်းများစွာကွဲကွာနေတဲ့ ပုံ.ပုံ.ဆိုတဲ့ငယ်သူငယ်ချင်းတို.ရဲ. အိပ်ယာပေါ်ကမုန်တိုင်းတွေ... ညဖက်ခြံထဲမှာချိန်းချိန်းပီး တွယ်ကြတဲ့ရင်ခုန်ဖွယ်ယာ ညတွေနဲ.လုံးချာလည်
လိုက်နေတော့တာပေါ့လေ။ ပုံ.ပုံ.ကတမျိုးဗျ...ညဖက်၃-၄ချီလောက်တွယ်ပီး အိပ်သွားကြ..မနက်အလုပ်သွားခါနီးတိုင်းသူ.အခန်းမှာထပ်အုပ်.. ဘယ်လိုလုပ်လုပ်ကျနော့်ကို ငိုမဲ့မဲ့မျက်နာလေး
နဲ.အလိုလိုက်ရှာတယ်။ အလွန်ဆုံး ဖိုးသက်လေးက လူဆိုးလေးကွာ ဆိုတာလောက်ပဲညည်းရှာတာဗျ။ အဲ့လိုနဲ.ကျနော်လည်း မသိလိုက်မသိဖာသာအဲ့ဒီ သာယာမှုနောက်လိုက်နေမိတာ ၄-၅
ရက်တောင်ကြာသွားတယ်။ ကျနော့်သူနာပြုဆရာမလေးဆီမရောက်ဖြစ်တာကြာပီဗျ။ သတိမရလို.တော့မဟုတ်ဘူး။ ပုံ.ပုံ.နဲ.ဖြစ်ဖြစ်ချင်းနေ.တွေမှာ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကစိတ်မလှုံမလဲဖြစ်နေ
တော့မျက်နာချင်းသွားမဆိုင်ရဲလို.။ ခုရက်နည်းနည်းကြာလာတော့ လွမ်းလည်းလွမ်းလာပီဗျ ကျနော့်ချစ်သူဆရာမလေးကို၊ပီးတော့ နည်းနည်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထိန်းနိုင်မယ်လို.ကိုယ့်ကိုကိုယ်
ယုံလာလို. ပုံ.ပုံ.ကိုမနက်အလုပ်ပို.ပေးပီးတာနဲ. အနီလေးတို.အိမ်ဖက်ကို စက်ဘီးလေးနဲ.နင်းပီးထွက်လာခဲ့တယ်။ တစ်ထပ်ပျဉ်ထောင်အိမ်လေးထဲရောက်သွားတော့ မနက်ခင်း၉နာရီလောက်
ရှိပီ။ မီးဖိုချောင်ထဲတန်းဝင်သွားတော့ ဆရာမလေးမနီနီချိုတစ်ယောက် ချက်ပြုတ်နေရာကို ကျနော့်ကိုလှမ်းကြည့်ပီး အံကြိတ်ရင်းတဖက်ကိုလှည့်မျက်နာလွှဲသွားတယ်။ ကျနော့်ရင်ထဲပူကနဲဖြစ်
ရပီဗျာ။ အစိမ်းကြော် အိုးထဲကအရွက်တွေကို ယောက်ပြားဇွန်းရှည်နဲ. တဂျစ်ဂျစ်မွှေနေရာက ထပ်ပီးလှည့်မကြည့်ဘူးဗျ။
အနီလေး ... လို.သူ.ဘေးမှာရပ်ရင်းတိုးတိုးလေးခေါ်လိုက်တော့... ဆတ်ကနဲလှည့်ကြည့်လာပီး ကျနော့်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်း အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ထားတယ်။
တခါက ဖန်ဂေါ်လီလုံးလေးတွေနဲ.တူတယ်လို.ကျနော်ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ မျက်လုံးဝိုင်းစက်စက်လေးတွေထဲမှာ မျက်ရည်တွေပြည့်နေတာမြင်နေရလို.ကျနော့်ရင်ထဲမှာဆို.နင့်လာပီဗျာ...မျက်ရည်တွေရစ်ဝဲနေတဲ့မျက်လုံးလေးတွေကလွှဲဖယ်သွားပီး အောက်နှုတ်ခမ်းကိုနာနာကျင်ကျင်ပြတ်ထွက်မတတ်ကိုက်နေပြန်တယ်။
ပေး ..အကိုဆက်ကြော်ပေးမယ်.. ဆိုပီး သူ.လက်ထဲကဇွန်းရှည်ကိုဆွဲယူပီး သူ.ကိုတွန်းဖယ်ရင်းခပ်သွက်သွက်ကလေးမွှေရင်း ဟင်းအိုးကိုမီးဖိုပေါ်ကချလိုက်တယ်။
ပီးမှအနီလေးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ မရှိတော့ဘူးဗျ။ ဟင်! ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့် ဆိုပီး ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်လိုက်တော့ ရေချိုးခန်းဖက်မှာရေကျသံတဗွမ်းဗွမ်းကြားရတာနဲ.ရေချိုး
ခန်းဖက်လိုက်ဝင်သွားမိတယ်။ အ၀တ်တွေဝတ်ထားလျှက်နဲ.ရေကန်ထဲက ရေတွေကိုခွက်နဲ.ခတ်ပီးခေါင်းပေါ်လောင်းချနေတဲ့ သူနာပြုဆရာမလေးကိုတွေ.လိုက်ရတော့ အံ့သြပီး .. အနီလေးဘာ
တွေလုပ်နေတာလဲလို.လှမ်းပြောလိုက်တော့ ရေလောင်းနေတာကိုရပ်ပီး ကျနော့်ဖက်ကိုလှည့်လာရင်းစိုက်ကြည့်နေပြန်ရောဗျ။
အ၀တ်တွေကရေတွေစိုရွှဲလို. ဆံပင်တွေကလည်းရေနဲ.ကပ်ပီး အချောင်းလိုက်ဖြစ်နေတယ်။ ၀တ်ထားတဲ့ထမီအနီရောင်လေးကလည်းရေစိုလို. အကွက်ကွက်တွေဖြစ်ကုန်ပီ။
ကျနော့်ကိုငေးကြည့်နေရင်းက.. ... ... ကလေးလေးလို တအီးအီးငိုရှိုက်ရင်း ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲကိုတိုးဝင်လာတော့ အလိုက်သင့်လေးဖက်ထားမိတယ်။
အကို.. အနီ.ကိုပစ်ပြေးသွားတာလားလို. ဟင့်ဟင့် !!
အကိုမအားလို.ပါ အနီကလေးရာ.. မငိုပါနဲ. တိတ်တိတ်!!
အီးဟီးဟီး Cry Cry Cry Cry Cry .. အကို..အနီသေသွားရင်ကောင်းမှာလို.တောင်တွေးမိတယ်... အကို.ကိုမခွဲနိုင်ဘူး.. နောက်တစ်ခါဒီလိုပစ်ထားပေးမယ့်အစား အနီ.ကိုအရင်သတ်သွား
အေးပါကွာ.. အကိုနောက်ကိုမပစ်ထားဘူး ..ဟုတ်ပီလားတိတ်တော့.. ရေတွေကလည်းရွှဲလို. တိတ်တိတ်
ခပ်တင်းတင်းလေးဖက်ထားရင်း ကျောလေးကိုပွတ်ပေးပီးနှစ်သိမ့်နေရတယ်။ ကျနော့်ရင်ထဲမှာလည်း နောင်တအရမ်းရလာတယ်ဗျာ။ သနားစရာကောင်းတဲ့ကျနော့်ချစ်သူဆရာမလေးရာ..
မင့်ချစ်သူကမင့်ကွယ်ရာမှာဖောက်ပြန်နေတာမသိရှာဘူးနော်။ ငိုတာတိတ်သွားပေမယ့် တဟင့်ဟင့်နဲ.ရှိုက်သံကမရပ်သေးဘူး။ တအားကြီးတစ်ယောက်နဲ.တစ်ယောက်ဖက်ထားရာကနေဆွဲခွါ
အနီကလေးပူတူတူး ...အအေးမိမှာစိုးရတယ်...ကဲမထူးတော့ပါဘူးလာလာ.. ဆိုပီးသူ.ကိုရေချိုးပေးဖို.ပြင်တယ်။
ကျနော့်ရှပ်အင်းကျီကိုချွတ်ပီး ရေချိုးခန်းထဲကကြိုးတန်းပေါ်ပစ်တင်လိုက်တယ်။ အောက်ကစွပ်ကျယ်နဲ.ပုဆိုးကိုတိုတိုပြင်ဝတ်လိုက်တယ်။ အနီ.မျက်နာပေါ်ဖုံးနေတဲ့ရေစိုဆံပင်လေးတွေကိုရှင်း
ပေးရင်း ငိုမဲ့မဲ့မျက်နာလေးကို မွှေးကြူလိုက်ရင်း သူ.ကိုယ်ပေါ်ကပ်နေတဲ့ရေစိုအ၀တ်တွေကိုဆွဲချွတ်ချနေမိတယ်။ ကျနော့်ချစ်သူလေးခမျာ ကလေးလေးလိုဘာမှမပြောရှာပဲငြိမ်ခံနေရှာတယ်။
ထမီချွတ်ချ၊ပင်တီတွေဘာရာတွေပါအကုန်ချွတ်ချလိုက်တော့ သူနာပြုဆရာမလေးခမျာ မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း ကိုယ်လုံးလှလှလေးနဲ.၀ါဝင်းဝင်းလေးပေါ့။ ရေကန်ထဲကရေတွေကိုဖလားခွက်နဲ.
ကျနော်ခပ်ယူပီး ချစ်သူလေးကိုစိမ်ပြေနပြေရေချိုးပေးနေတာကို မျက်လုံးလေးအ၀ိုင်းသားနဲ.တောင့်တောင့်လေးရပ်နေတယ်။ ရေ၄-၅ခွက်လောင်းပေး ပီးတာနဲ.မွှေးဆပ်ပြာတုံးကိုယူပီးသူ.ကိုယ်
လုံးလေးအနှံ.သေချာတိုက်ချွတ်ပေးနေတော့ မျက်လုံးလေးစုံမှိတ်ပီးငြိမ်နေပြန်ရော။ ဆပ်ပြာမြုပ်တွေ အဖွေးသားနဲ. အင်! အင်! ဆိုပီးရှိုက်နေသံကတော့ခုထိမရပ်သေးဘူးဗျ။ ကျနော်ကတော့
ဒူးထောက်ထိုင်ချပီး သူ.ပေါင်လုံးကစ်ကစ်လေးတွေ တင်ပါးအိစက်စက်လေးတွေ သူ.ေ-ာက်ဖုတ်လေးတွေကအစ အကျိုအကြားမကျန်အောင် သေချာဆပ်ပြာတိုက်ပေးနေမိတယ်။ နောက်ဆုံး
ခြေသလုံးသွယ်သွယ်လေးတွေပါမကျန်ဆပ်ပြာတိုက်ပေးပီးမှရေလောင်းချပီး ချိုးပေးပြန်တယ်။ အားလုံးစင်ကြယ်ပီး မွှေးပျံ.သွားတော့မှ... အ၀တ်ကြိုးတန်းပေါ်ကမွှေးပွတရုတ်တဘက်အဖြူ
အကြီးကြီးကိုယူပီး သူ.ကိုယ်လုံးလေးကိုသေချာပတ်ပေးရင်း အနေအထားမှန်ပီဆိုမှ ဆရာမလေးကိုကလေးလေးတွေကိုချီသလို ပွေ.ချီပီးသူအိပ်ခန်းဖက်ခေါ်လာခဲ့တယ်။
အိပ်ခန်းထဲရောက်တော့မှ တစ်ကိုယ်လုံးရေစက်တွေစင်သွားအောင် တဘက်နဲ.သုတ်ပေးနေတဲ့အထိ ဆရာမလေးက ဘာမှစကားမဆိုဘူးဗျ။
ဆံပင်ရှည်လေးတွေကိုပါခြောက်အောင်သုတ်တစ်ကိုယ်လုံးခြောက်လောက်ပီဆိုမှတောင့်တောင့်လေးရပ်နေတဲ့ ဆရာမလေးရဲ.ပါးဖောင်းဖောင်းလေး၂ခုကို ကျနော့်နှာခေါင်းနဲ.ဖိကပ်ပီးရှလူး
ဆိုပီး၃-၄ချက်မွှေးကြူလိုက်သေးတယ်။ ပီးမှာစွပ်ကျယ်လက်စက အဖြူလေးကိုခေါင်းကနေစွပ်ပီးဝတ်ပေး၊ ကုတင်ခြေရင်းတန်းပေါ်ကအိမ်နေရင်းထမီအ၀ါနုရောင်အပါးလေးကိုပါကျနော်ကိုယ်
တိုင်သေချာဝတ်ပေးတဲ့အထိ ကျနော့်ကိုမျက်စိအောက် ပျောက်သွားမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်တဲ့မျက်နာငယ်လေးနဲ.စိုက်စိုက်ကြည့်နေတာဗျာ။ သနားစရာလေးကွယ်။ အားလုံးပီးတော့မှဆံပင်ဖားလျား
နဲ.ချစ်သူလေးကိုပွေ.ချီပီး မီးဖိုချောင်ဖက်ခေါ်လာပြန်တယ်။ ထမင်းစားပွဲကကုလားထိုင်မှာထိုင်ခိုင်းထားပီး။ မီးဖိုနားမှာ ထမင်းဟင်းတွေဟိုလှန်ဒီလောလုပ်ရင်းရှာလိုက်တော့ ခုနကအစိမ်းကြော်
အနွမ်းတွေရယ်ထမင်းရယ်ပဲရှိတယ်ဗျ။ ဒါနဲ.ကြောင်အိမ်ဖွင့်ကြည့်တော့ ၀က်အူချောင်းအစိမ်းတွေတွေ.တာနဲ.ချက်ချင်းကောက်ကက်ကြော်လိုက်တယ်။
ဆိုပီးဇလုံလေးနဲ.၀က်အူချောင်းရယ်အစိမ်းကြော်အနွမ်းရယ်ထမင်းရယ်ရောနယ်ဖတ်ထားပီး သူ.ရှေ.မှာဝင်ထိုင်ရင်း ကျနော်ကိုယ်တိုင်လက်နဲ.ခွံ.ကျွေးတော့...
ထမင်း၂လုပ်လောက်ခွံ.ပီးတာနဲ.ရေနွေးကြမ်းလေးပါတိုက်ပေးတော့ ဂွတ်ဂွတ်ဆိုပီးမျိုချရှာတယ်။ အားလုံးစားသောက်ဆေးကြောပီးတော့မှ ဖျော့တော့တော့လေးဖြစ်နေတဲ့ ကောင်မလေးကို
ထပ်ပီးပွေ.ချီပီး အိပ်ခန်းထဲကိုခေါ်သွားပီးကုတင်ပေါ်တင်ပီး၂ယောက်အတူတူဖက်ထားရင်းလှဲလျောင်းနေတော့ ကျနော့်ရင်ဘတ်ပေါ်ပါးလေးအပ်ပီး အတင်းဖက်ထားရှာပြန်တယ်ဗျာ။
အကို... အနီနဲ.အကိုတို. ဟိုတခါပြောပြတဲ့ Of Mice&Men ၀တ္ထုထဲကလိုတကယ်တူတူနေမှာလားဟင်!!
အာ.. နေမှာပေါ့.. ယုန်ကလေးတွေနဲ.တူတဲ့ကလေးလေးတွေ အနီက အကို.ကိုမွေးပေးရမှာလေ.. နော့်.. လို.ပြောလိုက်တော့....
ဟုတ်..ဆိုပီး ငြိမ်ငြိမ်လေး ကျနော့်ရင်ဘတ်ပေါ်ပါးကလေးအပ်လို.ငြိမ်ကျသွားရှာပြန်တယ်။
အဲ့ဒီလိုတင်းတင်းလေးဖက်ထားရင်း အလွမ်းဖြေနေတဲ့ကျနော့်ကောင်မလေးကရုတ်တရက်ခေါင်းလေးထောင်ထလာပီး ကျနော့်ကိုငေးရင်း..
အကိုရာ.. အနီလေအကို.ကိုတအားလွမ်းလိုက်တာ..အနီ.ကိုနမ်းစမ်းပါကွာ လို.ခပ်ဆွေးဆွေးလေးပြောလာရော..
ပြွတ်ကနဲနေအောင်သူ.နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကိုဆွဲစုပ်ပီးနမ်းလိုက်ရင်း ကျနော့်လက်တွေက သူ.စွပ်ကျယ်လေးအောက်က အခုအခံမပါတဲ့နို.ကြီး၂လုံးကိုလျှိုနှိုက်ရင်းကစားပေးနေလိုက်တယ်။
နည်းနည်းလေးစုပ်နမ်းပီးမှနှုတ်ခမ်းချင်းပြန်ခွါလိုက်ရင်း သူ.စွပ်ကျယ်လေးကိုလှန်တင်လိုက်ပီး နို.သီးခေါင်းပန်းရောင်လေးတွေကိုလက်ညိုးလက်မနဲ.ညှပ်ပီးချေပေးလိုက်တော့မျက်တောင်လေး
အနီအကို.ကိုချစ်ချင်နေလားဟင်လို.မေးလိုက်တော့.. ဘာမှပြန်မပြောပဲ ခါးကထမီလေးကိုဖြေလျှော့ပီး ကျနော့်လက်ကို ကိုင်ပီးသူ.ပေါင်ကြားထဲကေ-ာက်ဖုတ်ကို ကိုင်ဖို.ရွေ.ပေးလိုက်
တော့ အနီ.ေ-ာက်ဖုတ်ကလေးက အရည်တွေစိမ့်ကျလို.စိုစိစိလေးဖြစ်နေတာသိလိုက်ရတယ်။ အကွဲကြောင်းလေးအတိုင်းမှန်းပီး ကျနော်လက်ချောင်းတွေနဲ.အထက်အောက်ပွတ်ပေးလိုက်တော့
ရှီး ...အကိုရယ်.. အနီနေလို.မရအောင် လွမ်းလိုက်တာ..အနီ.အဖုတ်လေးကိုခုပဲနမ်းပေးပါတော့ .. လို.တောင်းဆိုလာတယ်ဗျာ။ တကယ်ကိုသတ္တိရှိပီး ပွင့်လင်းတဲ့ကျနော့်သူနာပြုဆရာမ
.... .... ... ....
thinzar on Wed Mar 30, 2011 12:47 am
အနီ.ေ-ာက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးက ခပ်ပါးပါးညှပ်ထားတဲ့ အမွှေးနက်နက်လေးတွေအောက်မှာ နီရဲရဲဟစိစိလေးအရည်တွေစို.လို.။ ကျနော်ဘာလုပ်တော့မယ်ဆိုတာသိနေတဲ့ အနီကလှဲအိပ်နေ
ရာကနေခေါင်းထောင်ထပီး လှမ်းကြည့်ရင်းစိတ်လှုပ်ရှားနေရှာပီဗျ။(ကျနော်ေ-ာက်ဖုတ်လျှက်ပေးတိုင်း အနီကသေချာကြည့်ပီးကိုအရသာခံတတ်တယ်ဗျ.. အဲ့လိုဆိုရင်ပိုပီး သူ.အတွက်ကောင်းတယ်
လို.ပြောဖူးတယ်..ဘာကြောင့်လဲတော့ကျနော်လည်းမသိပါဘူး) ဒူးထောင်ပေါင်ကားထားတဲ့ အနီ.ပေါင်ကြားထဲကိုကျနော် ၀မ်းလျားမှောက်အိပ်လိုက်ရင်း အနီ.ပေါင်လုံးဖွေးဖွေးလေးတွေကိုသွားနဲ.
ဇတ်ဇတ်မြည်အောင်ဖွဖွရွရွလေး လျှောက်ကိုက်ပေးနေလိုက်တယ်။ ပီးမှပေါင်ဂွဆုံအရင်းနားလေး၂ဖက်ကို ကျနော့်နှုတ်ခမ်းနဲ.ထိကပ်ပီးနမ်းပေးနေလိုက်တယ်။ အဲ့လိုလေးတွေလုပ်ပေးနေတော့
အကို....အနီလေး စိတ်တအားယားလာပီကွယ် ...ဆိုတဲ့မောသံလေးကြားလိုက်ရတယ်။
ဟားးးးးးးးးးးးး!! အကိုရယ်... ... ဆိုပီးကျနော့်ဆံပင်တွေကိုလက်၂ဖက်နဲ.ဖမ်းဆုပ်ရင်းကော့တက်လာတယ်ဗျ။
ပလပ်ပလပ်အသံတွေမြည်အောင် သေသေချာချာလျှက်ပေးနေတော့ ကျနော့်သူနာပြုဆရာမလေးခမျာတွန်.လိမ်နေတာပဲပေါ့။ လျှက်တယ်၊ အစိလေးကိုလျှာဖျားလေးနဲ.ကစားပေးတယ်၊ဖိပီး
ဆော့ပေးတယ်။တဖြေးဖြေး သူ.ေ-ာက်ခေါင်းထဲမှာအရည်တွေပြည့်လျှံလာတော့ ကျနော့်လျှာကိုထိုးထည့်ပီးကစားလိုက်တိုင်း ပလောက်..ပလောက်ဆိုတဲ့ အသံတွေတောင်ထွက်လာတယ်။
လိင်ကိစ္စဆိုတာခင်ဗျားတို.သိတဲ့အတိုင်းပဲဗျ။ ၀ိုင်အရက်လိုပဲ..မလုပ်ပဲကြာကြာအောင့်ထားရပီး ပြန်လုပ်ပီဆိုရင်ဘာအရသာမှန်းပြောမပြတတ်အောင်ဆိမ့်ပီးကောင်းလွန်းတာကိုးဗျ။ မယုံရင်ခင်
ဗျားတို.စမ်းကြည့်လေ။ ခုကျနော်တောင်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး ချစ်သူ.ေ-ာက်ဖုတ်လေးလျှက်နေရတာကို ဇိမ်တွေ.နေတာဗျ။ ခုကျနော်လျှက်ပေးနေလို. ကျနော့်ဆရာမလေးကော့ပျံနေတာလေး
ကိုကကြည်နူးပီတိအရမ်းဖြစ်စေတယ်လေ။ ခပ်စူးစူးရှရှပျံ.လွှင့်နေတဲ့ေ-ာက်ရည်နံ.လေးတွေကကိုပိုပီးကျနော့်ကိုယစ်မူးသာယာစေတယ်ဗျ။ တခါတခါပါးစပ်ထဲပြည့်လာတတ်တဲ့ အနီ.ေ-ာက်ရည်
တွေကိုထွေးမထုတ်ပဲမျိုချပလိုက်တယ်ဗျာ။အင်း..ရွှံစရာမရှိပါဘူး..ချစ်တာကိုးဗျ။ (ဒါကိုကျနော်တို.၂ယောက်ပဲသိတဲ့စကားဝှက်နဲ.သာကူသောက်တယ်လို.ခေါ်တယ်ဗျ သာကူပျစ်ပျစ်နဲ.တော်
အကို....အကို... အနီလေးပီးချင်လာပီ.. လာလာ..လုပ်ပေးတော့...အကိုဆောင့်ပေးမှပီးချင်တာ..မြန်မြန်ဆိုပီး.. အော်သံထွက်လာမှ..
ကျနော်လည်း ပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်ပီး ဒူးထောက်ရင်း ကျနော့် -ီး ကိုသူ.ေ-ာက်ဖုတ်ဝမှတေ့လိုက်တယ်။ အပေါ်ကလှန်တင်ထားတဲ့ စွပ်ကျယ်အောက်က ဘယ်ဖက်နို.၀ါဝါ၀င်းဝင်းအိအိကြီးကို
လှမ်းပီးကိုင်ဆုတ်ချေရင်း ကျနော့်ညာလက်က အနီ.ေ-ာက်စိလေးကို စက်ဝိုင်းပုံဝေ့၀ိုက်ကစားပေး..အဲ့လိုလုပ်နေရင်းစိုရွှဲချောအိနေတဲ့ အနီ.ေ-ာက်ဖုတ်ကျပ်ကျပ်လေးထဲကျနော့် -ီး ကိုခါးကိုဆတ်
အားးး ဟားးးးးးးးးးးးး ကောင်းတယ်အကိုရယ်.. တဲ့
အကြိမ်ကြိမ် -ိုး ကျင့်ရှိပီးသားေ-ာက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးက စီးပိုင်ကျပ်တောက်နေတာပဲဗျ။ အနီ.ေ-ာက်ဖုတ်က အံ့သြစရာတစ်ချက်က ဘယ်အချိန် -ိုး -ိုး စစချင်းသွင်းရင်တော်တော်စီးပိုင်နေ
တာဗျ။ ဒါပေမယ့်ခုကျနော်ဖြေးဖြေးချင်း လမ်းကြောင်းမနေတော့ပဲ တစ်ချက်ထဲနဲ.အဆုံးထိ -ိုး သွင်းပလိုက်တာဗျ။ အိ..ဆိုတဲ့အသံလေးတစ်ချက်ထွက်လာတာပဲရှိတယ်။ နို.ကိုင်နေတာ၊ေ-ာက်စိ
ချေပေးနေတာ၊ အောက်ကေ-ာက်ဖုတ်ထဲ -ိုး သွင်းနေတာ ၃ခုပေါင်းလိုက်တော့ အနီတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်ဆိုတာ ချွေးစက်ကလေးတွေနဲ.ဖီးလ်တက်နေတဲ့မျက်နာလေးက ဖော်ပြနေ
တာဗျ။ တချက်ချင်း ဒစ်ထိပ်ဖူးနားထိဆွဲထုတ်လိုက် အဆုံးထိ -ိုး သွင်းလိုက် မှန်မှန်လေး ဆောင့်ပေးနေရင်းက...
အင်..ငင်....ငင်...အင်..ငင်..ငင်.. ဆိုပီးဆက်တိုက်အော်သံတွေထွက်လာတော့ သူပီးချင်လာမှန်းရိပ်မိလိုက်ပီ
ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်အနေအထားဖြစ်အောင်ကျနော်နေလိုက်ပီး လက်၂ဖက်လုံးကို ၀ါဝင်းပြောင်တင်းနေတဲ့ အနီ.နို.ကြီး၂လုံးစလုံးကိုသေချာတင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ရင်း အသားကုန်အရှိန်တင်ပီး
ဆောင့် -ိုး ပေးလိုက်တယ်။
ဖောက်ဖောက်!! ဖြောင်းဖြောင်း!! ရှီးးးးး... ဟားးးးးး!! အကိုရေ..ရေ...ရေ... အားးးးးးး!! အနီနေလို.မရတော့ဘူးးးးးး ...အင် ငင် ငင်...
အဲ့လိုတွေအော်ရင်း အနီကလေးခမျာပေါက်ကွဲပွင့်ထွက်ပီး အထွတ်အထိပ်ရောက်သွားရှာမှကျနော်အသားကုန်ဆောင့် -ိုးနေတာကိုရပ်လိုက်တယ်။ ကျနော့် -ီး ကြီးကတော့ သူ.အဖုတ်ဖောင်းအိ
အိလေးထဲမှာမာတင်းပီး တဆတ်ဆတ်ခါနေတုံး။ ကျနော်မပီးနိုင်သေးဘူးဗျ။ ဒါပေမယ့် အနီလေးခမျာခုမှပီးသွားရှာတယ်ဆိုတော့ ဆက်မ -ိုးသေးပဲခဏအနားပေးထားလိုက်တာလေ။ ခုသူ.အ
ဖုတ်နံရံတွေက ကျနော့် -ီး ကိုတဇိဇိညှစ်နေတာခံစားမိတယ်။ အနီ.ကိုယ်လုံးပေါ်ကို ကျနော်မှောက်ချလိုက်ပီး နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကိုစုပ်ပေးနေမိတယ်။ သူ.တစ်ကိုယ်လုံးကတော့ခုထိတဆတ်
အပေါ်ကနေဖိအိပ်ပီး အသာလေးပြန်ညော့ပီး တစ်ချက်ချင်းကျနော်ပြန်စ -ိုး ပြန်တယ်။ အနီကတော့မျက်လုံးစုံမှိတ်ပီး မှိန်းနေတယ်။
အဲ့လိုပြန် -ိုး နေရာက ကျနော်အနီ.ဘေးကိုလှိမ့်ချလိုက်ပီး အနီ.ကိုယ်လုံးလေးကိုကျနော့်ကိုကျောပေးနေလျှက် အနေအထားဖြစ်အောင်ပြင်လိုက်ပီး တင်ပါးအနောက်နားကနေ ကပ် -ိုးတဲ့အနေ
အထားနဲ.ဆက်ဆောင့်ပေးနေပြန်တယ်။ ဘေးတိုက်အိပ်နေတဲ့ အနီ.ဂျိုင်းအောက်ကနေလျှိုပီး နို.တစ်လုံးကိုလက်နဲ.ဆွဲဆွဲကိုင်ရင်း ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဆိုပီး ၃ချက်လောက်အားနဲ.ဆောင့် -ိုး လိုက်၊
ဒုတ်ဒုတ်ဆိုပီး ကျနော့် -ီး အရင်းနားလေးတင်ကပ်ဆောင့်လိုက်နဲ. ၁၅မိနစ်လောက်တင်လိုက်ချလိုက် -ိုးပေးနေမိတယ်။ -ိုး နေရင်းအနီ.ကိုလှမ်းစကားပြောတယ်...
အကို -ိုး နေတာကြာလို.အနီလေးခံနိုင်သေးလားလို.ပါ... ဟင်း..အင့်အင့်..ကောင်းလိုက်တာကွာ
အာ..အနီလေးက ၀ကိုမ၀သေးတာ...အကိုစိတ်ကြိုက်သာ -ိုး ဟုတ်ပီလား!! နက်ဖန်အနီအလုပ်ပိတ်တယ်.. ဒီနေ.တနေကုန်ချစ်မယ်လေနော့် အကို!!
အင့်...အင့်... ရှီးးးးးးး!! အေးပါ..ဆရာမလေးရာ..ခုလေးဖက်ထောက်ပေးတော့..အကိုပီးချင်သလိုဖြစ်လာတယ်...အကိုခဏချွတ်လိုက်မယ်နော်
ဟင့်အင်း..ဟင့်အင်း... အကို.ဟာကို အနီ.အဖုတ်လေးထဲကနေ အချွတ်ကိုမခံနိုင်တာ... ဒီတိုင်းပဲဖြေးဖြေးချင်းထပီးလေးဖက်ထောက်လိုက်မယ် ...မချွတ်နဲ.!!
အဲ့လိုနဲ.လေးဖက်ထောက်အနေအထားဖြစ်အောင်ေ-ာက်ဖုတ်နဲ. -ီး တပ်လျှက်ကဖြေးဖြေးချင်းထရင်းပြင်လိုက်တယ်။
ပီးမှာ အနီ.ဖင်တုံးဖွေးဖွေးအယ်အယ်လေး၂ခြမ်းကို သေချာဆုပ်ချေရင်း -ိုး ဆောင့်ပြန်တယ်။ အနီကတော့ တအင့်အင့်နဲ.တင်ပါးလေးကော့ပီး ခံနေရှာတယ်။ ၁၀ချက်လောက်ခပ်ပြင်းပြင်းလေး
အကို..အကို..အနီထပ်ပီး ကောင်းလာပြန်ပီ...ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ..ဆောင့်ပေး!!
အဲ့လိုအော်လာတော့ ကျနော်အားထပ်ထည့်ပီး တဖန်းဖန်းအသံတွေထွက်အောင်ကို ပိတ်ပိတ်ဆောင့်ပီး -ိုး ပေးနေမိတယ်။ ဆောင့်နေရင်းမှာကို အနီလေးက အင်းးးးးးးးးးအင်းးးးးးးး ဆိုပီးအော်
ရင်းနောက်တစ်ချီပီးသွားပြန်တယ်။ ကျနော်ခုထိမပီးသေးဘူးဗျ။ ကျနော့်အငယ်ကောင်က ပိုပီးတောင်မာတောင့်လာပီး ပေါက်ကွဲထွက်တော့မလားထင်နေရတယ်။ မထူးတော့ပါဘူးဆိုပီး စိတ်ကို
အသားကုန်အားတင်းရင်း အောက်ကိုငုံ.ကြည့်လိုက်တယ်။ လေးဖက်ထောက်ဖင်ကုန်းပေးထားတဲ့ အနီ.တင်ပါးကစိတ်ကိုအသားကုန်ကြွနေစေတဲ့ အပြင် အနီ.ကျောလည်လောက်ထိရောက်နေ
တဲ့ဆံပင်ရှည်နက်နက်ကလေးတွေကို ကျနော့်လက်တစ်ဖက်နဲ.ဆွဲရစ်သိမ်းပီး အနောက်ကိုတင်းတင်းဆွဲရင်း မြင်းပြိုင်တဲ့ ဂျော်ကီလိုမာန်သွင်းရင်း အားကုန်ဆောင့် -ိုး လိုက်တော့ ကျနော့် -ီး ထိပ်
ညာလက်က အနီ.ဆံပင်တွေကိုတင်းတင်းဆွဲ၊ဘယ်လက်က တင်ပါးအိအိကြီးတစ်ခြမ်းကိုဆွဲညှစ်ပီး ဖုတ်ဖုတ်၊ဖန်းဖန်း သံစုံမြည်အောင်ဆောင့်နေရင်း အနီ.ညည်းညူသံတွေ တအင့်အင့်
တွေကြားထဲက ကျနော့်သုတ်ရည်ပူပူတွေကို ဆရာမလေးရဲ.ကုန်းထားတဲ့ဖင်ဖွေးဖွေးကြီး၂ခုကြားထဲက စိုအိနေတဲ့ေ-ာက်ဖုတ်ထဲကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းပန်းထုတ်လိုက်မိတယ်။
ဟားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး !! အနီလေးးးးး.. အရမ်းကောင်းတယ်ကွာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာအဲ့ဒီနေ.ကဆက်တိုက်လေးချီလောက်ကျနော်ပီးအောင်နားနားပီးတွယ်မိတယ်ဗျာ။
ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အထိကျနော်ကမာန်မကျသေးဘူးဗျ။ကျနော့်ချစ်သူလေးခမျာတော့ မီးလောင်ထားတဲ့ နှင်းပန်းပွင့်ကလေးအတိုင်းနွမ်းရိသွားရှာတယ်။ ဘယ်နှစ်ခါပီးသလဲဆိုတော့ သိတောင်မသိ
တော့ပါဘူးအကိုရာတဲ့လေသံတောင်သဲ့သဲ့လေးပဲထွက်ရှာတော့တယ်ဗျ။ ပိုဇေရှင်ကလည်း စုံစိသွားအောင်ကို -ိုးကြတာပေါ့လေ။ ၂ယောက်သားချွေးသံတရွှဲရွှဲဖြစ်တဲ့အထိတဖုန်းဖုန်းကိုဆော်မိတာ
ပေါ့။ကြားထဲက ပြတ်လပ်နေတဲ့ရက်တွေအတွက်အတိုးချပီးချစ်ကြတာလေ။ ကျနော်ပထမတစ်ချီပီးသွားလို. ဆေးကြောသန်.စင်ပီးကုတင်ပေါ်ပြန်တက်ရင်းအနီလေးကိုဖက်ပီး မှိန်းနေတာဘာမှ
တောင်မကြာသေးဘူး။ အနီက ကျနော့် ခပ်ပျော့ပျော့ဖြစ်နေတဲ့ -ီး ကိုအသားကုန်တပြွတ်ပြွတ်ကုန်းစုပ်ပေးတော့ ဘာမှတောင်မကြာလိုက်ဘူး ပြန်တောင်လာတာပေါ့။ တောင်လာတာနဲ.အနီလေးက
ဒီတစ်ခါအနီ.အလှည့်ဆိုပီးကျနော့်ကိုတက်ခွ၊ ခါးလေးမတ်မတ်ထား၊တင်လေးကော့တော့တော့လုပ်ပီး အပေါ်ကတက် -ိုးတော့တာဗျ။ ခုမှတစ်ချီပီးထားတဲ့ ကျနော်ကသူ.စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါစေဆိုပီး
လွှတ်ထားပေးလိုက်တယ်။ သူ.ဖာသာ တဖတ်ဖတ်တက်ပီးဆောင့်နေတာကို ပက်လက်အိပ်ရင်းငြိမ်ငြိမ်လေးနေပေးလိုက်တယ်။ အငြိမ်မနေပဲခုန်ပေါက်နေတဲ့ နို.ထွားထွားဝါ၀ါဝင်းဝင်းလေး၂လုံးကို
လက်၂ဖက်နဲ.ဆုပ်ချေပေးရင်းတချက်တချက်ကော့ကော့ပေးနေလိုက်တယ်။ မျက်နာချင်းဆိုင်ကျနော့်ရင်ဘတ်ပေါ်လက်ထောက်ရင်း ခပ်ကြာကြာလေးဆောင့် -ိုးပီးမှ တစ်ပတ်လှည့်ပီး ကျောပေးလျှက်အနေထားကနေ တက်ပီးနောက်ပြန်ဆောင့် -ိုးပြန်တယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကျနော်ကပက်လက်အိပ်နေလျှက်ကနေ လက်ထောက်ပီးထရင်း အားနဲ.ပြန်ကော့ရင်းဆောင့်ပေးပြန်တယ်။
အနီလေးက တော်တော်လေးကိုမာန်ပါတယ်ဗျ။ သာမန်မိန်းမတွေလို တအိအိဆောင့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ သူ.အိုးလှလှလေး ကျနော့်ဆီးခုံနဲ.ထိမိသံ တဖန်းဖန်းအကျယ်ကြီးမြည်တဲ့အထိ တက်ပီး
ဆောင့် -ိုးနေရှာတာ။ သူအဲ့လိုတက်ပီး -ိုးနေတာခံနေရင်းကျနော်ပီးချင်လာမှ ဒူးထောက်လေးဖက်ကုန်းပုံစံနဲ.ပဲဆောင့် -ိုးရင်းပီးပလိုက်တာပေါ့။ အဲ့လိုနဲ.ကျနော်၃ချီမြောက် ပီးသွားပီး အနီနဲ.အတူ
နေတဲ့သူ.အဒေါ်ပြန်လာခါနီးမှ ပြန်မယ်ဆိုပီး ပြင်တော့.. အကိုမပြန်ခင်တစ်ခါလောက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးလားဆိုပီး အ၀တ်တွေဝတ်နေတဲ့ ကျနော့်ကိုချွဲပြန်တယ်။
ဒါနဲ.ကဲဆိုပီးဖက်တာနမ်းတာစုပ်တာတွေ ဘာမှထပ်မလုပ်တော့ပဲ ကုတင်ဇောင်းမှာ အနီ.ဖင်တစ်ပိုင်းကိုအောက်ကိုခပ်လျှောလျှောအနေအထားဖြစ်အောင် ပက်လက်အိပ်ခိုင်းထားပီး
ခပ်ကြမ်းကြမ်းမြန်မြန်လေး အားကုန်ဆောင့် -ိုး ရင်းလေးချီမြောက်ပီးခဲ့တယ်ဗျာ။ အဲ့လိုနဲ.ကျနော်အနီ.အိမ်ကပြန်လာတော့ ကျနော့်သူနာပြုဆရာမလေးခမျာ နှုတ်ဆက်အနမ်းလေးကိုတောင်
ထပီးမနမ်းနိုင်တော့လို. အိပ်ယာပေါ်မှာခွေနေတဲ့သူ.ကိုပဲကျနော်ချစ်စနိုးအနမ်းလေး ပေးပီးပြန်လာခဲ့တယ်။ ပြန်ခါနီးတောင် နက်ဖန်လည်း လာနော်..အကို..အနီလေးထပ်ချစ်ချင်သေးတယ်ဆို
ပီးထပ်ချိန်းခဲ့သေးတာဗျ။ ကျနော်လည်းအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ. ပုံ.ပုံ.ကိုတောင်သတိမထားနိုင်တော့ဘူး။ရေမိုးချိုးထမင်းစားပီး အိပ်ယာထဲဝင်ပီး ထိုးအိပ်ပလိုက်တာနောက်တနေ.မနက်မှပဲကြည်
ကြည်လင်လင်နိုးလာတော့တယ်။ ထလာပီးရေမိုးချိုးစားသောက်၊ အနီ.အိမ်ဖက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ စိတ်ကူးလေးတယဉ်ယဉ်နဲ.ပေါ့လေ။
ဒါပေမယ့် အနီလေးတို.အိမ်တံခါးမကြီးပိတ်ထားတော့ ရင်မောသွားတယ်။ ဒီနေ.သေချာချိန်းထားပါတယ်ဘာလို.အိမ်မှာမရှိတာလဲပေါ့။
ဆောရီးကွယ်။ အနီအိမ်ခဏပြန်စရာအကြောင်းပေါ်လာလို. ဟိုဖက်ကမ်းကိုသွားပီ။
အင်း.. ကျနော့်မှာတော့ စိတ်ကူးလေးတယဉ်ယဉ်နဲ.အချစ်နလံထမလို.စဉ်းစားလာတာမထူးပါဘူးဆိုပီး မြို.ထဲကကဗျာဆရာတွေထိုင်တတ်တဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖက်ထွက်လာပီးသူတို.နဲ.ပေါက်
ကရလေးဆယ်တွေထိုင်ပီးလေပစ်နေမိတယ်။ နေ.လည်ထမင်းစားချိန်ရောက်မှအပူရှိန်ပြင်းလာပီဆိုပီး အိမ်ဖက်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ အိမ်ရောက်တော့နေ.လည်စာစားသောက်ပီး အဘိုးကုတင်
ဘေးသွားထိုင်ရင်း ခြေဆုပ်လက်နယ်လုပ်ရင်း စကားပြောနေမိတယ်။
မယူရင်မင်းခုကိစ္စတွေဘယ်လိုရှင်းမလဲ မအေပေးလေးရ.. ငါအကုန်သိတယ်နော့် ... မင့်ဘွားလေးမေသာဘာမှမသိတာ..
.... .... ... .... .... ..... .... .... ..... .......
ငါတော့မြေးချွေးမတစ်ယောက်က နာ့စ်မလေး၊နောက်တစ်ယောက်က ဆရာဝန်မလေးရဦးမှာပေါ့.. ဟဲဟဲ.. ဖိုးသက်ရေ..၂ယောက်လုံးက သနားစရာလေးတွေနော့်!!
ဘယ်သူလဲဘကြီးရဲ.သနားစရာကောင်းတာ? ဆိုတဲ့အသံနဲ.အတူဆေးရုံက ပြန်လာဟန်တူတဲ့ပုံ.ပုံ.အခန်းထဲဝင်လာလို.ကျနော်တော်တော်လန်.ဖျန်.သွားတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း အဘိုးလေးကတော့ တဟားဟားအော်ရယ်ရင်း ရီရီရေ..နင့်ကောင်ကိုနင့်ဖာသာမေးကြည့်ပေတော့လို.ပြောရင်း အကြံအိုက်နေတဲ့ကျနော့်မျက်နာကိုကြည့်ရင်းသဘောတွေစွတ်ကျ
ပူလိုက်တာ..ကြံရည်အေးအေးလေးသောက်ချင်တယ်.. ဖိုးသက်ပုံ.ပုံ.ကိုကြံရည်လိုက်တိုက်.. ဆိုပီးစကားစလာတော့ကျနော်လည်းခေါင်းငြိမ့်လိုက်ရတယ်။
ပုံ.အိမ်ပြန်ပီးအ၀တ်လဲလိုက်မယ်..ဖိုးသက်လာခေါ်ဆိုပီးပြန်သွားတော့ ကျနော်လည်း အေးအေးဆိုပီးပြောလိုက်ရတာပေါ့။ သူထွက်သွားတော့မှ အဘိုးကုတင်ဘေးကနေထထွက်မလို.
ညိုချောဆရာဝန်မလေးနဲ.ဖြူဖွေးဖွေးနာ့စ်မလေး ကြိုက်ရာကိုရွေးတော့ ငါ့မြေးဟိုချီမင်းကြီးဆိုပီး အဘိုးကလှမ်းနောက်လိုက်သေးတယ်။
thinzar on Wed Mar 30, 2011 12:48 am
ဖိုးသက်လေး ပုံ.ကိုချစ်တယ်လို.မပြောသေးဘူးနော်.. တဲ့ကျနော့်ငယ်ငယ်ကကောင်မလေးတစ်ယောက် ကြံရည်ခွက်ထဲက ကြံရည်တွေကိုစုပ်သောက်ရင်းကျနော့်ကို မျက်လုံးတစ်ဖက်မှိတ်ပြ
ရင်းရယ်ကျဲကျဲမျက်နာလေးနဲ.လှမ်းမေးတယ်။ ကျနော်နဲ.ပုံ.ပုံ.တို.ရဲ.အိမ်တွေရဲ.မလှမ်းမကမ်းမှာ ဖွင့်ထားတဲ့လူရှင်းတဲ့ လမ်းဘေးကြံရည်ဆိုင်လေးရဲ. ခုံပုလေးမှာတူတူထိုင်နေကြတာဗျ။ အိမ်နေရင်း
ရှပ်အကျီအပါးလက်ရှည်အဖြူလေး ၀တ်ထားတဲ့ပုံ.ပုံ.ရဲ.ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်က ဘရာအနက်ကလေးကရေးရေးလေးမြင်နေရတယ်။ အောက်ကထမီ အနက်မှာပန်းပွင့်အပြာဖျော့ဖျော့လေးတွေပါတဲ့ထမီ
တပတ်နွမ်းလေးဝတ်ထားရင်းဘေးတိုက်ထိုင်နေတော့ စွင့်ကားတဲ့တင်ပါးအလှလေးကပေါ်လွှင်နေတာပေါ့။ နွေဒဏ်ပြင်းပြင်းကြောင့်ကြွေကျနေတဲ့ သစ်ရွက်အသေတွေက အအေးဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့
လမ်းကလေးပေါ်မှာလေတွေဝှေ.လိုက်တိုင်းရှပ်တိုက်ပြေးလွှားလို.။ ကျနော့်ရှေ.မှာထိုင်နေတဲ့ ဆံနွယ်ရှည်ရှည်လေးနဲ. ဆရာဝန်မလေးဟာ ပုဇွန်ဆီရောင်တောက်နေတဲ့ညနေခင်းထဲမှာ အင်မတန်
ဘာအင်းလဲ! လူလည်းဖွတ်ဖွတ်ကြေနေပီနော့်.. အကျင့်ပုတ်ကလေး.. ခုထိနိုင်စားပေးတုံး. လူများသားသမီးကို...ဟွန်း (နှုတ်ခမ်းကိုထော်ထော်ကလေးလုပ်ပီးမူနွဲ.နေပြန်တယ်)
ဘာ... ဖိုးသက်နော်.. အဲ့လိုမပြောပေးနဲ.၊ မချစ်ပဲ..နင်လုပ်သမျှငြိမ်ခံနေမလား.. ငါ့မှာတသက်လုံးနင့်ကိုဘယ်လောက်မျှော်နေခဲ့ရသလဲဆိုတာ..ငါပဲသိတယ်နော်..တော်ပီတော်ပီ..
အဲ့လိုပြောပီး ၀မ်းနည်းဟန်နဲ.မျက်ရည်လေးတလည်လည်နဲ.ဖြစ်သွားရှာတယ်။ ကျနော်သက်ပြင်းချလိုက်ရင်း.. ..
ပုံ. !! (ပြန်မထူးဘူးဗျ၊စိတ်ကောက်ပီး ခေါင်းကိုငုံ.ထားတယ်)
ဟောဗျာ.. ငါ့သူငယ်ချင်းလေးကလည်း.. ဒီမှာကြည့်..ငါပြောမယ်..ဟေး (ငိုမဲ့မဲ့မျက်နာလေးနဲ. မော့ကြည့်တယ်)
နင်အရမ်းလှတယ်..သိလား.. (မျက်နာလေးက လှစ်ကနဲပြုံးချိုသွားတယ်)
ငါလေငါ..နင့်ကို.. (ကျနော်ဘာပြောရမလဲဗျာ.. ကျနော်သူ.ကိုအရမ်းသနားတယ်၊ဒါပေမယ့် အနီ.ကိုကျနော်အသည်းပေါက်မတတ်ချစ်နေမိပီဗျ)
... .... .... .... .... ... ...... ..... ......
ငါကမိန်းမတန်မဲ့မရှက်မကြောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်.. နင်ကယောက်ျားဖြစ်ပီး ဘာလို.သတ္တိမရှိရတာလဲဟင်.. နင်ဟာခုထိငယ်ငယ်ကလိုပဲ.. အထက်စီးကနေအမြဲ..
... .... ... .... .... ..... ..... .... .... ....
ပုံ.ရာ.. ငါကလူဆိုးဆိုတာနင်ကြားတယ်မလား...နင်စိတ်ဆင်းရဲချင်နေတာလားဟာ .. ...(အံ့သြနေတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ.ကျနော့်ကိုမော့ကြည့်တယ်)
ဖိုးသက်.. နင်အဲ့လိုအူကြောင်ကြောင်တွေလျှောက်ပြောမနေနဲ. ငါကနင့်ငါနဲ.ကွဲသွားကထဲကနင် ဘယ်လိုနေတယ်ထိုင်တယ်ဆိုတာ အကုန်လုံးသိနေခဲ့တာ..
... ..... ..... .... .... .... ...
ဆိုပီးကြံရည်ဆိုင်လေးကနေရုတ်တရက်ထပြန်သွားတယ်။ တော်တော်လေးကိုရှက်သွားရှာတယ်နေမှာဗျ။ ကျနော်ကြံရည်ဖိုးရှင်းပီး ခပ်မြန်မြန်ပြေးလိုက်သွားတော့ ဆံပင်ရှည်လေးတွေတခါခါနဲ.
လှစ်ကနဲသူ.အိမ်ခြံဝင်းလေးထဲပြေးဝင်သွားတာတွေ.လိုက်ရလို.ကျနော်အတင်းပြေးလိုက်သွားတယ်။ အိမ်ထဲဝင်ပီးလိုက်ရှာတော့ မတွေ.တော့ဘူး။ မီးဖိုချောင်ထဲဝင်ကြည့်တော့လဲမတွေ.ဘူး။
သူ.အဖော်အဖြစ်တောက ခေါ်ထားတဲ့ခလေးမလေးက အန်တီရီရီ အပေါ်ထပ်မှာရှင့်လို. ချက်ပြုတ်နေရာကလှမ်းပြောလို. အိမ်အတွင်းဖက်လှေကားကနေ အပေါ်ထပ်ကိုကျနော်တက်ခဲ့တယ်။
အနားကိုကျနော်ရောက်သွားတော့ ဖတ်ကနဲမော့ကြည့်ရင်း ဆံပင်ရှည်တွေကြားထဲက မျက်ရည်တွေစိုရွှဲနေတဲ့ ပါးပြင်လေးကို ရှပ်လက်ရှည်ရဲ.လက်ဖျံနဲ.ပွတ်ပီးသုတ်နေရှာတယ်။ ကျနော့်ရင်ထဲ
မှာကျဉ်ကနဲခံစားလိုက်ရတယ်။ အို.. သနားစရာကျနော့်ပုံ.ပုံ.ကလေးရယ်။ ဒူးလေးပေါ်မေးတင်ပီးရှိုက်နေရှာတဲ့ ကျနော့်ဆရာဝန်မလေးဘေးမှာ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ရင်း ပွေ.ဖက်ထားလိုက်
တယ်။ သူ.ပါးပြင်ပေါ်ကမျက်ရည်တွေကို ကျနော့်မျက်နာနဲ.အပ်ထားရင်း ပါးချင်းပွတ်ပီး သုတ်ပေးနေမိတယ်။ အလုပ်ကပြန်လာစ ဆရာဝန်မလေးကိုယ်က ချွေးနဲ.ရောထားတဲ့ကိုယ်သင်းနံ.သင်း
ပျံ.ပျံ.လေးကိုရှူမိတော့ ကျနော်ယစ်မူးနေမိတယ်။ ကျနော်လေ..ကျနော်သူ.ကိုချစ်တယ်ဗျာကဲ.. လူတစ်ယောက်ဟာမိန်းမ၂ယောက်ကိုတစ်ပြိုက်နက်ထဲချစ်လို.မရဘူးလား။ အနီလေးကိုချစ်သ
လောက်မဟုတ်ပေမယ့် ပုံ.ပုံ.ကိုလည်းကျနော်ချစ်မိနေပီဗျ။ ကျနော်ရူးနေပီလားမသိဘူး။ တဘ၀လုံးကျနော့်ကို မျှော်နေခဲ့တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုကျနော်သနားလာရာကနေ ချစ်မိသွားပီဗျာ။
တသိမ့်သိမ့်တုန်နေတဲ့ကိုယ်လုံးလေးရုတ်တရက် အရှိုက်ရပ်ပီး အံ့သြ၀မ်းသာနေတဲ့မျက်နာလေးကျနော့်ကိုမော့ကြည့်လာတယ်။
ဖိုးသက်လေးရယ်... ပုံ.နင့်ကိုချစ်လို.သေတော့မယ်သိလား ... လို.အဖျားခတ်နေတဲ့အသံတိုးတိုးလေးနဲ.ပြောရင်းကျနော့်ကိုအတင်းဖက်လာတယ်။
ကျနော်သူ.ကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးနမ်းနေမိတယ်။ နဖူးဝင်းဝင်းလေး မွှေးပျံ.နေတဲ့ဆံနွယ်တွေ၊ မျက်ရည်တွေနဲ.အေးစက်တဲ့ပါးပြင်ဖောင်းဖောင်းအိအိလေး နောက်ဆုံးတဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ နှုတ်
ခမ်းစိုစိုလေး။ သူကလည်းမလျှော့သောထက်သန်မှုနဲ.ကျနော့် အနမ်းတွေကိုတုံ.ပြန်လာရှာတယ်။
အရင်ကအကြိမ်ကြိမ်အတွေ.ကြုံရှိခဲ့ပီးသားပေမယ့် ခုမှတရားဝင်ချစ်သူတွေလိုဖြစ်ရတော့ ၂ယောက်လုံးစိတ်တွေအရမ်းလှုပ်ရှားကုန်ပီဗျ။ ခါတိုင်းဆို ပုံ.ပုံ.က ကျနော်လုပ်သမျှမျက်လုံးလေး
ကလယ်ကလယ်နဲ.ငြိမ်ခံနေရှာပေမယ့် ခုတစ်ကြိမ်တော့မတူဘူးဗျ။ ဖိုးသက်လေး..ဖိုးသက်လေးလို.အဆက်မပြတ်ရေရွတ်ပီး ကျနော့်ကိုအဆက်မပြတ်နမ်းနေတယ်။ သူ.တကိုယ်လုံးတုန်နေ
ချစ်တယ်...မောင်ရယ်..ပုံ.မောင့်ကိုအရမ်းချစ်တယ် လို.တတွတ်တွတ်ပြောရင်း ကျနော့်ကို အရုပ်ကလေးကိုဆော့နေတဲ့ကလေးလေးလိုနမ်းလိုက်ဖက်လိုက်ရှုပ်ရှက်ခတ်အောင်အမျိုးမျိုး လုပ်နေတော့ ကျနော့်စိတ်တွေလှုပ်ရှားစပြုလာပီ။ ၀ရံတာမှာဘေးတိုက်လှဲအိပ်ရင်းဖက်ထားရာက
နေဇိုးကနဲဇတ်ကနဲပုံ.ပုံ.တစ်ယောက်ထထိုင်လိုက်ရင်း ကျနော့်ပုဆိုးကိုဖြေချလိုက်တော့ ကျနော်လန်.သွားတယ်။ ဘာလုပ်မလို.လဲဆိုတာ မျက်လုံးအကြောင်သားနဲ.ငေးကြည့်နေမိတယ်။ ရင်
တွေအရမ်းတုန်လာပီ။ အတွင်းခံဘောင်းဘီအောက်က ခပ်ဖောင်းဖောင်းဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့်အငယ်ကောင်ကို သူ.လက်ချောင်းပျော့ပျော့ရှည်ရှည်နဲ. ဖွဖွပွတ်ပေးနေပြန်ပီ။
ပုံ. အောက်မှာကောင်မလေးရှိတယ်နော်.. ပီးတော့ဝရံတာကြီးမှာ.. လို.ကျနော်လှမ်းပြောလိုက်တော့ အောက်နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ထားတဲ့ကျနော့်ဆရာဝန်မလေးကဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့
အမူအရာနဲ.ခေါင်းကလေးရမ်းခါပြတယ်။ ပီးတာနဲ.ကျနော့်အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ဇတ်ကနဲဆွဲချွတ်ပလိုက်တယ်။ သူချွတ်ရလွယ်အောင်ကျနော်တင်ပါးကြွပေးလိုက်တော့ ကျနော့်ခပ်မာမာဖြစ်
စပြုနေတဲ့ -ီး ကဖြောင်းကနဲထွက်ကျလာတယ်။ လက်ချောင်းသွယ်သွယ်လေးတွေက ကျနော့် -ီး ကိုကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်လိုက်တော့ ဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲဖြစ်သွားတယ်။ ပီးတော့မှဆံနွယ်ရှည်
လေးတွေကိုသေချာဘယ်လက်နဲ.သိမ်းလိုက်ရင်း ခေါင်းငုံ.ပီး ကျနော့် -ီး ကိုနှုတ်ခမ်းလေးစုပီး ဒစ်ထိပ်မှာတေ့ရင်းဖိချလိုက်တော့ ထုတ်ကနဲနေအောင်ဖြစ်သွားပီး ကျင်တက်သွားတယ်။သူ.ညာ
ဖက်လက်ကကျနော့် -ီး အရင်းကနေဂွင်းတိုက်သလိုဆော့ပေးနေသလို ခေါင်းလေးကိုနိမ့်လိုက်မြှင့်လိုက်လုပ်ရင်း ကျနော့် -ီး ကိုစုပ်ပေးနေတော့ ကျနော့်မှာကော့ကော့တက်လာအောင်ကောင်း
စပြုလာပီ။ အချိန်မရွေးလူမိနိုင်တဲ့နေရာမှာ ဒီလိုအလုပ်ခံနေရတော့ စိတ်ကလည်းပိုပီးလှုပ်ရှားစ ပြုလာပီဗျာ။ ကျနော့်လက်တစ်ဖက်က ပုံ.ထမီကိုလှမ်းကိုင်ပီးဖြေချလိုက်ရင်း အတွင်းခံဘောင်း
ဘီပေါ်ကနေသူ.ေ-ာက်ဖုတ်ကလေးကိုပွတ်ပေးနေပြန်တယ်။ စိုထိုင်းထိုင်းအရည်လေးတွေက အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုဖောက်ပီး စိမ့်ထွက်စပြုလာတော့မှ ပုံ.ပုံ.ပေါင်လုံးကိုအတင်းဆွဲပီး အောက်
ပိုင်းဗလာဖြစ်သွားအောင်ဆွဲချွတ်ရင်း ပက်လက်အိပ်ထားတဲ့ ကျနော့်မျက်နာကို ပြောင်းပြန်တက်ခွသလိုဖြစ်အောင် အတင်းဆွဲပီးအနေအထားကိုပြင်လိုက်တယ်။
၂ယောက်လုံးအောက်ပိုင်းဗလာနဲ.တစ်ယောက်က ကုန်းပီး -ီး စုပ်နေတဲ့အချိန်အောက်ကတစ်ယောက် က မျက်နာပေါ်ခွထားတဲ့တစ်ယောက်ကို ပက်လက်အိပ်ရင်းေ-ာက်ဖုတ်လျှက်နေ
ကြပီ။ 69 ပိုစေရှင်ပေါ့။ အောက်ကပုံ.ပုံ.ပါးစပ်ထဲကို ကျနော်ကော့ကော့ပီး ထိုးသွင်းနေတဲ့အချိန် အပေါ်ကလည်း ကျနော့်မျက်နာပေါ်ခွထားတဲ့ပုံ.ပုံ.ရဲ.ဖင်တုံးကြီး၂ခြမ်းကိုလက်၂ဖက်နဲ.အတင်း
ဖြဲရင်း မျက်နာပေါ်အပ်နေတဲ့သူ.ေ-ာက်ဖုတ်ကိုအသားကုန်လျှက်ပေးနေလိုက်တော့ေ-ာက်ရည်မွှေးမွှေးချိုချိုတွေက ကျနော့်မျက်နာပေါ်တစက်စက်ကျလာတဲ့အထိဖြစ်ကုန်ရော။ ဒီကြားထဲနွေ
လေရူးလေးက ၀ရံတာကိုဖြတ်တိုက်လာတော့ အေးကနဲအေးကနဲအရသာလေးနဲ. -ီး အစုပ်ခံရင်း အဖုတ်လျှက်နေရတာ တသက်မမေ့နိုင်မဲ့အတွေ.ကြုံမျိုးပေါ့ဗျာ။
Myanmar Sex on Thu Mar 31, 2011 1:29 am
တချို့နေရာတွေမှာ ဖတ်ရတာ အဆက်ဆက်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ် နည်းနည်းလောက် ပြင်လို့ရရင် ပြင်ပေးပါလား
cho cho aung on Wed Jun 01, 2011 9:45 pm
seik shay lat shay nae' pee dae'ahti phat tar .. zat lann ka pee lae' ma pee buu ... thu bal thu nae' ya twar dar lae' hin ...dlo zat thein ma shi buu mhan thi yin seik shay lat shay ma mphat par buu ......
cho cho aung